Information for Myanmar about Islam: ဘာသာခြားများ မေးခွန်းများအတွက် အဖြေများ (၁၅)
မဇင်သူမင်းနှင့် ဦးဌေးလွင်ဦးတို့ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆွေးနွေးချက်-
ယခင် ဆွေးနွေးချက်များ ဖတ်လိုလျှင်
နည်းနည်း စိတ်ဝင်စားတယ်- သမီး။ ပန်းတိုင် တစ်ခုကို ရောက်ဖူးပြီးမှ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဘို့ ပြန်ကြိုးစားရမှာလား-
ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီနေရာမှာ ဦးမေးခွန်းကို ကျွန်မနားမလည်ပါ။ ကျွန်မ သိတာက ပန်းတိုင် တစ်ခုကို ရောက်ဖူးပြီးမှ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဘို့ ပြန်ကြိုးစားတာ ဦးပါပဲ။ ပရမတ်ဘုရားဆီသွားမယ့် ဦးကမရောက်ခင် ပရမတ်ဘုရားကို ကြိုသိရမယ် မဟုတ် လား။
နောက်တစ်ခုက လမ်းညွှန် စာပေ မလိုအပ်ဘူး ဆိုရင် -သမီးတို့ ပြောပြောနေတဲ့ နိဗ္ဗာန် ရှိတယ်ဆိုတာကို သမီး ဘယ်လိုသိ ပါသလဲ။
ဟုတ်ကဲ့၊ စာအုပ်စာပေ မလိုအပ်ဘူး ပြောတာမဟုတ်ဘူး ဦး။ စာတွေမှာ မာယာများတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နား လည်ပုံခြင်းမတူဘဲ တလွဲနားလည်နေရင် ပန်းတိုင်မရောက်ဘဲ တခြားရောက်သွားမှာပါ။ ဒါကြောင့် လောကီမှာဆိုရင် ကျောင်းသားလေးတွေဟာ စာဖတ်ရုံနဲ့မပြီးဘူး အယူအဆမှန်ဖို့ ကျောင်းတက်ပြီး ဆရာ့ထံမှာ အယူအဆမှန်ကို သင်ယူကြ တယ်ဦး။ စာတွေရဲ့ မာယာများပုံက ဥပမာ- “Solution" ဆိုတဲ့စကားလုံးကို အဘိဓါန်လှန်လိုက်ရင် “ဖျော်ရည်”၊ “ဖြေရှင်း ချက်”၊ စသည်ဖြင့် တွေ့လိမ့်မယ်ဦး။ "Chemistry" ဘာသာမှာက “ဖျော်ရည်” လို့ ယူဆပေမယ့် "Maths" ဘာသာမှာက “ဖြေရှင်းချက်” လို့ ယူဆတယ်ဦး။ ဒီလိုယူဆသင့်တယ်ဆိုတာကို စာဖတ်ပြီး အဘိဓါန်ကြည့်နေရုံနဲ့ မသိဘဲ ဆရာဆီက သင်ယူမှ သိနိုင် ပါတယ် ဦး။
လောကုတ္တရာမှာလည်း စာဖတ်နေရုံနဲ့မပြီးဘူး အယူအဆမှန်ဖို့ ဆရာလိုတယ်ဦး။ ဂေါတမ၊ ယေရှု၊ မုဟမဒ္ဒတို့ မရှိတော့တဲ့ အတွက် သူတို့ရဲ့ တပည့်တွေဆီမှာ တပည့်ခံပြီး အယူအဆအမှန်ကို သင်ယူသင့်ပါတယ်ဦး။ ရှင်ဂေါတမရဲ့ ပန်းတိုင်ဟာ နာမ်တရား ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ရှင်ဂေါတမရဲ့ အယူအဆတွေ မှန်မမှန် စာအုပ်တွေနဲ့ စစ်လို့မရဘူး ဦး။ တကယ်မှန်မမှန် စစ် ချင်ရင် မိမိကိုယ်ကိုဘာမှမသိသေးတဲ့ အဖြူထည် ကလေးတစ်ယောက်လို နိမ့်ချပြီး ရှင်ဂေါတမရဲ့ တပည့်ဆရာတော် ပြော တဲ့အတိုင်း နားထောင်ကာ တသွေမတိမ်း လိုက်ကျင့်ရပါတယ်ဦး။ ကျင့်လို့မှန်တယ်ဆိုရင် ဦးရဲ့ခန္ဓာက ဦးကိုမှန်ကြောင်း သက်သေပြလိမ့်မယ် ဦး။ ဘာမှမထူးခြားရင် ဦး အချိန်ကုန်ခံနေစရာမလိုဘဲ တခါတည်းစွန့်ပစ်ရုံပဲ။ မကျင့်ကြည့်ဘဲ စာအုပ် တွေဖတ်ပြီး ယုတ္တိမရှိဘူး ပြောနေတာဟာ စာတွေအရမ်းဖတ်လို့ စာတွေရဲ့ မာယာနောက်လိုက်သွားပြီး အဖြူထည် မဟုတ် တော့ဘဲ ငါသိ၊ ငါတတ် တယ်ဆိုပြီး မာန်တက်ကာ အမှန်မမြင်တော့ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ် ဦး။
သမီးက ဥပဒေရဲ့ တန်ဘိုးကိုတောင် နားမလည်သေးဘဲ။ ကိုယ်တော်ဂေါတမက ဥပဒေ စည်းကမ်း လုံးဝ မထုတ်ပြန်ခဲ့ဘူး လား။
ဥပဒေကို တန်ဖိုးမထားတာမဟုတ်ဘူး ဦး၊ ဥပဒေနဲ့ လူတွေရဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေကို မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးပြောတာ ဦး။
ဖန်ဆင်းတာ မဖန်ဆင်းတာ ခဏထားပါ။ (သမီးကိုယ်တိုင်က ဦးမေးထားတဲ့ မေးခွန်း ၂ ခု သမီးချန်လှပ် ထားသေးလို့ ပြော တာပါ။ (၁) ဦးက ပါဠိ အပိုဒ်ပေးထားတယ်၊ သမီး ၀ါကျဆုံးအောင် မဖြေသေးဘူး၊
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်မဆိုလိုတာကို ဦးသဘောမပေါက်ပါ။ ဦးအရမ်း စိတ်ဝင်စားရင် ကျွန်မကို ဘာသာပြန်ပြပါ။ ကျွန်မ ဦးနဲ့မတူတဲ့ ရှုထောင့်ကနေ အသေအချာ ပြောနိုင်မယ်လို့ လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်။ ရှုထောင့်မျိုးစုံနဲ့ ကြည့်နိုင်တာက စာတွေရဲ့ မာယာပဲ လေ။ မာယာနဲ့ အချိန်ကုန်ခံမလို့လား။ ဥပမာ- “Solution” ကို ဦးက “ဖျော်ရည်” လို့ပြောလေ ကျွန်မက “ဖြေရှင်းချက်”လို့ ပြောလိုက်ရုံပဲပေါ့။ အဘိဓါန်အရ နှစ်ယောက်စလုံးမှန်နေမှာပဲ။
(၂) ဖန်ဆင်းရှင် မရှိပါဘူးလို့ ရှင်ဂေါတမက ပြောခဲ့တဲ့ အတိအကျ ကျမ်းချက်ကို တောင်းထားတယ်၊ သမီး မပေးသေးဘူး)။
သမီးက မရှိဘူးလို့ ပိဋကတ်အရ declare လုပ်နိုင်မလား၊ (သမီးက ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ ခံယူထားလို့ ပိဋကတ် အရလို့ ပြောတာ ပါ။)
ကျမ်းတွေကို ဦးက ကျွန်မထက်ပိုသိမှာပေါ့။ ရှင်ဂေါတမရဲ့ ဟောပြောဆုံးမမှုမှာ ဖန်ဆင်းရှင်မရှိဘူးလို့ အတိအကျ ကျမ်း ချက်မရှိပါ။ ဘာလို့မရှိတာလဲဆိုရင် ပြောဖို့မလိုလို့ကို မပြောတာပါ။ ဒီလောကမှာ မြဲတာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ ရှင်ဂေါတမရဲ့ သီအိုရီအရ ဒီလောကမှာ “ဖန်ဆင်းရှင်” ကိုရှာရင် မမြဲတဲ့ “ဖန်ဆင်းရှင်” ပဲရှိမှာပေါ့ ဦး။ အဲဒီ မမြဲတဲ့ “ဖန်ဆင်းရှင်” က “ဓါတ်” တွေပဲဦး၊ “ဓါတ်” တွေမှာ သူတို့ကိုယ်ပိုင် တန်ခိုးတွေရှိတော့ ဒါကို ကိုယ်တော် မုဟမဒ္ဒက “ပရမတ်ဘုရား” လို့ တင် စား ပြောနေတာလားလို့ ဦး ရဲ့ ကျမ်းတွေမှာ စမ်းစစ်ကြည့်လိုက်ပါအုံး။ ဒါကြောင့် “ကိုယ့်ကိုယ်ကို မသိရင် အလ္လာဟ် (ပရ မတ်ဘုရား)ကို မသိနိုင်ဘူး၊” လို့ပြောတာပေါ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိရင် “ဓါတ်” တွေ အကြောင်းသိပြီလေ။
ဒါပေမယ့် ဒီဆရာက လူတွေကို လူဘောင်တည်ဆောက်ဘို့ ဥပေဒကိုတော့ မသွန်သင်ဘူး။ ရဟန်းတွေကို ရဟန်းဘောင် တည်ဆောက်ဘို့ ဥပေဒတော့ သွန်သင်တယ်၊ အပြစ်ပေးမှု၊ ထုတ်ပါယ် မှုတွေ ရှိတယ်။- ဒီလိုမျိုး ဖြစ်နေတော့ သူက ရဟန်း ပါတီတစ်ခုရဲ့ ခေါင်းဆောင်မျှသာ ဖြစ်နေတယ်လေ။ သာမန်လူသားတွေကို ကြုံရင် ဆရာစားလိုက်တာမျိုးသာ ရှိပြီး - ဘာမှ တာဝန်မှ မယူခဲ့တာပဲ။
ဟုတ်ကဲ့ မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာ တရားတွေနဲ့ လူပီသအောင်နေဖို့ ဆုံးမပါတယ် ဦး။ ဘာမှ တာဝန်ယူနေစရာ မလိုပါ။ ဒီတရား လေးပါးနဲ့အညီနေရင် လူတွေရဲ့ ခန္ဓာက“ဓါတ်” တွေဟာ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ ဓါတ် နဲ့ သဟဇာတဖြစ်ကာ ရာသီ ဥတုကောင်း၊ မြေသြဇာကောင်း၊ အာဟာရကောင်းပြီး လူတွေအသက်ရှည် အနာကင်းကြမှာပေါ့။ အဲဒီတရား လေးပါးနဲ့ အညီမနေရင် ပြောင်းပြန် အကျိုးတွေ ခံစားရမှာပဲ။
-အစ္စလာမ်မှာ ဘယ်လိုတာဝန်ယူပါသလဲ သိပါရစေ။
ပြီးတော့ သူပြောနေတဲ့ သီလတွေကလည်း သူ့ရှေ့က ဗြဟ္မဏ တွေပြောနေတဲ့ သီလနဲ့ ဘာမှ မထူးပါဘူး။
ဟုတ်ပါတယ် သီလတွေကလည်း သူ့ရှေ့က ဗြဟ္မဏတွေနဲ့အတူတူပါပဲ။ မတူတဲ့အရာက ကျင့်ကြည့်မှသိမှာလေ။
လူကိုသတ်ရင် ထောင်ကျမယ်၊ သူတစ်ပါးကို စော်ကားရင် တုံ့ပြန်ခံရမယ်၊ သူများနိုင်ငံကို ကျူးကျော် ရင် တော်လှန်ခံရမယ်၊ သူတစ်ပါး ဘာသာကို စော်ကားရင် တန်ပြန်ခံရမယ် ဆိုတာကော သမီးတို့ ကို သွန်သင်ပေးတဲ့ အသိတရားထဲမှာ မပါဘူး လား။
ဟုတ်ကဲ့ တူသောအကျိုးကို ရမယ်လို့ သွန်သင်ပေးထားပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဦးတို့ဘာသာမှာရော သွန်သင်ပေးထားလို့လား၊ ဦး ရော တကယ်လိုက်နာ လို့လား။ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တိုင်းရော လိုက်နာလို့လား ဦး။
သမီးကို လူတစ်ဦးက အဓမ္မပြုကျင့်မယ်ဆိုရင် အသီးက လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ တွေကို ထိန်းပြီး သည်းခံ- ငြိမ်သက် နေမှာ လား။ ဒီလို မတရားမှုကို ဘယ်လို ခုခံရမယ် ဆိုတဲ့ အသိတရားကိုရော သင်ပေးဘို့ မလိုဘူးလား။
ဟုတ်ကဲ့ ငြိမ်သက် မနေပါဘူးဦး။ ခုခံရမယ် ဆိုတဲ့ အသိတရားက သင်ပေးမှ တတ်ရမှာမဟုတ်ပါ။ လူသားတိုင်း တတ်ြပီး သားပါ။ ဘုရား၊ ရဟန္တာတွေကလွဲလို့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ တွေဟာ လူတွေမှာ ပါလာပြီးသားမို့ အချိန်မရွေး အပါယ်ဘုံ တွေကို ရောက်အောင် အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မမှာလည်း ပုထုဇဉ်ထက်နည်းတဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေ ရှိပါ သေးတယ်။ ဒါကြောင့် လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ တွေထဲက အပါယ်ဘုံကို အကျိုးပေးစေတဲ့ အရာတွေကို ပယ်သတ်တဲ့ မဂ် ဥာဏ်ကို ရအောင်ကျင့်ကြံထားရတာပေါ့။
သမီးပြောနေတဲ့ စိတ်သတိကပ်ငြိနေတဲ့ အာရုံကို ဘယ်မှ ထားခဲ့သလဲ။ ဦးဆိုလိုတာ စိတ်ကို ကျင့်နေစဉ် တည်နေတဲ့ “အာရုံ” ကို ပြောတာနော်၊
စိတ်သတိကအမြဲထား မနေနိုင်ပါဘူး ဦး။ လောကီကိစ္စတွေ လုပ်နေစဉ်မှာ ငါးပါးသီလနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ မကောင်းတဲ့စိတ် တွေကိုပဲ သတိနဲ့ဆင်ခြင်ပါတယ် ဦး။
မတော်တဆ လင်သားနဲ့ ပျော်ပါးနေခိုက် သေဆုံးသွားရင် သမီးအယူအရ ဘယ်ကို ရောက်သွားမှာလဲ။
ဟုတ်ကဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ တွေထဲက အပါယ်ဘုံကို အကျိုးပေးစေတဲ့ အရာတွေကို ပယ်သတ်တဲ့ မဂ်ဥာဏ်ကို ရ အောင် ကျင့်ကြံထားပြီးမို့လို့ ဘယ်လိုအချိန်သေသေ အပါယ်မကျတော့ပါဘူး ဦး။
ငြင်းမရအောင် ရှိနေကြောင်း- declare လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ငြင်းမရအောင် “ပရမတ်ဘုရား” ရှိနေကြောင်း သက်သေပြပါဦး။
မျက်မြင်သက်သေနဲ့ ပြလို့မရတာက တရားမှ မ၀င်ဘဲ။ အမျိုးသား တစ်ဦးက အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို ပြောမယ်။- မင်းငါ့ကို လက်ထပ်ရင်- ဘုရင်မလေးလို ထားမယ်၊ သခင်မလေးလို ပြုစုမယ်- ဘာညာ ပေါ့။ ကောင်မလေးက သူပြောသမျှကို ယုံပြီး သူ့ကို တစ်ကယ်လက်တွေ့ ယူကြည့်လိုက်ရမှာလား။ မတော်တဆ အဲ့ဒီလို မဖြစ်လာရင် ဘယ်လို ပြန်လည်ကုစားရမှာလဲ။ တစ်ကယ်တမ်း အဲ့ဒီ လူကို အပြင်ဘန်းလေ့လာဘို့ လိုတယ်၊ သူ့စရိုက် သူ့အပြုအမူ၊ သူ့စိတ်ဓါတ်ကို အရင်အဦး လေ့လာဘို့ လိုတယ်- မဟုတ်ဘူးလား။ အဲ့ဒီ မြင်ရတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ အရင်လေ့လာလို့ ခိုင်လုံတိကျ စိတ်ချရမှ သူ့ရဲ့ မမြင်ရတဲ့ အ စိတ်အပိုင်းဘက်ကို ဆက်လက်ခြင်ဆင် ရမှာပေါ့။
ဟုတ်ကဲ့ လက်ထပ်ပေါင်းသင်းတဲ့ ကိစ္စမှာတော့ ဦးပြောသလို လေ့လာရမှာပေါ့။ (၁၅) ရက်၊ ရက် (၆ဝ) လောက် တရား စခန်း ဝင်တာ ဘဝပျက်မသွား ပါဘူး ဦး။
အတော်ကောင်းတဲ့ ဥပမာတွေပဲ။ ဒါပေမယ့် သမီးပေးတဲ့ ဥပမာတိုင်းမှာ အဲ့ဒီ စိတ်ကူး မဖြစ်မှီ သေချာတဲ့ ဆက်စပ်တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေက ရှိခဲ့တယ် ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ ပြီးတော့ ထွက်လာတဲ့ အကျိုးဆက်တွေဟာလည်း လူတွေ့လက်တွေ့ကို ပြ သနိုင်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်နေတယ်။ ဆိုတာကိုလည်း မမေ့ပါနဲ့။
စိတ်အစဉ်တွေဆိုတာ ဝိဥာဏ် ဆိုတဲ့ ဓါတ် ရဲ့ သဘောပါ ဦး။
ဒါတွေကို သမီးက ဗုဒ္ဓကျင့်စဉ် ဖြစ်တယ်လို့ ကင်ပွန်းတပ်ချင်တာလား။
ဟုတ်ကဲ့ ဝေဒနာနုပဿနာ ကမ္မဌာန်းပါ ဦး။
မှန်တာပေါ့။- ဆိုက်တင်တာ မတင်တာ မဆိုင်ပါဘူး။ လူတစ်ဦးဟာ လက်တွေ့ပြနိုင်တဲ့ ယုတ္တိ၊ ခိုင်မာတဲ့ သက်သေပြချက် ပေါ်မှာ ရပ်တည်နိုင်ရမှာပါ။ စိတ်ကူးကတော့ လူတိုင်း ယဉ်တတ်တာပေါ့။ စိတ်ကူး ယဉ်တိုင်း လက်တွေ့ သီအိုရီမှ မဟုတ် တာဘဲ။ အမှန်တရား ဆိုတာ၊ စကားနိုင်ရခြင်းနဲ့ မသက်ဆိုင် ဘူးလေ။ အမှန်တရားမှာ လက်တွေ့ ပြနိုင်တဲ့ သက်သေ မှတ် ကျောက် ရှိရမှာပေါ့- သမီး။
နာကျင်မှု ဝေဒနာတွေကို သီးခံပြီး မိမိခန္ဓာရဲ့ အမှန်တရားကို ရှာဖွေနေတာ စိတ်ကူးယဉ်တာမဟုတ်ပါဘူး ဦး။ လက်တွေ့ ပြ နိုင်တဲ့ သက်သေမှတ်ကျောက်က ဦး ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပါ။ ဒါကိုမယုံလို့ မကျင့်ရင် အမှန်တရားအစစ်ကို မတွေ့ဘဲနေမှာပေါ့။
ရှေ့တစ်မျိုး နောက်တစ်မျိုး ပြောတဲ့လူနဲ့ - ရှေ့နောက်ညီညွတ်အောင် ပြောသူ ဘယ်သူက ပိုမိုမှန်နိုင်ပါလဲ။ သမီး ဖြေကြည့်ပါ။
ရှေ့နောက်ညီညွတ်အောင် ပြောသူတွေရဲ့ အကွက်ကျကျ လိမ်လည်မှုတွေကြောင့် ဘဝပျက်ရသူတွေလည်း ရှိပါတယ် ဦး။
(၁) မြင်နိုင်တဲ့ အရာတွေမှာ လွဲမှားနေရင်- အဲ့ဒီ လူပြောတဲ့ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ၊ သူပြောတဲ့ ကျင့်စဉ်ဆိုတာ၊ သူပြောနေတဲ့ ဈာန် အဆင့်များ ဆိုတာ မှန်နိုင်မလား။
မြင်နိုင်တဲ့ အရာတွေဆိုတာ အပေါ်ယံပါ ဦး။ လူတိုင်းမြင်နိုင်တဲ့ အရာပဲမြင်ရင် သာမန်လူပဲပေါ့။
(၂) သို့မဟုတ် မြင်နိုင်တဲ့ အရာတွေမှာ သူပြောသမျှဟာ မှန်နေတယ်၊ ခေတ်တိုင်းနဲ့ ကိုက်ညီနေတယ်၊ ယုတ္တိရှိနေတယ် ဆို ရင်- အဲ့ဒီ ပြောတဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ အရာကို မှားတယ်လို့ ပြောနိုင်မလား- သမီး ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။
ယုတ္တိရှိတဲ့ လိမ်လည်မှုတွေကြောင့် ဘဝပျက်ရသူတွေလည်း ရှိပါတယ် ဦး။
စာတွေ လိမ်သလား မလိမ်ဘူးလား ဆိုတာ လည်း အဲ့ဒီ စာကို စီစစ်ရမှာပဲ။
ရှုထောင့်မျိုးစုံကနေ ဟိုတစ်မျိုး ဒီတစ်မျိုး တွေးလို့ရနေတဲ့ စာတွေကို ဘယ်လိုစစ်မှာလဲ ဦး။
မျက်ကန်းယုံ ယုံနေလို့တော့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ ဦးက ကုရ်အံကျမ်း၊ ပိဋကတ်ကျမ်း၊ သမ္မာကျမ်းကို သေချာအောင် လေ့လာ ခဲ့ပါ တယ်။ အဲ့ဒီ ကျမ်းတွေထဲမှာ ကုရ်အံကျမ်း က အတိကျ အသေချာဆုံး ဖြစ်နေတယ်၊ (သမီး ငြင်းနိုင်ရင် ငြင်းကြည့်ပေါ့။)
ကုရ်အံကျမ်း က အတိကျ အသေချာဆုံးအရာကို ပြောပြပါ ဦး။
သမီးရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မှုကို ရင့်ကျူးတာ သမီးရဲ့ အခွင့်အရေး ဖြစ်ပါတယ်။ မေးခွန်လေးတော့ မေးချင်တယ်။ သမီးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် က ဘယ်အစိတ်အပိုင်းက ကိန်းဆိုက်တာလဲ။ ခေါင်းကလား၊ လက်ကလား၊ ခြေထောက်ကလား၊ နှခေါင်းကလား-။ သမီး ဘယ်လို သက်သေပြမလဲ။
ဟုတ်ကဲ့ ခေါင်း၊ လက်၊ ခြေထောက်၊ နှခေါင်း ဆို တာလူတကာမြင်နိုင်တဲ့ ပညတ်တွေပါ။ ပရမတ်နဲ့ကြည့်ရင် ရုပ်၊ နာမ်ပဲ ရှိ တယ်။ နာမ်တရားဖြစ်တဲ့ သတိကိုရင့်သန်အောင်ကျင့်လို့ ရတဲ့ ဥာဏ်နဲ့ကိန်းဆိုက်တာပါ ဦး။
သမီးက copy right ရဲ့ သဘောကိုတောင် နားမလည်သေးဘဲ။ (ဥပဒေ ရဲ့ တန်ဘိုးကို မသွန် သင်ပေးတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲက အလေ့အကျင့်တွေကို သမီး ပါယ်သတ်သင့်ပါတယ်။) Copy Right (မူပိုင်ခွင့်) နဲ့ monopolize (မောင်ပိုင်စီးခြင်း) ဆိုတာကို နားလည်အောင် လေ့လာပါ။ Copy Right ဆိုတာ မူရင်းထုတ်လုပ်သူက-၊ အဲ့ဒီ အပေါ်မှာ အခြားသူတစ်ဦး ၀င်ရောက် ဖြည့် စွက်၊ လိုတိုးပိုလျှော့ လုပ်ပြီး မောင်ပိုင်စီးလို့ မရအောင် ကာကွယ်ခြင်း ဖြစ်တယ်။ သူ့ရဲ့ မူရင်းကို သူက အာမခံ- ယူထားခြင်း ဖြစ်တယ်။ မောင်ပိုင်စီးမှု ဆိုတာက မိမိရဲ့ အရာ မဟုတ်တဲ့ အရာတစ်ခုကို မိမိက အင်အားသုံး၊ ငွေကြေးသုံး၊ အာဏာ သုံးပြီး အပိုင်သိမ်းထားခြင်း ဖြစ်တယ်။ သမီးမှာ သမီးပြောနေတဲ့ ဘာသာရဲ့ သမ္မဒိဌိ၊ သမ္မာသင်္ကပ ဆိုတာ ရှိနိုင်ပါစေ။
သမ္မဒိဌိ၊ သမ္မာသင်္ကပ ဆိုတဲ့စကားလုံး က ကုရ်အံကျမ်း မှာပါသလားဆိုတာ သိပါရစေ ဦး
သမီးကိုယ်သမီး သိတယ် ပြောနေတယ်။ လူတိုင်းကလည်း ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်သိနေတာပဲ။ (အရူးတွေက လွဲပြီးပေါ့။) သမီးပြောနေတဲ့ မိမိကိုယ်မိမိ သိနေတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဘာကို ပြောနေတာလဲ။ အစ္စလာမ်မှာတော့ မိမိကိုယ်မိမိ သိ ခြင်းဆိုတာ မိမိရဲ့ ဇစ်မြစ်ကို သိခြင်းကိုပဲ ဆိုလိုတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ မိမိခန္ဓာ ရဲ့ မူလဇစ်မြစ် “ဓါတ်”တွေကို သိရုံတင်မက အဲဒီ ဓါတ်တွေ ရဲ့ မမြဲတဲ့သဘောကိုလည်း သိပါတယ်ဦး။
သမီး ရေလည်အောင် ပြန်မရှင်းသေးတဲ့ သုံးဆယ့် တစ်ဘုံကို မရောက်မှီ ဘယ်မှာ နေခဲ့သလဲ။ ဘာကြောင့် ဖြစ်လာသလဲ။ ဘာကြောင့် အဲ့ဒီ ဘုံမှာပဲ ဖြစ်ပြီး အခြားဘုံတစ်ခုခုမှာ မဖြစ်ရသလဲ။ ဆိုတာ သမီး ရေလည်သွားတဲ့နေ့မှ သမီး မိမိရဲ့ ဇစ်မြစ် အစစ်ကို သိမှာပါ။
ဦးနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ဦး ခန္ဓာရဲ့ မူလဇစ်မြစ် “ဓါတ်” တွေရဲ့ မမြဲတဲ့သဘောကိုတောင် မသိသေးတဲ့ဦးကို သုံးဆယ့်တစ်ဘုံ မရောက်မှီကို ရှင်းပြရင် ဦးနားလည်မည်မထင်ပါ။
ဥပဒေ မရှိဘူး ဆိုကတည်းက၊ စည်းကမ်းမရှိဘူး ဆိုတာကို ၀န်ခံခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပဒေတွေကို ကိုယ်တော် မုဟမဒ္ဒကိုယ်တိုင် လိုက်နာသလား ဦး
သမီး အဖြေအရ- အိမ်ထောင်ရှိနေခြင်းဟာ ဘာသာတရားအတွက် အနှောက်အယှက် တစ်ခု ဖြစ်နေမှာပေါ့။ ဒီတော့ မဇ္ဈိမ ပဋိပဋာ ဘယ်လို ဖြစ်ပါ့မလဲ။
မဇ္ဈိမပဋိပဋာဖြစ်အောင် ဦးအယူအဆအရ ဘယ်လိုလုပ်မလဲဦး။
စည်းကမ်းမရှိတဲ့ ဘာသာ၊ လူ့ဘောင်လောကနဲ့ လူ့သဘာဝကို တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ ဘာသာက လူသား အားလုံး အ တွက် ကိုယ်စားပြုတဲ့ ၀ါဒ (ဘာသာ) တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါ့မလား။ သမီး ဆင်ခြင်ကြည့်ပေါ့။
စည်းကမ်းတွေထားပင်မယ့် လိုက်နာမည့်သူ မရှိသလောက်ဖြစ်နေတဲ့ ဝါဒကိုရော လူသား အားလုံးအတွက် ကိုယ်စားပြုတဲ့ ၀ါဒ (ဘာသာ) တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါ့မလားလို့ ဦး ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။
အစိမ်းရောင်ခြယ်ထားတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖြေကြားပေးစေချင်ပါတယ်ဦး။
နည်းနည်း စိတ်ဝင်စားတယ်-သမီး။ ပန်းတိုင် တစ်ခုကို ရောက်ဖူးပြီးမှ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဘို့ ပြန်ကြိုးစားရမှာလား-
ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီနေရာမှာ ဦးမေးခွန်းကို ကျွန်မနားမလည်ပါ။ ကျွန်မ သိတာက ပန်းတိုင် တစ်ခုကို ရောက်ဖူးပြီးမှ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဘို့ ပြန်ကြိုးစားတာ ဦးပါပဲ။ ပရမတ်ဘုရားဆီသွားမယ့် ဦးက မရောက်ခင် ပရမတ်ဘုရားကို ကြိုသိရမယ် မဟုတ် လား။
ဒီအချက်မှာ သမီး နားလည်မှု မှားနေတာပါ။ သို့မဟုတ် သမီးနဲ့ ဦးကြားမှာ ခံစားမှု ကွဲလွဲနေတာပါ။ ဒီတော့- သမီးကို ဦး မေးကြည့်မယ်။ နိဗ္ဗာန် ဆိုတဲ့ အရာကို တစ်ကယ်ကိန်းဆိုက်ချင်ရင်- အဲ့ဒီ နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ အရာ တစ်ကယ်ရှိကြောင်း အရင် လက်ခံရမယ်။ အဲ့ဒီ နိဗ္ဗာန်ကို ကိန်းဆိုက်နိုင်တဲ့ နည်းဆိုတာလည်း တစ်ကယ်ရှိကြောင်း လက်ခံရမယ်။ အဲ့ဒီ နည်းလမ်း တွေဟာ ဘယ်ဆရာဆိုတာ ပွင့်ပေါ်သည် ဖြစ်စေ၊ မပွင့်ပေါ်သည် ဖြစ်စေ- လောကဓမ္မအရ ရှိနေတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်တယ်။ ဆိုတဲ့ အချက်ကို သမီး လက်ခံပါသလား။
နောက်တစ်ခုက လမ်းညွှန် စာပေ မလိုအပ်ဘူး ဆိုရင် -သမီးတို့ ပြောပြောနေတဲ့ နိဗ္ဗာန် ရှိတယ် ဆိုတာကို သမီး ဘယ်လို သိ ပါသလဲ။
ဟုတ်ကဲ့၊ စာအုပ်စာပေ မလိုအပ်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူး ဦး။ စာတွေမှာ မာယာများတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နား လည်ပုံခြင်း မတူဘဲ တလွဲနားလည်နေရင် ပန်းတိုင်မရောက်ဘဲ တခြားရောက်သွားမှာပါ။ ဒါကြောင့် လောကီမှာဆိုရင် ကျောင်းသားလေးတွေဟာ စာဖတ်ရုံနဲ့မပြီးဘူး အယူအဆမှန်ဖို့ ကျောင်းတက်ပြီး ဆရာ့ထံမှာ အယူအဆမှန်ကို သင်ယူကြ တယ် ဦး။ စာတွေရဲ့ မာယာများပုံက ဥပမာ- “Solution" ဆိုတဲ့စကားလုံးကို အဘိဓါန်လှန်လိုက်ရင် “ဖျော်ရည်”၊ “ဖြေရှင်း ချက်”၊ စသည်ဖြင့်တွေ့လိမ့်မယ်ဦး။ "Chemistry" ဘာသာမှာက “ဖျော်ရည်”လို့ ယူဆပေမယ့် "Maths" ဘာသာမှာက “ဖြေရှင်းချက်” လို့ ယူဆတယ် ဦး။ ဒီလိုယူဆသင့်တယ်ဆိုတာကို စာဖတ်ပြီး အဘိဓါန်ကြည့်နေရုံနဲ့ မသိဘဲ ဆရာဆီက သင်ယူမှ သိနိုင်ပါတယ် ဦး။
He makes solution the sum. ဆိုတဲ့ ၀ါကျနဲ့ He makes solution the lead. ဆိုတဲ့ ၀ါကျများကို အင်္ဂလိပ်စာတတ်သူ တိုင်း ဘာသာပြန်နိုင်တယ်။ နောက်က (the sum ဆိုတာနဲ့ the lead ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သိရင် ရှေ့က solution ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သိပါတယ်။ Maths တို့ Chemistry တို့ Physics တို့ သင်ဘူးနေစရာ မလိုပါ။ စာ မတောက်တစ်ခေါက် တတ် သူများကတော့ “မြန်မာအဆွေ ကုပ္မဏီ ဖိနပ် တစ်ရံ ၈ိ ၈ဲ” ဆိုတဲ့ ကြောငြာ်ကို “မြန်မာအ ငဆွ ကုပ္မဏီ ဖိနပ် တစ်ရံ ဂိ ဂဲ” လို့ ဖတ်မှတ်ပဲလေ။
လောကုတ္တရာမှာလည်း စာဖတ်နေရုံနဲ့မပြီးဘူး အယူအဆမှန်ဖို့ ဆရာလိုတယ်ဦး။ ဂေါတမ၊ ယေရှု၊ မုဟမဒ္ဒတို့ မရှိတော့တဲ့ အတွက် သူတို့ရဲ့ တပည့်တွေ ဆီမှာတပည့်ခံပြီး အယူအဆအမှန်ကို သင်ယူသင့်ပါတယ်ဦး။ ရှင်ဂေါတမရဲ့ ပန်းတိုင်ဟာ နာမ်တရားဖြစ်နေတဲ့အတွက် ရှင်ဂေါတမရဲ့ အယူအဆတွေ မှန်မမှန် စာအုပ်တွေနဲ့ စစ်လို့မရဘူး ဦး။ တကယ်မှန်မမှန် စစ် ချင်ရင် မိမိကိုယ်ကိုဘာမှမသိသေးတဲ့ အဖြူထည် ကလေးတစ်ယောက် လိုနိမ့်ချပြီး ရှင်ဂေါတမရဲ့ တပည့်ဆရာတော် ပြောတဲ့အတိုင်းနားထောင်ကာ တသွေမတိမ်း လိုက်ကျင့်ရပါတယ်ဦး။ ကျင့်လို့မှန်တယ်ဆိုရင် ဦးရဲ့ခန္ဓာ က ဦးကိုမှန်ကြောင်း သက်သေပြလိမ့်မယ် ဦး။ ဘာမှမထူးခြားရင် ဦး အချိန်ကုန်ခံနေစရာမလိုဘဲ တခါတည်းစွန့်ပစ်ရုံပဲ။ မကျင့်ကြည့်ဘဲ စာအုပ် တွေ ဖတ်ပြီး ယုတ္တိမရှိဘူး ပြောနေတာဟာ စာတွေအရမ်းဖတ်လို့ စာတွေရဲ့မာယာနောက်လိုက်သွားပြီး အဖြူထည် မဟုတ် တော့ဘဲ ငါသိ၊ ငါတတ် တယ်ဆိုပြီး မာန်တက်ကာ အမှန်မမြင်တော့ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ် ဦး။
အတော်လည်း နားဝေးပါလား သမီး။ သူသင်မယ့် ဟာတွေက “ရှေ့နောက် မညီဘဲ ထင်ရာ လျှောက်ပြောနေတဲ့ ကျမ်းစာ လာ အယူတွေပါ၊” လို့ သိနေတဲ့ ဦးက အဲ့ဒီလောက် ယုတ္တိမဲ့တဲ့ ကျမ်းစာနောက်ကို လိုက်နေတဲ့ ဘယ်ဆရာမျိုးဆီမှာ တ ပည့်ခံရဦးမှာလဲ။ သမီးကသာ ခန္ဓာ ခန္ဓာ လျှောက်ပြောနေတာပါ။ သမီးပြောနေတဲ့ ခန္ဓာ ခန္ဓာ ဆိုတဲ့ အယူအဆတွေက ယုတ္တိမဲ့ကျမ်းလာ ဖွင့်ဆိုချက်များ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဦး ကျမ်းချက်တွေကို သမီးကို ပေးခဲ့ပြီပြီလေ။ သမီးအနေနဲ့ ပိဋကတ်ကို လုံးဝ လက်မခံပါဘူးလို့ ဒီနေ့ထိ declare မလုပ်သေးဘူးနော်။ သမီးက ကျွန်မတော့ ပိဋကတ်ကို လုံးဝ လက်မခံဘူး၊ ကျွန် မ ခန္ဓာကိုယ်ပဲ ကျွန်မ လက်ခံမယ်လို့ declare လုပ်တဲ့နေ့-၊ သမီးနဲ့ ဦးနဲ့ သမီးပြောနေတဲ့ ခန္ဓာအကြောင်းကို ဆက်ဆွေး နွေးတာက သဘာဝ ပိုကျမယ်ထင်တယ်။ (နို့မဟုတ်ရင် ယုတ္တိမဲ့နေတဲ့ ကျမ်းစာ လာ အယူတွေနဲ့ အချိန်ကုန်ပါတယ် သမီး)။
ဥပဒေကိုတန်ဖိုးမထားတာမဟုတ်ဘူး ဦး၊ ဥပဒေနဲ့ လူတွေရဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေကို မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးပြောတာ ဦး။
သမီးပြောတဲ့ တရားတွေနဲ့ လောဘ ဒေါသ မောဟ ကို ပါယ်သတ်နိုင်သူနဲ့ ဥပဒေကိုကြောက်လို့ လောဘဒေါသမောဟ တွေကို ပါယ်သတ်နေရသူ လူဦးရေ ဘယ်ဘက်က ပိုများမယ်လို့ သမီး ထင်ပါသလဲ။
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်မဆိုလိုတာကို ဦးသဘောမပေါက်ပါ။ ဦးအရမ်းစိတ်ဝင်စားရင် ကျွန်မကို ဘာသာ ပြန်ပြပါ။ ကျွန်မ ဦးနဲ့မတူတဲ့ ရှုထောင့်ကနေ အသေအချာ ပြောနိုင်မယ်လို့ လုံးဝယုံကြည် ပါတယ်။ ရှုထောင့်မျိုးစုံနဲ့ ကြည့်နိုင်တာက စာတွေရဲ့ မာယာပဲ လေ။ မာယာနဲ့ အချိန်ကုန်ခံမလို့လား။ ဥပမာ- “Solution” ကို ဦးက “ဖျော်ရည်” လို့ပြောလေ ကျွန်မက “ဖြေရှင်းချက်” လို့ ပြောလိုက်ရုံပဲပေါ့။ အဘိဓါန်အရ နှစ်ယောက်စလုံးမှန်နေမှာပဲ။
သမီးကို အပေါ်အပိုဒ်မှာ solution နဲ့ ၀ါကျ နှစ်ခုပေးထားခဲ့ပါတယ်။ အဘိဓာန်အရ ဖွင့်ဆိုပေမယ့်- စာလုံးတိုင်းမှာ ယုတ္တိရှိ နေဘို့ လိုတယ်။ အခု မြန်မာနိုင်ငံ ပိဋကတ် ဘာသာပြန်အဖွဲ့ကြီးက ပြန်တဲ့ စာမူကိုပဲ ရေးပေးလိုက်မယ်။ သမီး ချေပကြည့်ပါ။ “ရဟန်းတို့ သင်တို့သည် အဖဘုရားမှ လာသော မိမိတို့၏ ကျက်စားရာအာရုံ၌ ကျက်စားကြကုန်လော့။ ရဟန်းတို့- အဖ ဘုရားမှလာသော ကျက်စားရာ အာရုံ၌ ကျက်စားကြကုန်သော သင်တို့အား အသက်အားဖြင့် တိုးပွားကုန်လတ္တံ့။ အဆင်း အားဖြင့် တိုးပွားကုန်လတ္တံ့။ ချမ်းသာအားဖြင့် တိုးပွားကုန်လတ္တံ့။ စည်းစိမ်အားဖြင့် တိုးပွားကုန်လတ္တံ့။ အားခွန်အားဖြင့် တိုး ပွားကုန်လတ္တံ့။” ကဲ သမီး ဒါကို ပြန်ပါ။ ကြိုက်သလိုပြန်ဖွင့်ပါ။
သမီးက မရှိဘူးလို့ ပိဋကတ် အရ declareလုပ်နိုင်မလား၊ (သမီးက ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ ခံယူထားလို့ ပိဋကတ် အရ လို့ ပြောတာပါ။)
ကျမ်းတွေကို ဦးက ကျွန်မထက်ပိုသိမှာပေါ့။ ရှင်ဂေါတမရဲ့ ဟောပြောဆုံးမမှုမှာ ဖန်ဆင်းရှင်မရှိဘူးလို့ အတိအကျ ကျမ်း ချက် မရှိပါ။ ဘာလို့မရှိတာလဲ ဆိုရင် ပြောဖို့မလိုလို့ကို မပြောတာပါ။ ဒီလောကမှာ မြဲတာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ ရှင်ဂေါတမရဲ့ သီအိုရီအရ ဒီလောကမှာ “ဖန်ဆင်းရှင်” ကိုရှာရင် မမြဲတဲ့ “ဖန်ဆင်းရှင်” ပဲရှိမှာပေါ့ ဦး။ အဲဒီ မမြဲတဲ့ “ဖန်ဆင်းရှင်” က “ဓါတ်” တွေပဲဦး၊ “ဓါတ်”တွေမှာသူတို့ကိုယ်ပိုင် တန်ခိုး တွေရှိတော့ ဒါကို ကိုယ်တော် မုဟမဒ္ဒက “ပရမတ်ဘုရား” လို့ တင် စားပြောနေတာလားလို့ ဦး ရဲ့ ကျမ်းတွေမှာ စမ်းစစ်ကြည့်လိုက်ပါအုံး။ ဒါကြောင့် “ကိုယ့်ကိုယ်ကို မသိရင် အလ္လာဟ် (ပရ မတ်ဘုရား) ကို မသိနိုင်ဘူး၊” လို့ပြောတာပေါ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိရင် “ဓါတ်” တွေ အကြောင်းသိပြီလေ။
သမီး ပြန်ရှင်းတဲ့ အပိုဒ်မှာ ဘာလို့ မရှိတာလဲ ဆိုရင်----- ဆိုပြီး ပြန်ရှင်းတဲ့ အပိုဒ်က သမီးရဲ့ အယူအဆလား၊ ကိုယ်တော် ဂေါတမရဲ့ အယူအဆလား။ ကိုယ်တော်ဂေါတမရဲ့ အယူအဆပါ ဆိုရင် အဲ့လို ရှင်းထားတဲ့ ကျမ်းချက်လေးကို ဦးကို ပေးပါ။
ဒါပေမယ့် ဒီဆရာက လူတွေကို လူဘောင်တည်ဆောက်ဘို့ ဥပေဒကိုတော့ မသွန်သင်ဘူး။ ရဟန်းတွေကို ရဟန်းဘောင် တည်ဆောက်ဘို့ ဥပေဒတော့ သွန်သင်တယ်၊ အပြစ်ပေးမှု၊ ထုတ်ပါယ် မှုတွေ ရှိတယ်။-ဒီလိုမျိုး ဖြစ်နေတော့ သူက ရဟန်း ပါ တီတစ်ခုရဲ့ ခေါင်းဆောင်မျှသာ ဖြစ်နေတယ် လေ။ သာမန်လူသားတွေကို ကြုံရင် ဆရာစားလိုက်တာမျိုးသာ ရှိပြီး - ဘာမှ တာဝန်မှ မယူခဲ့တာပဲ။
ဟုတ်ကဲ့ မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာ တရားတွေနဲ့ လူပီသအောင်နေဖို့ ဆုံးမပါတယ် ဦး။ ဘာမှ တာဝန်ယူနေစရာ မလိုပါ။ ဒီတရားလေးပါးနဲ့ အညီနေရင် လူတွေရဲ့ ခန္ဓာက“ဓါတ်” တွေဟာ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ ဓါတ် နဲ့ သဟဇာတဖြစ်ကာ ရာသီ ဥတုကောင်း၊ မြေသြဇာကောင်း၊ အာဟာရကောင်းပြီး လူတွေအသက်ရှည် အနာကင်းကြမှာပေါ့။ အဲဒီတရား လေးပါးနဲ့ အညီမနေရင် ပြောင်းပြန် အကျိုးတွေ ခံစားရမှာပဲ။
သမီးပြောနေတာတွေက ပညာရှိ ဆုံးမ စကားတွေပါ။ ဒါမျိုးကို တာအိုဝါဒမှာလည်း ပြောပါတယ်။ အနောက်တိုင်း ဖီလော် ဆော်ဖီကြီးတွေလည်း ပြောပါတယ်။ ပညာရှိ အဆုံးအမနဲ့ ဘာသာတရား ဆိုတာ မတူညီနိုင်ပါ။ ပညာရှိ အဆုံးအမများ ဆို တာ ခေတ်ကာလအလိုက် မှားယွင်းနိုင်တယ်။ မှားယွင်းလို့လည်း အဲ့ဒီ ပညာရှင်ကို အပြစ်ဆိုခွင့် မရှိပါ။ သူ့ခေတ်နဲ့သူ မို့- သူ့ခေတ်မှာ သူဟာ အကောင်းဆုံးလို့ပဲ ပြောခွင့်ရှိပါတယ်။ ဘာသာတရား ဆိုတာ အဆုံးအမ သက်သက် ဆိုရင် ကိုယ် တော် ဂေါတမက ဘာဖြစ်လို့ ပါရာဇိကံမှာ ရဟန်းတွေကို ဥပဒေ ထုတ်ပြန်ခဲ့တာလဲ။
အစ္စလာမ်မှာ ဘယ်လိုတာဝန်ယူပါသလဲ သိပါရစေ။
အစ္စလာမ်ဟာ လူတိုင်း အတွက် ဖြစ်တယ်။ ရဟန်းသံဃာ လူတန်းစား တစ်ရပ်ကို ဖန်တီးပြီး သီးသန့် ဥပဒေ မထားဘူး။ လူ အားလုံးအတွက် ဥပဒေဟာ တစ်ပြေးညီ ဖြစ်တယ်။ အစ္စလာမ်မှာ ဘ၀ ကိုမသတ်ရဘူး သွန်သင်တယ်။ လူကို မသတ်ရဘူး သွန်သင်တယ်။ လူလူချင်း စာနာထောက်ထားဘို့ ကရုဏာထားဘို့ မေတ္တာထားဘို့ သွန်သင်တယ်။ ဆုံးမပြောဆိုတယ်။ အဲ့ဒီ လိုမှ သွန်သင်ခြင်းကို ကရုမစိုက်ဘူး လူကို သတ်မယ်ဆိုရင် သူ့ကို လူသတ်မှုနဲ့ အပြစ်ပေးဘို့ ဥပဒေ ပြဌာန်းစေဘို့ သွန်သင် တယ်။ လူသတ်မှုမှာ လူသတ်သူကိုသာ တရားခံ အဖြစ်သတ်မှတ်ဘို့နဲ့- သူ့အမျိုး သူ့အဆွေ၊ သူ့မျိုးနွယ် ကို အကြောင်းပြပြီး လက်စားချေခြင်းကို တားမြစ်ထားတယ်။ (သမီး ကျမ်းချက်တွေ လိုချင်ရင် ပေးပါမယ်။)
မေထုံဖေါက်ပြန်မှု၊ မုဒိန်းမှု၊ ခိုးမှု၊ လိမ်လည်မှု တွေမှာလည်း ဒီအတိုင်းပဲ။
အစ္စလာမ်ဟာ လူတိုင်းအတွက်လို့ ပြောထားတဲ့အတွက် စစ်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ စစ်ဝန်ထမ်းတွေဟာ- စစ်ပွဲကို မိမိဘက်က မစတင်ရဘူး။ သူက ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှ မိမိဘက်က တော်လှန်ခွင့်ရှိတယ်။ ကျူးကျော်သူ ဖြစ်လင့် ကစား သူတို့ဘက်က စစ်ပြေငြိမ်းတာနဲ့ မိမိဘက်က ချက်ချင်း စစ်ပြေငြိမ်းမှုကို လက်ခံရမယ်။ မိမိကိုယ် စစ်တိုက်သူကိုသာ မိမိက ပြန်လည်တော်လှန်ခွင့် ရှိပြီး သူ့မိန်းမ၊ သူ့ကလေး၊ သူ့မိဘ၊ သူ့လူမျိုးကို တော်လှန်တိုက်ခိုက်ခွင့်မရှိဘူး။ ရန်သူဘက်က မိမိဘက်မှာ ခိုလှုံလာသူများကို မသတ်မဖြတ် စောင့်ရှောက်ထားရမယ်လို့ သွန်သင်တယ်။- (စစ်ဖြစ် နေလို့ ဒေါသထွက်နေ ခိုက်မှာ- အဲ့ဒီ ဥပဒေတွေကို လိုက်နာနာအောင်၊ စိတ်တည်ငြိမ်အောင် စစ်ပွဲတွင်း ဖြစ်လင့်ကစား- ဆွလာဟ် (မေတ္တာဓိဌာန် တည်မှု) မှာ ရှိနေစေဘို့လည်း ပိုက်စိပ်တိုက် စည်းမျည်းတွေနဲ့ ထိန်းပေးထားတယ်။
သိုင်းပြောင်းပြန်နဲ့ ကွန်ဖူးလောက်ပဲ ကွဲမှာပါ။ တစ်ကယ်အနှစ်ချုပ်က ကိုယ်ခံပညာ ဆိုတာမျိုး အတူတူပါပဲ သမီး။
လူကိုသတ်ရင် ထောင်ကျမယ်၊ သူတစ်ပါးကို စော်ကားရင် တုံ့ပြန်ခံရမယ်၊ သူများနိုင်ငံကို ကျူးကျော် ရင် တော်လှန်ခံရမယ်၊ သူတစ်ပါး ဘာသာကို စော်ကားရင် တန်ပြန်ခံရမယ် ဆိုတာကော သမီးတို့ ကို သွန်သင်ပေးတဲ့ အသိတရားထဲမှာ မပါဘူးလား။
ဟုတ်ကဲ့ တူသောအကျိုးကို ရမယ်လို့သွန်သင်ပေးထားပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဦးတို့ဘာသာမှာ ရောသွန် သင်ပေးထားလို့လား၊ ဦး ရောတကယ်လိုက်နာ လို့လား။ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တိုင်းရော လိုက်နာ လို့လား ဦး။
ဘယ်ဘာသာမှာမှ လူတိုင်းက မိမိစိတ်သဘောနဲ့ မလိုက်နာလို့ ဥပဒေနဲ့ ထိန်းထားတာပေါ့။ လူ ဟာ လူ ဖြစ်တယ်။ သူဟာ မိမိရဲ့ တစ်သီးပုဂ္ဂလ ဆန္ဒကို ပိုင်ဆိုင်တယ်။ ဆန္ဒအလျှောက် ၀ါသာနာကွဲပြား တယ်၊ အမူအကျင့် စိတ်နေသဘောထား ကွဲ ပြားတယ်။ ဒီတော့ ရဟန္တာရှိမယ်။ နိုင်ငံရေးသမားရှိမယ်၊ လယ်သမားရှိမယ်။ အနုပညာရှင်ရှိမယ်။- ဘယ်သူ ဖြစ်ဖြစ်မိမိ ၀ါသနာအလျှောက် မိမိ လုပ်ဆောင်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် မိမိရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို အကြောင်းပြပြီး သူတစ်ပါးကို စော် ကားခွင့် မရှိဘူး။ သူတစ်ပါးကို မစော်ကားဘို့ သွန်သင်တယ်။ သွန်သင်ချက်ကို ဖေါက်ဖျက်ရင် ဥပဒေအရ ဆုံးမဘို့ ပြဌာန်း ထားတယ်။- သမီးတို့ အယူအဆအရ နိုင်ငံတစ်ခု စစ်တပ်တစ်ခုကို ဘယ်လို ထူထောင်မလဲ။ နောက်ဆုံး စည်းကမ်းဥပဒေ ဘောင်မရှိရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ခုတောင် စနစ်တကျ လည်ပတ် ရပ်တည်နိုင်ပါ့မလား။
သမီးကို လူတစ်ဦးက အဓမ္မပြုကျင့်မယ်ဆိုရင် အသီးက လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ တွေကို ထိန်းပြီး သည်းခံ-ငြိမ်သက်နေမှာ လား။ ဒီလို မတရားမှုကို ဘယ်လို ခုခံရမယ် ဆိုတဲ့ အသိတရားကိုရော သင်ပေးဘို့ မလိုဘူးလား။
ဟုတ်ကဲ့ ငြိမ်သက် မနေပါဘူးဦး။ ခုခံရမယ်ဆိုတဲ့ အသိတရားက သင်ပေးမှ တတ်ရမှာမဟုတ်ပါ။ လူသားတိုင်း တတ်ြပီး သားပါ။ ဘုရား၊ ရဟန္တာတွေကလွဲလို့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ တွေဟာ လူတွေမှာပါလာပြီးသားမို့ အချိန်မရွေး အပါယ်ဘုံ တွေကို ရောက်အောင် အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မမှာလည်း ပုထုဇဉ်ထက်နည်းတဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ တွေရှိပါ သေးတယ်။ ဒါကြောင့် လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ တွေထဲက အပါယ်ဘုံကို အကျိုးပေးစေတဲ့ အရာတွေကို ပယ်သတ်တဲ့ မဂ် ဥာဏ်ကို ရအောင်ကျင့်ကြံထားရတာပေါ့။
ဦးထောက်ပြသလို ရှေ့နောက် မညီညွတ်တွေနဲ့ ပြောဆိုထားတဲ့ ကျမ်းစာကပြောတဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ အပါယ်ဘုံကို ထိုးချပြီး ငြိမ် သက်မနေဘူးဆိုတာ သမီးကိုယ်တိုင် အသိပါပဲ။ အဲ့တော့ စော်ကားခံရသူ မိမိက တရားကို ဖျက်ခြင်းမဟုတ်၊ သူတစ်ပါးက စော်ကားခြင်း ဖြစ်တယ်။ ဒီအခါ မိမိတရားလည်း မပျက်ရအောင် သူတစ်ပါးကိုလည်း တော်လှန်ကာကွယ်ပြီး ဖြစ်အောင် ဘယ်လို စီစဉ်မလဲ။ ဘယ်လို ခုခံမလဲ။
ပါရာဇိကံကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ ရဟန္တာမတွေလည်း အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတာပဲ။ ပြီးတော့ သမီးက ရဟန္တာတွေဟာ ဘယ်တော့မှ သူ့ အဆင့် မပျက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ သဘောကို အစဉ်ပြောနေတာတွေ ဦးတွေ့ရတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ရဟန္တာလည်း ဈာန်လျှောနိုင် တယ် ဆိုတာများ သမီး မေ့နေရော့သလား။
စိတ်သတိက အမြဲထားမနေနိုင်ပါဘူး ဦး။ လောကီကိစ္စတွေ လုပ်နေစဉ်မှာ ငါးပါးသီလနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ မကောင်းတဲ့စိတ် တွေကိုပဲ သတိနဲ့ဆင်ခြင်ပါတယ်ဦး။
ဒါတော့ မဆိုးပါဘူး- ဒါပေမယ့် သမီးရဲ့ ငါးပါးသီလနဲ့ ထမင်းဘယ်လို ချက်မလဲ။ ဆန်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ပိုးမွှားလေးတွေ သေ ကုန်မှာပေါ့။
ဟုတ်ကဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ တွေထဲက အပါယ်ဘုံကို အကျိုးပေးစေတဲ့ အရာတွေကို ပယ်သတ်တဲ့ မဂ် ဥာဏ်ကို ရ အောင်ကျင့်ကြံထားပြီးမို့လို့ ဘယ်လိုအချိန်သေသေ အပါယ်မကျတော့ပါဘူး ဦး။
နောက်ဆုံး ထွက်သက်မှာ သူ့ရဲ့ စိတ်ဇောက အရေးပါတယ်လို့ စိတ်သည်သာ ဦးဆောင်တယ်လို့ သမီးကိုယ်တိုင် ပြောခဲ့ တယ်နော်။ အဲ့လို ပျော်ပါးနေခိုင်- ရသ ဆိုတာကို မခံစားဘူး၊ သစ်တုံးလို နေမယ်လို့ သမီး အာမခံနိုင်သလား။
ငြင်းမရအောင်“ပရမတ်ဘုရား” ရှိနေကြောင်း သက်သေပြပါဦး။
ကုရ်အံကျမ်းဟာ မြင်တွေ့နိုင်တဲ့ အရာတိုင်းအတွက် လောကယုတ္တိရှိနေတယ်။ ချွင်းချက်တစ်ခု ပျက်ကွက်နေတာ မရှိဘူး။- အဲ့ဒါကို မငြင်းနိုင်ရင် အဲ့ဒီ ကုရ်အံကျမ်းကပြောတဲ့ မမြင်ရနိုင်တဲ့ အရာတိုင်းကို ဘယ်သူကမှ မငြင်းနိုင်ပါ။ တစ်ကယ်လို့ ကုရ်အံကျမ်းစာ ပြောတာက မြင်တွေ့နိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုကို ယုတ္တိမဲ့ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ရင်- အဲ့ဒီ ကျမ်းက ပြောထားတဲ့ မမြင်ရနိုင်တဲ့ အရာများအတွက် မသေချာတော့ဘူး ဆိုတာကို ၀န်ခံရပါတော့မယ်။ ဒီတော့ သမီးအနေနဲ့ ကုရ်အံကျမ်းစာ ထဲက မြင်ရနိုင်တဲ့အရာ တစ်ခုလောက်ကို ငြင်းကြည့်ပါ။ မငြင်းနိုင်ရင်တော့ ပရမတ်ဘုရားရှိကြောင်း သက်သေအဖြစ် ကုရ် အံကျမ်းစာက ခိုင်လုံပါတယ်။
မျက်မြင်သက်သေနဲ့ ပြလို့မရတာက တရားမှ မ၀င်ဘဲ။ အမျိုးသား တစ်ဦးက အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို ပြောမယ်။-မင်းငါ့ကို လက် ထပ်ရင်- ဘုရင်မလေးလို ထားမယ်၊ သခင်မလေးလို ပြုစုမယ်- ဘာညာ ပေါ့။ ကောင်မလေးက သူပြောသမျှကို ယုံပြီး သူ့ကို တစ်ကယ်လက်တွေ့ ယူကြည့်လိုက်ရမှာလား။ မတော်တဆ အဲ့ဒီလို မဖြစ်လာရင် ဘယ်လို ပြန်လည်ကုစားရမှာလဲ။ တစ်ကယ်တမ်း အဲ့ဒီ လူကို အပြင်ဘန်းလေ့လာဘို့ လိုတယ်၊ သူ့စရိုက် သူ့အပြုအမူ၊ သူ့စိတ်ဓါတ်ကို အရင်အဦး လေ့လာဘို့ လိုတယ်- မဟုတ်ဘူးလား။ အဲ့ဒီ မြင်ရတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ အရင်လေ့လာလို့ ခိုင်လုံတိကျ စိတ်ချရမှ သူ့ရဲ့ မမြင်ရတဲ့ အစိတ်အပိုင်းဘက်ကို ဆက်လက်ခြင်ဆင် ရမှာပေါ့။
ဟုတ်ကဲ့ လက်ထပ်ပေါင်းသင်းတဲ့ ကိစ္စမှာတော့ ဦးပြောသလို လေ့လာရမှာပေါ့။ (၁၅) ရက်၊ ရက် (၆ဝ) လောက် တရား စခန်းဝင်တာ ဘဝပျက်မသွားပါဘူး ဦး။
ရက်ပေါင်း ၆၀ လောက် အချိန်ကို ဖြုန်းတီးပျက်တာတော့- ဘယ်လောက်ထိ နစ်နာထိခိုက်ကြောင်း အချိန်ကို တန်ဘိုးထား သူတိုင်း သိပါတယ်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မှာ ဂျာမဏီက ရုရှကို ၀င်တိုက်တာ ဟစ်တလာ အမိန့်ပေးပြီးနောက် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တွေက ရက် ၆၀ နောက်ကျလို့ ရုရှား ဆောင်းရာသီကို သွားတိုးတယ်။ ဒီမှာ ဂျာမဏီ စရှုံးတယ်၊ အဲ့ဒီက စ စစ်ဦးကျိုးသွား ပြီး ဂျာမဏီကြီး တစ်ခုလုံးပါ စစ်ရှုံးခဲ့ ရတယ်။ (အချိန်ကို အလကား မဖြုန်းတီးဘို့ သမီးကို ဦး သတိပေးပါရစေ။)
ထားပါတော့ အဲ့ဒီ ဓါတ်တွေ ဆိုတာက ဘာအစီအစဉ် ဘာစနစ်ဇယားမှ မရှိဘဲ သူ့အလိုလို ဓါတ်တွေ ပေါင်းစပ်ပြီး လူပုံ သဏ္ဍာန်၊ နွားပုံသဏ္ဍာန်၊ ခွေးပုံသဏ္ဍာန်၊ ငှက်ပုံသဏ္ဍာန် အလိုလို ဖြစ်လာတယ်လို့ သမီးထင်ပါသလား။ သမီးအနေနဲ့- နာရီ တစ်လုံးကို တစ်စချင်း ဖြုတ်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ဆန်ကောထဲမှာ ထည့်ပြီး လှည့်ကြည့်ပါ။ သမီး မလှည့်နိုင်ရင် စက် တစ်ခုထဲမှာ ထည့်လှည့်ကြည့်ပါ။ အဲ့ဒီ နာရီမှာပါဝင်တဲ့ စက္ကန့်တံ၊ မီနစ်တံ၊ နာရီတံ၊ မှန်၊ စပရိန်၊ ဓါတ်ခဲ၊ ၀ါယာကြိုး၊ အားလုံး က သူ့နာရီ ပုံစံအတိုင်း စနစ်တကျ ပြန်ဝင်သွားမယ် ထင်ပါသလား။ လက်တွေ့ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ (အချိန်ကုန်တယ် ထင် ရင် သမီးရဲ့ သိပြီး ပထမဈာန် အဆင့်ဉာဏ်နဲ့ ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ပါ။)
သမီးပြောတဲ့ ဝေဒနာနုပဿနာ ကမ္မဌာန်း ဆိုတာ ဘယ်ကျမ်းက ပြောတာပါလဲ။
မှန်တာပေါ့။- ဆိုက်တင်တာ မတင်တာ မဆိုင်ပါဘူး။ လူတစ်ဦးဟာ လက်တွေ့ပြနိုင်တဲ့ ယုတ္တိ၊ ခိုင်မာတဲ့ သက်သေပြချက်ပေါ် မှာ ရပ်တည်နိုင်ရမှာပါ။ စိတ်ကူးကတော့ လူတိုင်း ယဉ်တတ်တာပေါ့။ စိတ်ကူး ယဉ်တိုင်း လက်တွေ့ သီအိုရီမှ မဟုတ်တာဘဲ။ အမှန်တရား ဆိုတာ၊ စကားနိုင်ရခြင်းနဲ့ မသက်ဆိုင် ဘူးလေ။ အမှန်တရားမှာ လက်တွေ့ ပြနိုင်တဲ့ သက်သေမှတ်ကျောက် ရှိ ရမှာပေါ့- သမီး။
နာကျင်မှု ဝေဒနာတွေကို သီးခံပြီး မိမိခန္ဓာရဲ့ အမှန်တရားကို ရှာဖွေနေတာ စိတ်ကူးယဉ်တာ မဟုတ်ပါဘူး ဦး။ လက်တွေ့ ပြ နိုင်တဲ့ သက်သေမှတ်ကျောက်က ဦး ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပါ။ ဒါကိုမယုံလို့ မကျင့်ရင် အမှန်တရားအစစ်ကို မတွေ့ဘဲနေမှာပေါ့။
အဲ့ဒါကိုယ်က သမီးကိုယ်တိုင် တစ်လွဲသင်ခံလိုက်ရတာပဲ။ လူတစ်ဦးမှာ ဖြစ်တည်တဲ့ ဝေဒနာ ဆိုတာ ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းက မဟုတ်ဘူး၊ အာရုံကြောကသာ ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒါကို ဦးနှောက်က ဆုံး ဖြတ်တယ်၊ စိတ်က ခံစားတယ်။ လက်ဖြတ်လိုက်ရသူ တစ်ဦးကို သမီးမေးကြည့်ပါ။ သူ့မှာ လက်မရှိတော့ဘူး- ဒါပေမယ့် သူဟာ လက်မလေးက နာတယ်၊ လက်သန်းလေးက ယားတယ်ဆိုတာကို ခံစားနေရဆဲပါ။ သမီးအနားမှာ အဲ့လို လက်ဖြတ်ထားသူ၊ ခြေဖြတ်ထားသူ တစ်စုံတစ်ယောက် ရှိရင် လက်တွေ့ မေးလိုက်ပါ။ အဲ့တော့ သမီးပြောနေတဲ့ ခန္ဓာဟာ လက်တွေ့ဆိုတဲ့ စကားက အကြီးအကျယ်မှားယွင်း နေပါ တယ်- သမီး။ အမှားထဲမှာ ဆက်လက် မရပ်တည်ဘို့ ဦး သတိပေးပါရစေ။
ရှေ့တစ်မျိုး နောက်တစ်မျိုး ပြောတဲ့လူနဲ့ - ရှေ့နောက်ညီညွတ်အောင် ပြောသူ ဘယ်သူက ပိုမိုမှန် နိုင်ပါလဲ။ သမီး ဖြေကြည့်ပါ။
ရှေ့နောက်ညီညွတ်အောင် ပြောသူတွေရဲ့ အကွက်ကျကျ လိမ်လည်မှုတွေကြောင့် ဘဝပျက်ရ သူတွေလည်း ရှိပါတယ် ဦး။
ရှေ့နောက် ညီညွတ်အောင် ပြောဆိုသွန်သင်ပြီး တိကျတဲ့ဥပဒေတွေကို ကိုင်ထားသူတစ်ဦးနဲ့ ရှေ့နောက် မညီမညွတ် ထင် ရာလျှောက်ပြော- ဟိုတစ်မျိုး ဒီတစ်မျိုးပြောပြီး ဘာဥပဒေမှမရှိ ပရမ်းပတာ လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်နေသူ တစ်ဦး- အဲ့ဒီ နှစ်ဦးမှာ ဘယ်သူက ပိုပြီး လူသားတွေကို ဘ၀ပျက်အောင် လုပ်မလဲဆိုတာ ကမ္ဘာ့ပညာရှင်တိုင်းကို မေးကြည့်လိုက်ပါ။ သို့မဟုတ် သမီးမှာ အဖေရှိတယ်- အဲ့ဒီ အဖေက ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မယ်၊ စကားကို တည်တည်မှတ်မှတ်ပြောမယ်၊ စည်းကမ်း ဘောင် စနစ်တကျရှိမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီလိုအဖေမျိုးနဲ့- ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှု မရှိဘူး၊ စကားကို ဟိုတစ်မျိုးဒီတစ်မျိုး ပြော မယ်- ဘာစည်းကမ်းမှလည်း မရှိဘူးဆိုရင် အဲ့လို အဖေမျိုး အဖေနှစ်မျိုးနှစ်စားထဲက ဘယ်အဖေမျိုးကို သမီးလိုချင်ပါသလဲ။
(၁) မြင်နိုင်တဲ့ အရာတွေမှာ လွဲမှားနေရင်- အဲ့ဒီ လူပြောတဲ့ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ၊ သူပြောတဲ့ ကျင့်စဉ်ဆိုတာ၊ သူပြောနေတဲ့ ဈာန် အ ဆင့်များ ဆိုတာ မှန်နိုင်မလား။
မြင်နိုင်တဲ့ အရာတွေဆိုတာ အပေါ်ယံပါ ဦး။ လူတိုင်းမြင်နိုင်တဲ့အရာပဲမြင်ရင် သာမန်လူပဲပေါ့။
အပေါ်ယံက တောင် ပုပ်နေရင် မမြင်နိုင်တဲ့ အထဲကို သမီး ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်မလဲ။ လူတွေဟာ အဆင်ြ့မင့်လူတွေ ဖြစ်လာ ဘို့ လူသာမန်ဘ၀က စတင်ရတာပါ။ အဆောက်အဦး တိုက်တစ်ခု ဆောက်တာမှာ အောက်ခြေကတည်းက ချစားနေရင်၊ ယိုင်နဲ့နေရင်၊ သေချာမှုမရှိရင်- အဲ့ဒီ အဆောက်အဦး တိုက်တာကို ဘယ်လိုလုပ် အမြင့်ထိ တက်နိုင်မလဲ။ တက်နိုင်တယ်ဘဲ ထားဦး စိတ်ချ လက်ချ အာမခံချက် ရှိပါ့မလား။
(၂) သို့မဟုတ် မြင်နိုင်တဲ့ အရာတွေမှာ သူပြောသမျှဟာ မှန်နေတယ်၊ ခေတ်တိုင်းနဲ့ ကိုက်ညီနေတယ်၊ ယုတ္တိရှိနေတယ် ဆို ရင်- အဲ့ဒီပြောတဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့အရာကို မှားတယ်လို့ ပြောနိုင်မလား- သမီး ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။
လိမ်လည်မှု ဆိုတာကိုယ်က ယုတ္တိမရှိလို့ ဆိုတာကို သမီး မသိလေရော့သလား။ မျက်လုံးစုံမှိတ် ငြင်းနေရင်တော့ စကား ဆုံးတော့မှာ မဟုတ်ဘူး သမီး။ သမီးပဲ အမှန်ကို ချစ်တယ်ဆို။
ရှုထောင့်မျိုးစုံကနေ ဟိုတစ်မျိုး ဒီတစ်မျိုး တွေးလို့ရနေတဲ့စာတွေကို ဘယ်လိုစစ်မှာလဲ ဦး။
မူရင်းမှာ တိကျနေဘို့ လိုပါတယ်။ သမီးတို့လက်ကိုင်ကျမ်းက မူရင်းမှာကို ဟိုတစ်မျိုး ဒီတစ်မျိုး ဖြစ်နေတာပါ။ ကုရ်အံ ကျမ်း ထဲက တစ်ခုလောက်ကို သမီး အဲ့လို ထောက်ပြကြည့်ပါ။
မျက်ကန်းယုံ ယုံနေလို့တော့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ ဦးက ကုရ်အံကျမ်း၊ ပိဋကတ်ကျမ်း၊ သမ္မာကျမ်းကို သေချာအောင် လေ့လာခဲ့ပါ တယ်။ အဲ့ဒီ ကျမ်းတွေထဲမှာ ကုရ်အံကျမ်း က အတိကျ အသေချာဆုံး ဖြစ်နေတယ်၊ (သမီး ငြင်းနိုင်ရင် ငြင်းကြည့်ပေါ့။)
ကုရ်အံကျမ်းရဲ့ တိကျခိုင်လုံမှုက- သူ့ကိုယ်သူ အာမခံထားတဲ့ အချက်ပဲ။ မင်းတို့ ကြိုက်သလို စီစစ်ပါ- ဒါဟာ လူ့အတွေး အ ခေါ်နဲ့ ရေးသားတဲ့ကျမ်း ဖြစ်နေရင် (အလ္လာဟ့်အရှင်ဆီက ဉာဏ်စဉ်ကိန်းဝပ်ပေးခြင်း လောကဓမ္မကို မှတ်တမ်းတင်ထား ခြင်း မဟုတ်ခဲ့ရင်) ယုတ္တိမဲ့နေမယ်။ ခေတ်စနစ်ရဲ့ တိုက်စားခြင်း ကို ခံရမယ်။ ဟိုတစ်မျိုး ဒီတစ်မျိုး မြောက်များစွာ ကွဲလွဲနေ မယ်။ ရှေ့နောက်မညီမညွတ်မှုတွေ ရှိနေမယ်။- မင်းတို့ ကြိုက်သလိုသာ စီစစ်လိုက်ပါ- ဆိုတဲ့ အာမခံချက်ပဲ-။ (ကုရ်အံ ၄း၈၂) အခြားသော ဘယ်ကျမ်းတွေမှာ အာမခံချက် ရှိသလဲ။ သမီး တစ်ခုလောက် ပြပေးနိုင်ရင် ဦးရဲ့ ယုံကြည်ထားမှုကို နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်မယ်။
အခုခေတ် ပညာရှင်အပေါင်း ရေးဆွဲတဲ့ ဥပဒေတွေတောင် နှစ်စဉ်၊ လစဉ်၊ သို့မဟုတ် လိုသလို Amendment လုပ်နေရ တာ- သမီး သိလောက်မှာပါ။
ဟုတ်ကဲ့ ခေါင်း၊ လက်၊ ခြေထောက်၊ နှခေါင်း ဆို တာလူတကာမြင်နိုင်တဲ့ ပညတ်တွေပါ။ ပရမတ်နဲ့ကြည့်ရင် ရုပ်၊ နာမ်ပဲရှိ တယ်။ နာမ်တရားဖြစ်တဲ့ သတိကိုရင့်သန်အောင်ကျင့်လို့ ရတဲ့ ဥာဏ်နဲ့ကိန်းဆိုက်တာပါ ဦး။
ခန္ဓာ က ခံစားတယ် ဆိုတာ လွဲမှားနေကြောင်း ဦး အပေါ်မှာ ရှင်းပြခဲ့ပါပြီ။ သမီး လက်ပြတ်၊ ခြေပြတ်တွေကို ကိုယ်တိုင် သွားမေးကြည့်လိုက်ပါ။
သမီးက copy right ရဲ့ သဘောကိုတောင် နားမလည်သေးဘဲ။ (ဥပဒေ ရဲ့ တန်ဘိုးကို မသွန် သင်ပေးတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲက အလေ့အကျင့်တွေကို သမီး ပါယ်သတ်သင့်ပါတယ်။) Copy Right (မူပိုင်ခွင့်) နဲ့ monopolize (မောင်ပိုင်စီးခြင်း) ဆိုတာကို နားလည်အောင် လေ့လာပါ။ Copy Right ဆိုတာ မူရင်းထုတ်လုပ်သူက-၊ အဲ့ဒီ အပေါ်မှာ အခြားသူတစ်ဦး ၀င်ရောက်ဖြည့် စွက်၊ လိုတိုးပိုလျှော့ လုပ်ပြီး မောင်ပိုင်စီးလို့ မရအောင် ကာကွယ်ခြင်း ဖြစ်တယ်။ သူ့ရဲ့ မူရင်းကို သူက အာမခံ- ယူထား ခြင်း ဖြစ်တယ်။ မောင်ပိုင်စီးမှု ဆိုတာက မိမိရဲ့ အရာ မဟုတ်တဲ့ အရာတစ်ခုကို မိမိက အင်အားသုံး၊ ငွေကြေးသုံး၊ အာဏာ သုံးပြီး အပိုင်သိမ်းထားခြင်း ဖြစ်တယ်။ သမီးမှာ သမီးပြောနေတဲ့ ဘာသာရဲ့ သမ္မဒိဌိ၊ သမ္မာသင်္ကပ ဆိုတာ ရှိနိုင်ပါစေ။
မြောက်များစွာ ပါတာပေါ့။ သမီး မြန်မာပြန်ပဲ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ “သင်တို့မှာ ဖြောင့်မတ်တဲ့ ဆင်ခြင်ဉာဏ် မရှိကြသလော၊ သင်တို့မှာ မှန်ကန်တဲ့ အမြင် မရှိသလော” ဆိုတာမျိုး အကြိမ် ပေါင်းများစွာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ (ဒါနဲ့-- ဒီစကားလုံးမျိုးက ဘာသာတိုင်းမှာ သွန်သင်တယ်နော်၊ ဒါကို သမီး သိထားဘို့ လိုလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တော်ဂေါတမက သူ့မတိုင်မှီ ဟိန္ဒူ ဗြဟ္မဏ များဆီက စကားလုံးများကို ပြန်သုံးတယ် ဆိုတာလည်း သထိထားဦးနော်။)
သမီးကိုယ်သမီး သိတယ် ပြောနေတယ်။ လူတိုင်းကလည်း ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်သိနေတာပဲ။ (အရူးတွေက လွဲပြီးပေါ့။) သမီးပြောနေတဲ့ မိမိကိုယ်မိမိ သိနေတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဘာကို ပြောနေတာလဲ။ အစ္စလာမ်မှာတော့ မိမိကိုယ်မိမိ သိ ခြင်း ဆိုတာ မိမိရဲ့ ဇစ်မြစ်ကို သိခြင်းကိုပဲ ဆိုလိုတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ မိမိခန္ဓာ ရဲ့ မူလဇစ်မြစ် “ဓါတ်”တွေကို သိရုံတင်မက အဲဒီ ဓါတ်တွေ ရဲ့ မမြဲတဲ့သဘော ကိုလည်း သိပါတယ်ဦး။
သမီးက ပိဋကတ် လက်မခံရင်တော့ ဦး မပြောလိုဘူး။ ပိဋကတ် လက်ခံရင်တော့ ဦး ပြောရမယ်။ အခု သမီးပြောသလို ဓါတ်တွေဟာ မမြဲဘူးဆိုတာလည်း ပိဋကတ်မှာ ပြောတယ်။ တစ်ခါ ဓါတ်တွေဟာ အစဉ်မြဲနေတယ် ဆိုတာလည်း ပိဋကတ် မှာ ပြောတယ်။- ဘယ်အရာက အမှန်ပါလဲ။ (ကုရ်အံကျမ်းမှာ အဲ့လို ဟိုတစ်မျိုး ဒီတစ်မျိုး ပြောဆိုတာ မရှိပါ။)
ဦးနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ဦး ခန္ဓာရဲ့ မူလဇစ်မြစ် “ဓါတ်”တွေရဲ့မြဲတဲ့သဘောကိုတောင် မသိသေးတဲ့ ဦးကိုသုံးဆယ့် တစ်ဘုံ မ ရောက်မှီကို ရှင်းပြရင် ဦးနားလည်မည်မထင်ပါ။
မရှင်းနိုင်ရင် မရှင်းနိုင်ဘူး ပြောလိုက်ပါသမီး- အဲ့ဒါက ပိုမို ရိုးသားပါတယ်။
ကိုယ်တော်မုဟမ္မဒ်ကိုယ်တိုင် ဥပဒေရဲ့ အောက်မှာပဲ နေရတာပေါ့။ သူက လောကအပေါင်းကို နိယာမကို ပြဌာန်းထဲ့ ပရမတ် ဘုရားရှင်မှ မဟုတ်ဘဲ။ သူက လောကအပေါင်းရဲ့ နိယာမကို ဉာဏ်စဉ်ကိန်းဆိုက် သိမြင်သူသာ ဖြစ်တယ်။ လော ကဓမ္မ ဆိုတာ ကမောက်ကမ မရှိဘူး။ ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ အဲ့ဒီ ဓမ္မကို သိပြီး အဲ့ဒီ ဓမ္မကို ဖွင့်ဟ အံရွတ်မှု ကို မှတ်တမ်းတင်တဲ့ ကျမ်းဆိုတာ လောကဓမ္မစစ်စစ်ကို မှတ်တမ်းတင်တာ ဖြစ်လို့- ဘယ်တော့မှ လောကဖြစ်စဉ် လောက ဓမ္မထဲက လွှဲ ထွက်သွားတာ မရှိဘူး။ ဒီတော့ အာမခံချက် ရှိနေတယ်။
ဒါနဲ့ သမီး အဆိုအရ ကိုယ်တော်ဂေါတမကရော သူ့အပေါ်မှာ လူလိုက်နာရမယ့် ဥပဒေ မရှိဘူးလို့ ဆိုလိုတာလား။
သမီး အဖြေအရ- အိမ်ထောင်ရှိနေခြင်းဟာ ဘာသာတရား အတွက် အနှောက်အယှက် တစ်ခု ဖြစ်နေ မှာပေါ့။ ဒီတော့ မဇ္ဈိမ ပဋိပဋာ ဘယ်လို ဖြစ်ပါ့မလဲ။
အလယ်အလတ် လမ်းစဉ်၊ သမ္မာသမတ်ကျတဲ့ လမ်းစဉ်၊ ဆိုတာ လူတန်းစား ခွဲခြားမှု၊ ကျားမ ခွဲခြားမှု၊ လူဖြစ်လျှက် သူက တော့ ဘာသာရေး လူတန်းစားကြောင့် ဆိုတာမျိုးမရှိရဘူး- လူအားလုံးအတွက် တစ်ပြေးညီ လိုက်နိုင်တဲ့ လမ်းစဉ်များသာ ဖြစ်ရပါမယ်။
စည်းကမ်းမရှိတဲ့ ဘာသာ၊ လူ့ဘောင်လောကနဲ့ လူ့သဘာဝကို တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ ဘာသာက လူသားအားလုံး အ တွက် ကိုယ်စားပြုတဲ့ ၀ါဒ (ဘာသာ) တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါ့မလား။ သမီး ဆင်ခြင်ကြည့်ပေါ့။
စည်းကမ်းတွေထားပင်မယ့် လိုက်နာမည့်သူမရှိသလောက်ဖြစ်နေတဲ့ဝါဒကိုရော လူသားအားလုံးအတွက် ကိုယ်စားပြုတဲ့ ၀ါ ဒ (ဘာသာ) တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါ့မလားလို့ ဦး ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။
သမီးက တော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့ လူတစ်စုကိုကြည့်ပြီး ပြောတာထင်ပါတယ်။ အစ္စလာမ်သာသနာဝင်က ကမ္ဘာမှာ ဗုဒ္ဓဘာ သာဝင်များထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုများပါတယ်။ နိုင်ငံလည်းပေါင်းလည်း များစွာ ရှိပါတယ်။ အမေရိကမှာတောင် အစ္စ လာမ်ဘာသာဝင် သန်း သုံးဆယ် ထိရှိနေပါတယ်။ ဒီတော့ လူငါးယောက် အစုအဖွဲ့မှာ လူ နှစ်ယောက်က သူ့အတွေး အခေါ်နဲ့သူ တော်လှန်ရေး လုပ်တယ်ဆိုပါတော့- လူပိုများတဲ့ လူဦးရေကြီးထဲမှာ လူပေါင်းများစွာဖြစ်လာမှာပေါ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ၊ လာအို၊ ကမ်ဘောဒီးယား၊ ဗီယက်နာမ်၊ သီဟိုဠ်၊ ဘူတန် နိုင်ငံတွေမှာ တော်လှန်ရေး လုပ်နေသူ များ သီလပျက်နေသူများ- ဘယ်လောက်များနေတယ်ဆိုတာ သမီး မတွေးမိဘူး ထင်ပါတယ်။ ဆက်လက် လေ့လာကြည့် ပါဦး။ ပြီးတော့ ကမ္ဘာ့ပညာရှင်များက အခုခေတ်မှာ ဘယ်ဘာသာကို ကူးပြောင်းမှု အများဆုံးလဲ ဆိုတာလည်း လေ့လာ ပါဦး။
ဒီအချက်မှာ သမီး နားလည်မှု မှားနေတာပါ။ သို့မဟုတ် သမီးနဲ့ ဦးကြားမှာ ခံစားမှု ကွဲလွဲနေတာပါ။ ဒီတော့- သမီးကို ဦး မေး ကြည့်မယ်။ နိဗ္ဗာန် ဆိုတဲ့ အရာကို တစ်ကယ်ကိန်းဆိုက်ချင်ရင်- အဲ့ဒီ နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ အရာ တစ်ကယ်ရှိကြောင်း အရင် လက်ခံ ရမယ်။ အဲ့ဒီ နိဗ္ဗာန်ကို ကိန်းဆိုက်နိုင်တဲ့ နည်းဆိုတာ လည်း တစ်ကယ် ရှိကြောင်း လက်ခံရမယ်။ အဲ့ဒီ နည်းလမ်းတွေဟာ ဘယ်ဆရာဆိုတာ ပွင့်ပေါ်သည် ဖြစ်စေ၊ မပွင့်ပေါ် သည် ဖြစ်စေ- လောကဓမ္မ အရ ရှိနေတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်တယ်။ ဆိုတဲ့ အ ချက်ကို သမီး လက်ခံပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့ “နိဗ္ဗာန် ဆိုတဲ့ အရာကို တစ်ကယ်ကိန်းဆိုက်ချင်ရင်- အဲ့ဒီ နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ အရာ တစ်ကယ်ရှိကြောင်း အရင် လက်ခံ ရမယ်။ အဲ့ဒီ နိဗ္ဗာန်ကို ကိန်းဆိုက်နိုင်တဲ့ နည်းဆိုတာလည်း တစ်ကယ် ရှိကြောင်း လက်ခံရမယ်” ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ ဒါပင် မယ့် ဒီလိုလက်ခံဖို့ ယုတ္တိရှိမရှိ စာအုပ်စာပေတွေ ဖတ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့တွေးကာ စီစစ်လို့ မရနိုင်ဘူးလို့ပြောတာပါ။
-“အဲ့ဒီ နည်းလမ်းတွေဟာ ဘယ်ဆရာဆိုတာ ပွင့်ပေါ်သည် ဖြစ်စေ၊ မပွင့်ပေါ် သည် ဖြစ်စေ- လောကဓမ္မ အရ ရှိနေတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုတော့ လက်မခံပါဘူး။ သစ္စာလေးပါးတရားက လောက ကနေ လွတ်မြောက်ကြောင်း နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး လောကဓမ္မ နည်းလမ်းမဟုတ်လို့ပါ။
He makes solution the sum. ဆိုတဲ့ ၀ါကျနဲ့ He makes solution the lead. ဆိုတဲ့ ၀ါကျများကို အင်္ဂလိပ်စာ တတ်သူ တိုင်း ဘာသာပြန်နိုင်တယ်။ နောက်က (the sum ဆိုတာနဲ့ the lead ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သိရင် ရှေ့က solution ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ကို သိပါတယ်။ Maths တို့ Chemistry တို့ Physics တို့ သင်ဘူးနေစရာ မလိုပါ။
လောကီမှာတော့ ဦးပြောသလို ဝါကျကိုတစ်ခုလုံးကို ကြည့်ပြီး မှန်းဆဘာသာပြန်လို့ ရနိုင်ပင်မယ့် သာမန်မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်၊ သာမန် ဥာဏ်နဲ့တွေး ဆလို့မရနိုင်တဲ့ နာမ်တရားနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ စကားလုံးတွေကို မှန်းဆဘာသာပြန်ရင်မမှန်နိုင်ပါ။
အတော်လည်း နားဝေးပါလား သမီး။ သူသင်မယ့် ဟာတွေက “ရှေ့နောက် မညီဘဲ ထင်ရာ လျှောက်ပြောနေတဲ့ ကျမ်းစာလာ အယူတွေပါ၊” လို့ သိနေတဲ့ ဦးက အဲ့ဒီလောက် ယုတ္တိမဲ့တဲ့ ကျမ်းစာနောက်ကို လိုက်နေတဲ့ ဘယ်ဆရာမျိုးဆီမှာ တပည့်ခံရဦး မှာလဲ။
ဥပမာဆိုပါတော့ သိုင်းကျမ်းတစ်ခုကိုဖတ်ပြီး ဒီကျမ်းက ရှေ့နောက်မညီဘူး ယုတ္တိမဲ့တယ်လို့ မကျင့်ဘဲနဲ့ ဘယ်လိုသိနိုင်မ လဲ ဦး။
သမီးကသာ ခန္ဓာ ခန္ဓာ လျှောက်ပြောနေတာပါ။ သမီးပြောနေတဲ့ ခန္ဓာ ခန္ဓာ ဆိုတဲ့ အယူအဆတွေက ယုတ္တိမဲ့ကျမ်းလာ ဖွင့်ဆို ချက်များ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဦး ကျမ်းချက်တွေကို သမီးကို ပေးခဲ့ပြီပြီလေ။
ကျွန်မပြောနေတဲ့ ခန္ဓာ ဆိုတဲ့ အယူအဆတွေက ကျွန်မ ကိုယ်တိုင် မမြဲတဲ့သဘောတွေကို တကယ်တွေ့ပြီးပြောနေတာပါ။ ကျမ်းထဲက အရာတွေကို ရွှတ်ဆိုပြနေတာ မဟုတ်ဘူးဦး။ ယုတ္တိမဲ့တယ်လို့ ဦးယူဆတဲ့ ကျမ်းက အကြောင်းအရာ အတော် များများဟာ ဘာကြောင့် ဦးယုံကြည်တဲ့ ကျမ်းတွေထဲမှာပါနေသလဲ။ ဘယ်ကျမ်းကအရင်ပေါ်ပါသလဲ။ ဘယ်ကျမ်းက အစစ် ဖြစ်မလဲ စမ်းချင်ရင် စာတွေရှေ့နောက်ညီမညီနဲ့ ဆုံးဖြတ်လို့ မလုံလောက်ပါ။ ခန္ဓာက မမြဲဘူးဆိုတဲ့ အယူအဆတွေက ယုတ္တိမဲ့ရင် ဦးရဲ့ခန္ဓာကမြဲတယ်လို့ ဦးယူဆပါသလား.. ဆင်ခြင်ပါ။
သမီးအနေနဲ့ ပိဋကတ်ကို လုံးဝ လက်မခံပါဘူးလို့ ဒီနေ့ထိ declare မလုပ်သေးဘူးနော်။ သမီးက ကျွန်မတော့ ပိဋကတ်ကို လုံးဝ လက်မခံဘူး၊ ကျွန်မ ခန္ဓာကိုယ်ပဲ ကျွန်မ လက်ခံမယ်လို့ declare လုပ်တဲ့နေ့-၊ သမီးနဲ့ ဦးနဲ့ သမီးပြောနေတဲ့ ခန္ဓာ အ ကြောင်းကို ဆက်ဆွေးနွေးတာက သဘာဝ ပိုကျမယ်ထင်တယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်မဒီနေ့အထိ ပိဋကတ်ကို လုံးဝမဖတ်ဘူးပါ။ ပိဋကတ်က ပုထုဇဉ်ကနေ ရဟန္တာအထိ (level) မျိုးစုံ အကျုံး ဝင်တယ်ဆိုတာတော့ သိပါတယ်။ ကျွန်မအခုမှ ပထမအဆင့်ပဲ အောင်မြင်သေးတော့ ကျွန်မနားမလည်လို့ လက်မခံနိုင် သေးတာတွေ ပိဋကတ်မှာ အများကြီးရှိအုံးမှာပေါ့။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဥာဏ်မမီနိုင်သေးတဲ့ အရာတွေကြောင့် ပိဋကတ် ကို ဝေဖန်ရင် ဘယ်မှန်ပါ့မလဲ ဦး။ နောက်တစ်ခု ကိုယ်တော်ဂေါတမဟာ ကျွန်မတို့ထက် တုနိုင်းမရအောင် ဥာဏ်ပညာအများ ကြီး သာမယ်ဆိုတာကိုတော့ ဦး ငြင်းလို့ရမယ်မထင်ပါ။
(နို့မဟုတ်ရင် ယုတ္တိမဲ့နေတဲ့ ကျမ်းစာလာ အယူတွေနဲ့ အချိန်ကုန်ပါတယ် သမီး)။
ကျွန်မက ကျမ်းတွေဖတ်နိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်ဘာသာရပ် ကိုမှ မသင်ယူခဲ့လို့ အချိန်မကုန်ပါဘူးဦး။
သမီးပြောတဲ့ တရားတွေနဲ့ လောဘ ဒေါသ မောဟ ကိုပါယ်သတ်နိုင်သူနဲ့ ဥပဒေကိုကြောက်လို့ လောဘဒေါသမောဟ တွေ ကို ပါယ်သတ်နေရသူ လူဦးရေ ဘယ်ဘက်က ပိုများမယ်လို့ သမီး ထင်ပါသလဲ။
ဥပဒေကိုကြောက်လို့ လောဘဒေါသမောဟ တွေကို ပါယ်သတ်နေရသူတွေက လူဦးရေပိုများပါတယ် ဦး။ လူဦးရေ ပိုများ တိုင်း မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းလို့ ပြောလို့မရပါ။ ကျွန်မပြောတဲ့တရားတွေက ကျင့်ကြံရင် လောဘ ဒေါသ မောဟ တွေ တ ဖြေးဖြေးနဲ့ နည်းပါးလာတာမျိုး ပါဦး ။အဲဒီလို တဖြေးဖြေးပါးလာတာနဲ့ ဥပဒေကိုကြောက်လို့ လောဘ ဒေါသ မောဟ တွေ ကို မထွက်အောင် မြိုသိပ်ထားရတာမျိုး ဘယ်အရာကပိုမှန်ပါသလဲ ဦး။
သမီးကို အပေါ်အပိုဒ်မှာ solution နဲ့ ၀ါကျ နှစ်ခုပေးထားခဲ့ပါတယ်။ အဘိဓာန်အရ ဖွင့်ဆိုပေမယ့်- စာလုံးတိုင်းမှာ ယုတ္တိ ရှိနေ ဘို့ လိုတယ်။ အခု မြန်မာနိုင်ငံ ပိဋကတ် ဘာသာပြန်အဖွဲ့ကြီးက ပြန်တဲ့ စာမူကိုပဲ ရေးပေးလိုက်မယ်။ သမီး ချေပကြည့်ပါ။ “ရဟန်းတို့ သင်တို့သည် အဖဘုရားမှ လာသော မိမိတို့၏ ကျက်စားရာအာရုံ၌ ကျက်စားကြကုန်လော့။ ရဟန်းတို့- အဖဘုရား မှလာသော ကျက်စားရာ အာရုံ၌ ကျက်စားကြကုန်သော သင်တို့အား အသက်အားဖြင့် တိုးပွားကုန်လတ္တံ့။ အဆင်းအားဖြင့် တိုးပွားကုန်လတ္တံ့။ ချမ်းသာအားဖြင့် တိုးပွားကုန်လတ္တံ့။ စည်းစိမ်အားဖြင့် တိုးပွားကုန်လတ္တံ့။ အားခွန်အားဖြင့် တိုးပွား ကုန် လတ္တံ့။” ကဲ သမီး ဒါကို ပြန်ပါ။ ကြိုက်သလိုပြန်ဖွင့်ပါ။
-“အဖဘုရားမှ လာသော”၊ “အဖနှင့်တူသော”၊ “အဖ၏ဥစ္စာ” စသဖြင့် အဘိဓါန်မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဘာသာရေးရဲ့ အ သက်ဟာ နှလုံးသွင်းမှုပါ ဦး။ ကျွန်မနဲ့ ဦးဆွေးနွေးနေတာ ဘာသာတရားရဲ့ နှလုံးသွင်းမှုပါ ဦး၊ ပိဋကတ်မှာ ပါဠိဘာသာ အ ထားအသို မှန်မမှန်၊ ဘာသာပြန် မှန်မမှန်အကြောင်း ဆွေးနွေးနေတာမဟုတ်ပါ လမ်းကြောင်း မလွဲသွားပါနဲ့ ဦး။ ဘာသာ ရေးတစ်ခုရဲ့ နှလုံးသွင်းမှုကို သေချာစေချင်ရင် ပိဋကတ်မှာ ဦးယူဆသလို “အဘဘုရား” ဟာ “ပရမတ်ဘုရား” လို့ ရည် ညွှန်းတာ ဟုတ်မဟုတ် ပိဋကတ် ဘာသာပြန် အဖွဲ့ကြီးကိုမေးကြည့်မှ မှန်တာပေါ့ ဦး။ မမေးဘဲ ကိုယ်လိုရာ ဆွဲတွေးနေရင် (သို့မဟုတ်) ရေးတဲ့သူကိုယ်တိုင်က ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ ပြောနေတာတောင် လက်မခံရင် မမှန်တော့ဘူးဦး။
ကျွန်မပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာ “ကိုယ်တော်ဂေါတမရဲ့ သီအိုရီ” လို့ ပါတယ် ဦး။ ကိုယ်တော်ဂေါတမက သူ့ယူဆချက်ထဲမှာ မပါ တဲ့အရာကို ဘယ်ကျမ်းချက်တွေနဲ့ အချိန်ကုန်ခံပြီး ထားခဲ့ရမှာလည်း ဦး။ ဒီလောကဟာ “အနိစ္စ” မြဲတာ တစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ ပြောပြီးမှ .... မြဲတဲ့ “ပရမတ်ဘုရား” ရှိတယ်ပြောရင် အဲဒါမှ ရှေ့တမျိုး၊ နောက်တစ်မျိုး ပြောတာ အစစ်ဖြစ်ပါတယ် ဦး။
သမီးပြောနေတာတွေက ပညာရှိ ဆုံးမ စကားတွေပါ။ ဒါမျိုးကို တာအိုဝါဒမှာလည်း ပြောပါတယ်။ အနောက်တိုင်း ဖီလော် ဆော်ဖီကြီးတွေလည်း ပြောပါတယ်။ ပညာရှိ အဆုံးအမနဲ့ ဘာသာတရား ဆိုတာ မတူညီနိုင်ပါ။ ပညာရှိ အဆုံးအမများ ဆို တာ ခေတ်ကာလအလိုက် မှားယွင်းနိုင်တယ်။ မှားယွင်းလို့လည်း အဲ့ဒီ ပညာရှင်ကို အပြစ်ဆိုခွင့် မရှိပါ။ သူ့ခေတ်နဲ့သူ မို့- သူ့ ခေတ်မှာ သူဟာ အကောင်းဆုံးလို့ပဲ ပြောခွင့်ရှိပါတယ်။
မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာ တရားတွေက ဒီခေတ်နဲ့ မကိုက်တော့ဘူးလို့ ဆိုလိုတာလား။ ပညာရှိ အဆုံးအမလည်း မှန်ရင် လိုက်နာရမှာ ပဲပေါ့။
အစ္စလာမ်ဟာ လူတိုင်း အတွက် ဖြစ်တယ်။ ရဟန်းသံဃာ လူတန်းစား တစ်ရပ်ကို ဖန်တီးပြီး သီးသန့် ဥပဒေ မထားဘူး။ လူ အားလုံးအတွက် ဥပဒေဟာ တစ်ပြေးညီ ဖြစ်တယ်။ အစ္စလာမ်မှာ ဘ၀ ကိုမသတ်ရဘူး သွန်သင်တယ်။ လူကို မသတ်ရဘူး သွန်သင်တယ်။ လူလူချင်း စာနာထောက်ထားဘို့ ကရုဏာထားဘို့ မေတ္တာထားဘို့ သွန်သင်တယ်။ ဆုံးမပြောဆိုတယ်။ အဲ့ဒီလိုမှ သွန်သင်ခြင်းကို ကရုမစိုက်ဘူး လူကို သတ်မယ်ဆိုရင် သူ့ကို လူသတ်မှုနဲ့ အပြစ်ပေးဘို့ ဥပဒေ ပြဌာန်းစေဘို့ သွန်သင် တယ်။ လူသတ်မှုမှာ လူသတ်သူကိုသာ တရားခံ အဖြစ်သတ်မှတ်ဘို့နဲ့- သူ့အမျိုး သူ့အဆွေ၊ သူ့မျိုးနွယ် ကို အ ကြောင်းပြပြီး လက်စားချေခြင်းကို တားမြစ်ထားတယ်။ (သမီး ကျမ်းချက်တွေ လိုချင်ရင် ပေးပါမယ်။)
-ဒါဆို လူမဟုတ်တဲ့ သတ္တဝါတွေကို သတ်ချင်တိုင်း သတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောလား ဦး။
အနည်းဆုံး ဦး ခန္ဓာရဲ့ မူလဇစ်မြစ်ကိုတော့ သိသွားမှာပဲ။
ဘယ်ဘာသာမှာမှ လူတိုင်းက မိမိစိတ်သဘောနဲ့ မလိုက်နာလို့ ဥပဒေနဲ့ ထိန်းထားတာပေါ့။ လူ ဟာ လူ ဖြစ်တယ်။ သူဟာ မိမိရဲ့ တစ်သီးပုဂ္ဂလ ဆန္ဒကို ပိုင်ဆိုင်တယ်။ ဆန္ဒအလျှောက် ၀ါသာနာကွဲပြား တယ်၊ အမူအကျင့် စိတ်နေသဘောထား ကွဲပြားတယ်။ ဒီတော့ ရဟန္တာရှိမယ်။ နိုင်ငံရေးသမားရှိမယ်၊ လယ်သမားရှိမယ်။ အနုပညာရှင်ရှိမယ်။- ဘယ်သူ ဖြစ်ဖြစ်မိမိ ၀ါသနာ အလျှောက် မိမိ လုပ်ဆောင် ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် မိမိရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို အကြောင်းပြပြီး သူတစ်ပါးကို စော်ကားခွင့် မရှိဘူး။ သူတစ်ပါးကို မစော်ကားဘို့ သွန်သင်တယ်။ သွန်သင်ချက်ကို ဖေါက်ဖျက်ရင် ဥပဒေ အရ ဆုံးမဘို့ ပြဌာန်းထားတယ်။- သမီးတို့ အယူ အဆအရ နိုင်ငံတစ်ခု စစ်တပ်တစ်ခုကို ဘယ်လို ထူထောင်မလဲ။ နောက်ဆုံး စည်းကမ်း ဥပဒေ ဘောင် မရှိရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ခုတောင် စနစ်တကျ လည်ပတ် ရပ်တည်နိုင်ပါ့မလား။
ဦးပြောသလို ဆိုရင် အစ္စလာမ်မဟုတ်တဲ့ တခြားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ တိုင်းပြည်တွေဟာ ဦးပြောတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ ဥပဒေတွေမရှိဘဲ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ တည်ထောင်ထားပါသလဲ။ အဲဒီလောကီကိစ္စတွေကို ဦးကဘာသာရေးလို့ ယူဆတာလား။
ဦးထောက်ပြသလို ရှေ့နောက် မညီညွတ်တွေနဲ့ ပြောဆိုထားတဲ့ ကျမ်းစာက ပြောတဲ့ အမြင်နိုင်တဲ့ အပါယ်ဘုံကို ကို ထိုးချပြီး ငြိမ်သက်မနေဘူး ဆိုတာ သမီးကိုယ်တိုင် အသိပါပဲ။ အဲ့တော့ စော်ကားခံရသူ မိမိက တရားကို ဖျက်ခြင်းမဟုတ်၊ သူတစ်ပါး က စော်ကားခြင်း ဖြစ်တယ်။ ဒီအခါ မိမိတရားလည်း မပျက်ရအောင် သူတစ်ပါးကိုလည်း တော်လှန်ကာကွယ်ပြီး ဖြစ်အောင် ဘယ်လို စီစဉ်မလဲ။ ဘယ်လို ခုခံမလဲ။
-ငရဲဆိုတာ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ တွေကြောင့်ကျရတာပါ ဦး။ ကာမရမက်ကြောင့် အဓမ္မကြံတဲ့သူမှာ လောဘရှိပြီးသား ပါ ဦး။ စော်ကားခံရသူက ဒေါသ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စော်ကားခံရသူက ကိုယ့်ကို စော်ကားသူကို ငါ့ကို စော်ကားရ သလားဆိုပြီး ဒေါသထွက်မနေဘဲ (လောဘ ရမက်ကျေးကျွန်အနေနဲ့ ငရဲသွားမယ့်သူနဲ့ တွက်ကပ်နေစရာမလိုတဲ့ သဘော ပါ) ဘယ်နည်းနဲ့ မိမိလွတ်မြောက်မလဲ ကြံစည်ပြီး အတတ်နိုင်ဆုံးခုခံ ရမှာပါ။ ဆိုပါစို့ ခုခံတာလက်လွန် သွားလို့ အဓမ္မကြံ တဲ့သူ နေရာမှာ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားရင် သေသူဟာ ကာမရမက်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ “လောဘ”၊ သူ့ကိုပြန်ခုခံနေလို့ စိတ် တိုနေတဲ့ “ဒေါသ” တွေ တန်းလည်းနဲ့ စုတေစိတ်ကျသွားတဲ့အတွက် ငရဲကိုတည့်တည့်မတ်မတ် ကျသွားမှာပါ။ စော်ကားခံရ သူက လူသတ်လိုက်ပင်မယ့် သေစေလိုတဲ့ ဒေါသနဲ့ သတ်တာမဟုတ်လို့ ငရဲမကျဘူး ဦး။ ဒေါသစိတ်နဲ့ ဦးဆောင်တာ မဟုတ်တော့ ငရဲ မရောက်ဘူး ဦး။
ပါရာဇိကံကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ ရဟန္တာမတွေလည်း အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတာပဲ။ ပြီးတော့ သမီးက ရဟန္တာတွေ ဟာ ဘယ်တော့မှ သူ့ အဆင့် မပျက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ သဘောကို အစဉ်ပြောနေတာတွေ ဦးတွေ့ရ တယ်။ ဒီလို ဆိုရင် ရဟန္တာလည်း ဈာန်လျှောနိုင် တယ် ဆိုတာများ သမီး မေ့နေရော့သလား။
ဟုတ်ကဲ့ ဘယ်တော့မှ သူတို့ ရထားတဲ့အဆင့်ကနေ မကျတော့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ သူတို့မှာ ကာမတဏှာ အပြီး ပါယ်သတ်ပြီးသားမို့ တပ်မက်မှုမရှိတော့ဘဲ ဝဋ်ကျေအောင်ပေးဆပ်တဲ့သဘောပဲ ထားတာမို့လို့ပါ။ ရဟန္တာမတွေ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတယ်ဆိုတာ တူသောအကျိုးကိုပြန်ပေး ဆပ်ရတာပါ ဦး။ ဆိုလိုတာက တစ်ခုသောဘဝတစ်ခုမှာ ထိုရဟန္တာ မက ယောက်ျားဖြစ်ခဲ့ပြီး ရဟန္တာမကို အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့လို့ပါ။ ရဟန္တာမ အဆင့်မပြောပါနဲ့ အဆင့် (၃) အနာဂါမ်မ တောင်မှ ကာမတဏှာ မရှိတော့ဘူး ဦး။ ရှင်ဂေါတမရဲ့ အယူအဆက တဏှာကို ပါယ်သတ်တာဆိုတာကို မမေ့နဲ့လေဦး။
ဒါတော့ မဆိုးပါဘူး- ဒါပေမယ့် သမီးရဲ့ ငါးပါးသီလနဲ့ ထမင်းဘယ်လို ချက်မလဲ။ ဆန်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ပိုးမွှားလေးတွေ သေကုန် မှာပေါ့။
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်မ မမြင်လို့ပါသွားတဲ့ ပိုးမွှားတွေအတွက် ကျွန်မမှာ သေစေလိုတဲ့စိတ်မရှိလို့ သီလမပျက်ပါ ဦး။ သူတို့ ဘာ ကြောင့် ကျွန်မလက်ချက်နဲ့ သေကုန်သလဲဆိုတော့ တစ်ခုသောဘဝက သူတို့က ကျွန်မကို သတ်ခဲ့တဲ့သူတွေပါပဲ ဦး။
-ပြုလုပ်တဲ့ ဘယ် “ကံ” မှာ မဆို အသေးစိတ်ခွဲပြရရင် ဇော (၇) ကြိမ် ရှိတယ် ဦး။ ပထမဆုံးဇောက ပြုလုပ်တဲ့ကံ အရှိန်အ လိုက် ယခုဘဝမှာ ပြန်အကျိုးပေး ပါတယ်ဦး။ နောက်ဆုံးဇော (သတ္တမဇော) က ဒုတိယဘဝမှာ အကျိုးပေးပါတယ် ဦး။ အလယ်ဇော (၅) ခု က တတိယဘဝကနေ နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ့် ဘဝတိုင်အောင် အခွင့်ရတိုင်း အကျိုးပေးပါတယ်ဦး။ ပုထု ဇဉ် တစ်ယောက် ကာမတဏှာကံကို ပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ သဘောကျပြီးသေရင် လောဘစိတ်နဲ့ သေလို့ ပြိတ္တာဘဝကို ရောက်ပါလိမ့်မယ်၊ အလိုမကျဘဲသေရင် ဒေါသစိတ်နဲ့သေလို့ ငရဲရောက်ပါလိမ့်မယ်၊ သဘောကျတာလည်း မဟုတ်၊ မကျ တာလည်း မဟုတ်ဘဲ မောဟနဲ့သေရင် တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်ရတာဟာ သူတို့ပြုလုပ်တဲ့ ကံရဲ့ (သတ္တမဇော) ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ မဂ်ဥာဏ် ရထားပြီးသားသူကတော့ သတ္တမဇောရဲ့ အပါယ်ဘုံရောက်စေတဲ့ အကျိုးကို ပါယ်သတ်ပြီး သားဖြစ်လို့ သောတာပန်ရဲ့ လောဘတဏှာဟာ ပုထုဇဉ်ထက် အားပျော့ပြီးသားပါ ဦး။ ဒါကြောင့်ပျော်ပါးပြီး လောဘနဲ့ သေ လည်း မဂ်ဥာဏ်က အပါယ်ဘုံရောက်စေတဲ့လောက်တဲ့ လောဘကို ပါယ်သတ်ထားပြီးဖြစ်လို့ အပါယ်ဘုံကို ဘယ်တော့မှ မ ရောက်တော့ပါ။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေက နာမ်တရားတွေ ဖြစ်လို့ မဂ်ဆိုတဲ့ နာမ်တရား နဲ့သာ ပါယ်သတ်နိုင်ပါတယ် ဥပဒေနဲ့ ပါယ်သတ်လို့မရဘူး၊ ကျမ်းတွေကလည်း ပါယ်သတ်မပေးနိုင်ပါ ဦး။
ကုရ်အံကျမ်းဟာ မြင်တွေ့နိုင်တဲ့ အရာတိုင်းအတွက် လောကယုတ္တိရှိနေတယ်။ ချွင်းချက်တစ်ခု ပျက်ကွက်နေတာ မရှိဘူး။- အဲ့ဒါကို မငြင်းနိုင်ရင် အဲ့ဒီ ကုရ်အံကျမ်းက ပြောတဲ့ မမြင်ရနိုင်တဲ့ အရာ တိုင်းကို ဘယ်သူကမှ မငြင်းနိုင်ပါ။ တစ်ကယ်လို့ ကုရ်အံကျမ်းစာ ပြောတာက မြင်တွေ့နိုင်တဲ့ အရာ တစ်ခုကို ယုတ္တိမဲ့ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ရင်- အဲ့ဒီ ကျမ်းက ပြောထားတဲ့ မမြင်ရနိုင်တဲ့ အရာများ အတွက် မသေချာတော့ဘူး ဆိုတာကို ၀န်ခံရပါတော့မယ်။ ဒီတော့ သမီး အနေနဲ့ ကုရ်အံကျမ်းစာ ထဲက မြင်ရနိုင်တဲ့ အရာ တစ်ခုလောက်ကို ငြင်းကြည့်ပါ။ မငြင်းနိုင်ရင်တော့ ပရမတ်ဘုရား ရှိကြောင်း သက်သေအဖြစ် ကုရ် အံကျမ်းစာက ခိုင်လုံပါတယ်။
မြင်တွေ့နိုင်တဲ့အရာတိုင်းက အမှန်တွေဆိုရင် ”အထင်အမြင်နဲ့ လက်တွေ့ ကွာခြားတယ်” ဆိုတဲ့စကား ပေါ်လာစရာ အ ကြောင်း မရှိဘူး ဦး။ ဦးပြောပုံအရ ပရမတ်ဘုရားကို ဦးကိုယ်တိုင် မမြင်ဖူးဘူး ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်မမြင်ဖူး တဲ့ အရာတကယ်ရှိကြောင်း ငြင်းမရအောင် ဘယ်လိုသက်သေပြမလဲ ဦး။ ဦးက တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ လူ့ဘဝကို မာယာများတဲ့ ကျမ်းစာတွေအပေါ် ပုံအပ်လိုက်တာပဲ။
ကျွန်မ ကုရ်အံကျမ်း ကိုတခါမှမဖတ်ဘူးပါ၊ ဒါကြောင့် ကုရ်အံကျမ်းထဲက ယုတ္တိအရှိဆုံးလို့ ဦးယူဆတဲ့အရာတစ်ခုကို ပြောပြ ပါ။
ရက်ပေါင်း ၆၀ လောက် အချိန်ကို ဖြုန်းတီးပျက်တာတော့- ဘယ်လောက်ထိ နစ်နာထိခိုက်ကြောင်း အချိန်ကို တန်ဘိုးထား သူတိုင်း သိပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ ဂျာမဏီက ရုရှကို ၀င်တိုက်တာ ဟစ်တလာ အမိန့်ပေးပြီးနောက် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တွေက ရက် ၆၀ နောက်ကျလို့ ရုရှား ဆောင်းရာသီကို သွားတိုးတယ်။ ဒီမှာ ဂျာမဏီ စရှုံးတယ်၊ အဲ့ဒီက စ စစ်ဦးကျိုးသွားပြီး ဂျာမဏီကြီး တစ်ခုလုံးပါ စစ်ရှုံးခဲ့ ရတယ်။ (အချိန်ကို အလကား မဖြုန်းတီးဘို့ သမီးကို ဦး သတိပေးပါရစေ။)
ဘဝများစွာအတွက် ရက်ပေါင်း ၆၀ က မပြောပလောက်ပါဘူး ဦး။ ရက်ပေါင်း ၆၀က အနှေးသွားတဲ့နည်းပါ။ မိမိကိုယ်တိုင် ဘယ်ဘဝကလာသလဲ (ဘဝဟောင်း ဆယ်ဘဝထိ ကြည့်လို့ရတယ်) ဘယ်တော့သေမလဲ၊ မိမိနဲ့ယခုပတ်သတ်တဲ့ သူတွေ ကလည်း ယခင်ဘဝက ဘယ်လို ပတ်သတ်ခဲ့သလဲ၊ သူတို့ရော ဘယ်တော့သေမလဲ စသဖြင့် အကုန် ကြည့်လို့ရတယ်။ ဒါ ကြောင့် ရက် ၆ဝ ကြာတာ။ အဲဒါတွေမကြည့်ချင်ရင် ၁၅ ရက်ပဲလိုတယ်။ ကျွန်မ ၁၅ ရက်ပဲ အချိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ထားပါတော့ အဲ့ဒီ ဓါတ်တွေ ဆိုတာက ဘာအစီအစဉ် ဘာစနစ်ဇယားမှ မရှိဘဲ သူ့အလိုလို ဓါတ်တွေ ပေါင်းစပ်ပြီး လူပုံ သဏ္ဍာန်၊ နွားပုံသဏ္ဍာန်၊ ခွေးပုံသဏ္ဍာန်၊ ငှက်ပုံသဏ္ဍာန် အလိုလို ဖြစ်လာတယ်လို့ သမီးထင်ပါသလား။
ပရမတ်ဖြစ်တဲ့ဓါတ်တွေရဲ့ သဘောကို ဦးနားလည်ရင် ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ လက်ခံလာလိမ့်မယ်ဦး။ ပရမတ်ဖြစ်တဲ့ ဓါတ်တွေ အတွက် ဘာအစီအစဉ် မှမလိုဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့မှာ မမြဲတဲ့သဘော (ရွေ့လျားပြောင်းလဲ ဖေါက်ပြန်နေတဲ့ သဘော) ရှိပြီးသားပဲ။ ရွေ့လျားပြောင်းလဲနေတဲ့ အရာတွေဟာ တချိန်ချိန်မှာ တိုက်မိမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဓါတ် (၆)ခု စလုံး တ နေရာတည်း တချိန်တည်း တိုက်မိဖို့က အလွန်ဖြစ်တောင့် ဖြစ်ခဲတာမို့ အချိန်အများကြီးကြာမှ တစ်ခါဖြစ်တာပါ ဦး။ သံသ ရာအစကို အလွယ်ပြောရင် ဓါတ် (၄) ခု တိုက်မိပြီး ကမ္ဘာကြီးဖြစ်လာတယ်၊ ဓါတ် (၆) ခု ပေါင်းပြီး လူတွေ ဖြစ်လာတယ်၊ တိရစ္ဆာန်မရှိသေးဘူး။ နတ်တွေ၊ ဗြဟ္မာတွေ၊ ငရဲသားတွေမရှိသေးဘူး။ လူတွေဟာ ကောင်းမှုကံ၊ မကောင်းမှုကံတွေ စပြီး လုပ်တာနဲ့ ကံရဲ့အရှိန်ကြောင့် သူတို့ကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဓါတ်တွေဟာ ပြောင်းလည်းဖေါက်ပြန်လာပြီးတော့ နတ်ဘုံ၊ ဗြဟ္မာ ဘုံ၊ ငရဲဘုံတွေဟာ သူတို့ မသေခင် ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ (ဘုရင့်သားဖြစ်မယ့် ကလေးမမွေးခင်ထဲက သူ့အတွက် အ ဆောင်အယောင်တွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသလို သဘောပဲ)။ သေတော့ အဲဒီဘုံတွေကို ပြောင်းလဲဖေါက်ပြန်သွားတဲ့ သဏ္ဍာန်တွေနဲ့ အသီးသီးရောက်သွားကြတယ်။ လူတွေ တိရစ္ဆာန်တွေ မျိုးပွားတာနဲ့ အိုမင်းလာတာဟာ ဓါတ် ၆ခုထဲက “တေဇော” ဓါတ်ကြောင့်ပဲ။ သံသရာအစကို ရှင်ဂေါတမ မဟောခဲ့ဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အခုကမ္ဘာရဲ့ အရှေ့မှာ မရေ တွက်နိုင်တဲ့ ကမ္ဘာတွေ အများကြီးရှိပြီး သူဟောမယ့် ပန်းတိုင်က သံသရာကို အဆုံးသတ်တဲ့နည်းဖြစ်နေလို့ “သံသရာ အစ ကို မသိအပ်” လို့ပဲ ဟောခဲ့တယ်။ ကျွန်မပြောတာတွေ ဘယ်ကျမ်းလဲလို့လာမမေးနဲ့၊ ဦး သိပ်သိချင်နေလို့ ကျွန်မကိုယ်တိုင် တွေ့ရှိထားတဲ့ ဓါတ်သဘော အတိုင်းပြောပြနေတာပါ။ ဒါကြောင့် ဦးကို ဓါတ်တွေအကြောင်းကို သိအောင်လုပ် ပါလို့ ပြော နေတာပေါ့။
သမီး အနေနဲ့- နာရီ တစ်လုံးကို တစ်စချင်း ဖြုတ်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ဆန်ကောထဲမှာ ထည့်ပြီး လှည့်ကြည့်ပါ။ သမီး မလှည့်နိုင်ရင် စက်တစ်ခုထဲမှာ ထည့်လှည့်ကြည့်ပါ။ အဲ့ဒီ နာရီမှာ ပါဝင်တဲ့ စက္ကန့်တံ၊ မီနစ်တံ၊ နာရီတံ၊ မှန်၊ စပရိန်၊ ဓါတ်ခဲ၊ ၀ါယာကြိုး၊ အားလုံးက သူ့နာရီ ပုံစံအတိုင်း စနစ်တကျ ပြန်ဝင်သွားမယ် ထင်ပါသလား။ လက်တွေ့ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ (အ ချိန်ကုန်တယ်ထင်ရင် သမီးရဲ့ သိပြီး ပထမဈာန် အဆင့်ဉာဏ်နဲ့ ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ပါ။)
နာရီလိုမျိုး သာမန်မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့ ပညတ်တွေ (ဓါတ်ကြီး (၄) ပါး ပေါင်းစုံပြီးသား) ကိုလုပ်ရင်တော့ဘယ်ရမလဲ ဦး။
ပိဋကတ်မှာ ပါမှာပေါ့၊ ဦးက တချိန်လုံး ကျမ်းပဲ လိုက်မေးနေတာကိုး။ ရှင်ဂေါတမ လက်ထက်က လူတွေ ဘာကျမ်းမှမလိုဘဲ နိဗ္ဗာန် ဝင်သွားတာပါ။ ဒီဘဝသေလွန်ပြီး တမလွန်ရောက်လို့ တကယ်လက်တွေ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာ အခုရောက်တဲ့နေရာ ကျမ်းထဲမပါဘူးလို့ စောတကတတ်ဖို့ နောက်ကျသွားပြီ ဦး။
အဲ့ဒါကိုယ်က သမီးကိုယ်တိုင် တစ်လွဲသင်ခံလိုက်ရတာပဲ။ လူတစ်ဦးမှာ ဖြစ်တည်တဲ့ ဝေဒနာ ဆိုတာ ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းက မဟုတ်ဘူး၊ အာရုံကြောကသာ ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒါကို ဦးနှောက်က ဆုံး ဖြတ်တယ်၊ စိတ်က ခံစားတယ်။ လက်ဖြတ်လိုက်ရသူ တစ်ဦးကို သမီးမေးကြည့်ပါ။ သူ့မှာ လက်မရှိတော့ဘူး- ဒါပေမယ့် သူဟာ လက်မလေးက နာတယ်၊ လက်သန်းလေးက ယား တယ် ဆိုတာကို ခံစားနေရဆဲပါ။ သမီးအနားမှာ အဲ့လို လက်ဖြတ်ထားသူ၊ ခြေဖြတ်ထားသူ တစ်စုံတစ်ယောက် ရှိရင် လက် တွေ့ မေးလိုက်ပါ။ အဲ့တော့ သမီးပြောနေတဲ့ ခန္ဓာဟာ လက်တွေ့ ဆိုတဲ့ စကားက အကြီးအကျယ်မှားယွင်း နေပါတယ်- သမီး။ အမှားထဲမှာ ဆက်လက် မရပ်တည်ဘို့ ဦး သတိပေးပါရစေ။
ကျွန်မပြောတဲ့အထဲမှာလည်း “ခန္ဓာ” လို့ပဲ ပြောပါတယ် “အစိတ်အပိုင်း” လို့ လုံးဝမပြောပါဘူး ဦး။ ဦးပြောတဲ့ ခန္ဓာ အစိတ် အပိုင်းတွေက သာမန်မျက်စိနဲ့ မြင်နိုင်တဲ့ (ဓါတ် ၆ခု ပေါင်းပြီးသား) “ပညတ်” တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပညတ်တွေဟာ အမြဲမမှန် ပါ။ ဒါကြောင့် ပညတ်တွေအပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ ဆေး ပညာဟာလည်း အမြဲမမှန်ပါ။ ပရမတ်ဓါတ်ကို မြင်အောင်ကြည့်မှ အမှန်ဖြစ်မှာပါ။ တရားထိုင်နေရင်း “ခန္ဓာ” ထဲမှာ တင်းတာ၊ တောင့်တာ၊ ထုံတာ၊ ကျင်တာ၊ အောင့်တာ၊ ကိုက်တာတွေ ဖြစ် လာတာက “ပထဝီဓါတ်” ရဲ့ သဘောပါ။ ချွေးတွေ နှပ်တွေ ယိုစီးလာတာက “အာပေါဓါတ်” ရဲ့သဘောပါ။ ကိုယ်တွေ ပူလာ၊ အေးလာတာက “တေဇောဓါတ်” ရဲ့ သဘောပါ။ အသားတွေ လှုပ်လာ၊ ရင်တွေတုန်လာ၊ ခေါင်းတွေမူးလာတာက “ဝါယော ဓါတ်” ရဲ့ သဘောပါ။ ဒီဓါတ်တွေထဲက ဘယ်ဓါတ်ဖြစ်ဖြစ် ဝိဥာဏ်ဓါတ်ဖြစ်တဲ့ အသိစိတ်နဲ့ ဝေဒနာအတိုးအလျော့ကို အသေးစိပ် လိုက်ကြည့်နေရင် ဒီဓါတ်တွေဟာ စက္ကန့်မလပ်ဖေါက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတာကို ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ တွေ့မြင်ရမယ် ဦး။
(ကုရ်အံ ၄း၈၂) အခြားသော ဘယ်ကျမ်းတွေမှာ အာမခံချက် ရှိသလဲ။ သမီး တစ်ခုလောက် ပြပေးနိုင်ရင် ဦးရဲ့ ယုံကြည် ထား မှုကို နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်မယ်။
အာမခံချက်တွေရှိတိုင်း မမှန်ပါ။ အဲဒီအာမခံချက်တွေက ငရဲပြည်တကယ်ရောက်သွားရင် ကျမ်းထဲမှာ အာမခံထားတာဘဲ လို့ ပြောဖို့အချိန်တောင် ရလိုက်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ ဦးရဲ့ ယုံကြည်မှုကို နောက်ဆုတ်တာ မဆုတ်တာကတော့ ဦးရဲ့ကိစ္စပါ၊
လိမ်လည်မှု ဆိုတာကိုယ်က ယုတ္တိမရှိလို့ ဆိုတာကို သမီး မသိလေရော့သလား။ မျက်လုံးစုံမှိတ် ငြင်းနေရင်တော့ စကား ဆုံး တော့မှာ မဟုတ်ဘူး သမီး။ သမီးပဲ အမှန်ကို ချစ်တယ်ဆို။
လိမ်လည်မှုတိုင်း ယုတ္တိမရှိဘူးလား ဦး။ ယုတ္တိရှိရှိ အကွက်ကျကျ လိမ်လည်လို့ မပေါ်တဲ့ အမှုတွေ အများကြီးပါ ဦး။
ခန္ဓာ က ခံစားတယ် ဆိုတာ လွဲမှားနေကြောင်း ဦး အပေါ်မှာ ရှင်းပြခဲ့ပါပြီ။ သမီး လက်ပြတ်၊ ခြေပြတ် တွေကို ကိုယ်တိုင် သွား မေး ကြည့်လိုက်ပါ။
ကျွန်မကလည်း ခံစားတဲ့သဘော “ဓါတ်”ကိုပဲရှုတာပါ။ ခြေတွေ၊ လက်တွေ (ဓါတ် ၆ ပါးပေါင်းထားပြီးသားအစုအဝေး) ပ ညတ်တွေကို မရှုပါ။
မြောက်များစွာ ပါတာပေါ့။ သမီး မြန်မာပြည်ပဲ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ “သင်တို့မှာ ဖြောင့်မတ်တဲ့ ဆင်ခြင်ဉာဏ် မရှိကြသလော၊ သင်တို့မှာ မှန်ကန်တဲ့ အမြင် မရှိသလော” ဆိုတာမျိုး အကြိမ် ပေါင်းများစွာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ (ဒါနဲ့-- ဒီစကားလုံးမျိုးက ဘာ သာတိုင်းမှာ သွန်သင်တယ်နော်၊ ဒါကို သမီး သိထားဘို့ လိုလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တော်ဂေါတမက သူ့မတိုင်မှီ ဟိန္ဒူ ဗြဟ္မဏ များ ဆီက စကားလုံးများကို ပြန်သုံးတယ် ဆိုတာလည်း သထိထားဦးနော်။)
နားလည်ပြီ ဦး။ ဦးက ပါဠိလို ကျွန်မလို တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ပြီးပြောနေတာကိုး။ ကျွန်မ ပါဠိလိုမတတ်လို့ နောက်ဆို မြန် မာလိုပဲပြောပါ။
သမီးက ပိဋကတ် လက်မခံရင်တော့ ဦး မပြောလိုဘူး။ ပိဋကတ် လက်ခံရင်တော့ ဦး ပြောရမယ်။ အခု သမီးပြောသလို ဓါတ် တွေဟာ မမြဲဘူး ဆိုတာလည်း ပိဋကတ်မှာ ပြောတယ်။ တစ်ခါ ဓါတ်တွေဟာ အစဉ်မြဲနေတယ် ဆိုတာလည်း ပိဋကတ်မှာ ပြောတယ်။- ဘယ်အရာက အမှန်ပါလဲ။ (ကုရ်အံကျမ်းမှာ အဲ့လို ဟိုတစ်မျိုး ဒီတစ်မျိုး ပြောဆိုတာ မရှိပါ။)
မှန်တယ်လေ မမြဲတဲ့လောကမှာရှိတဲ့ သင်္ကတဓါတ် (၆) ခုက မမြဲဘူး ။ မြဲတဲ့လောကရဲ့ နိဗ္ဗာန်ဓါတ် = အသင်္ကတဓါတ် က မြဲတယ်လေ။
ကိုယ်တော်မုဟမ္မဒ်ကိုယ်တိုင် ဥပဒေ ရဲ့ အောက်မှာပဲ နေရတာပေါ့။ သူက လောကအပေါင်းကို နိယာမကို ပြဌာန်းထဲ့ ပရမတ် ဘုရားရှင်မှ မဟုတ်ဘဲ။ သူက လောကအပေါင်းရဲ့ နိယာမကို ဉာဏ်စဉ် ကိန်းဆိုက် သိမြင်သူသာ ဖြစ်တယ်။ လောကဓမ္မဆို တာ ကမောက်ကမ မရှိဘူး။ ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ် နေတာ မဟုတ်ဘူး။ အဲ့ဒီ ဓမ္မကို သိပြီး အဲ့ဒီ ဓမ္မကို ဖွင့်ဟအံရွတ်မှုကို မှတ် တမ်းတင်တဲ့ ကျမ်းဆိုတာ လောကဓမ္မစစ်စစ်ကို မှတ်တမ်းတင်တာ ဖြစ်လို့- ဘယ်တော့မှ လောကဖြစ်စဉ် လောကဓမ္မထဲက လွှဲ ထွက်သွားတာ မရှိဘူး။ ဒီတော့ အာမခံချက် ရှိနေတယ်။
ကိုယ်တော်မုဟမ္မဒ်မှာ မိန်းမ (၁၂) ယောက် ရှိပြီး မုဒိန်းမှုတွေလည်း လုပ်တယ်လို့ ဖတ်မိတာပဲ ဦး။
ဒါဆို အစ္စလာမ်က လူတွေရဲ့ လက်ရှိဘဝ အတွက်ပဲပေါ့။
သမီးက တော်လှန်ရေး လုပ်နေတဲ့ လူ တစ်စုကို ကြည့်ပြီး ပြောတာ ထင်ပါတယ်။
ဥပဒေတွေက လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေ ကိုမထိန်းနိုင်ပါ။
အစ္စလာမ်သာသနာ ၀င်က ကမ္ဘာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုများပါတယ်။ နိုင်ငံလည်းပေါင်းလည်း များစွာ ရှိပါတယ်။ အမေရိကမှာတောင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် သန်း သုံးဆယ် ထိရှိနေပါတယ်။ ဒီတော့ လူငါးယောက် အစုအဖွဲ့မှာ လူ နှစ်ယောက်က သူ့အတွေးအခေါ်နဲ့သူ တော်လှန်ရေး လုပ်တယ် ဆိုပါ တော့- လူပိုများတဲ့ လူဦးရေကြီးထဲမှာ လူပေါင်းများစွာဖြစ်လာမှာပေါ့။
အပေါ်ယံစာတွေပဲလေ့လာပြီး ကျေနပ်နေသူနဲ့ နက်နက်နဲနဲ လေ့လာတဲ့သူ ဘယ်သူပိုများမယ်ထင်သလဲ ဦး။
ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ၊ လာအို၊ ကမ်ဘောဒီးယား၊ ဗီယက်နာမ်၊ သီဟိုဠ်၊ ဘူတန် နိုင်ငံတွေမှာ တော်လှန်ရေး လုပ်နေ သူများ သီလပျက်နေသူများ- ဘယ်လောက်များနေတယ် ဆိုတာ သမီး မတွေးမိဘူး ထင်ပါတယ်။ ဆက်လက် လေ့ လာကြည့်ပါဦး။ ပြီးတော့ ကမ္ဘာ့ပညာရှင်များက အခုခေတ်မှာ ဘယ်ဘာသာကို ကူးပြောင်းမှု အများဆုံးလဲ ဆိုတာလည်း လေ့ လာပါဦး။
သီလတွေကလည်း လောဘ၊ ဒေါသ ၊မောဟတွေ ကိုမထိန်းနိုင်ပါ၊ မဂ်ဥာဏ်သည်သာ ထိန်းနိုင်တာပါ ဦး။ ဒါကြောင့် မဂ် ဥာဏ် မရသ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလည်း အပါယ်ကျနိုင်ပါတယ် ဦး။
သမီးနဲ့ ဆွေးနွေးပေးတာ- စကားက အတော့ကို ကျယ်ပြန့်လာပြီ။ ဦး အချိန်တွေ အတော်ကို ပေးရပါတယ်။ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ - သမီးက မိမိပြောလိုတာ ဆိုရင် ကျမ်းတွေ၊ ကျမ်းစာပါစကားတွေကို ပြောတယ်။ တစ်ကယ် အဲ့ဒီ ကျမ်းကို လက်ခံလား မေး တော့- စကားလုံးရှောင်ခံတယ်- ဆိုတော့ သမီးကိုယ်သမီး ပြန်လည် သုံးသပ်ပါ။ တစ်ကယ်ပဲ ပိဋကတ်ကို လုံးဝ အမှန်လို့ လက်ခံပါတယ်ဆိုမှ ပိဋကတ်ပါ သွန်သင်ချက်များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆက်လက် ဆွေးနွေးတာ အဓိပ္ပါယ် ရှိပါမယ်။ ဦးလည်း အချိန်ပေးရကျိုး နပ်ပါမယ်။ ဒါမှမဟုတ် သမီးတိတိကျကျ လက်ခံတဲ့ ကျမ်းတစ်ခုကိုသာ ပြောပါ။ အဲ့ဒီ ကျမ်းအတိုင်း ဆွေး နွေးပါမယ်။
သမီးဘ၀ရဲ့ ဖြတ်သန်းမှုတွေကို သမီး မဆွေးနွေးပါနဲ့။ ကမ္ဘာ့ လူဦးရေ သန်း ၇၀၀၀ နီးပါးမှာ တစ်ယောက်စီတိုင် ဖြတ်သန်းမှု ဘ၀တွေ ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ဖြတ်သန်းမှုကို ကိုယ် အကောင်းမြင်နေခြင်းက ဘ၀င်မြင့်နေသူတွေရဲ့ စိတ်စရိုက်ပါ။- စကား ပြောတာမှာ ဘောင်လည်း မ၀င်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ ဦး အချိန်မပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုရင် စာပြန်စရာမလိုဘဲ ရပ်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဆိုးစရာ အကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူး ဦး။ ကျမ်းတွေရဲ့ မူလဇစ်မြစ်ကို ကြည့်ပါ ဦး။ ကျမ်းတွေဆိုတာ လူတွေ တရားကျင့်ကြံပြီးမှ ရေးသားခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းတွေပါ ဦး။ တရားကျင့်ဖို့က အရင်ပါ ဦး။ ဥပမာ- ဦးတရားကျင့် ပြီးလို့ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်း ပြန်ရေးတာနဲ့ ဒီတရားကိုပဲ တခြားလူတစ် ယောက် ကျင့်ကြံပြီးပြန်ရေးတာ မတူနိုင်ပါဦး။ အဲဒီတော့ သာမန်လူတစ်ယောက် အနေနဲ့ ပိဋကတ်ကို အရင်ဖတ်မဲ့အစား တကယ်လက်တွေ့ တရားကျင့်နည်းကို သင်ပေးနိုင်တဲ့ဆရာဆီမှာ နည်းယူပြီး တရားအရင်ကျင့်ပြီးမှ ပိဋကတ်ကို ဖတ်ရင် နားလည်မယ် ဦး။ ဒါတောင် ပိဋကတ်က ပုထုဇဉ်ကနေ ရဟန္တာအထိ အဆင့်မျိုးစုံပါနေတော့ ရဟန္တာအဆင့်မှ သိနိုင်တဲ့ အရာကို ကျွန်မကို ဦးလာမေးနေရင်လည်း အချိန်ကုန်ပြီးအကျိုးမရှိနိုင်ပါ။
သမီးက မိမိပြောလိုတာ ဆိုရင် ကျမ်းတွေ၊ ကျမ်းစာပါစကားတွေကို ပြောတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ဦးကို ဇဝေဇဝါဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့မိရင် ခွင့်လွတ်ပါ။ ကျွန်မဖတ်ခဲ့တာက တရားစခန်းတွေမှာ အလုပ်ပေးတရားလို့ ခေါ်တဲ့ လူသာမန်တွေ နားလည်လွယ်အောင် ရဟန္တာအရှင်မြတ်ကနေ ရေးသားထားတဲ့ အခြေခံစာအုပ်တွေဆိုတော့ ကျွန်မပြောတာတွေဟာ ပိဋကတ်မှာ ပါမှာပေါ့ ဦး။
တစ်ကယ် အဲ့ဒီ ကျမ်းကို လက်ခံလား မေးတော့- စကားလုံးရှောင်ခံတယ်- ဆိုတော့ သမီးကိုယ်သမီး ပြန်လည် သုံးသပ်ပါ။
ဒီနေရာမှာက ဦးက ပိဋကတ်ကို လက်ခံသလားမေးတော့ ရှောင်တယ်ဆိုတာ ကျွန်မ ပိဋကတ်ကို မဖတ်ဘူးပဲ လက်ခံတယ် လို့ ဘယ်လိုပြောမလဲ ဦး။ ကျွန်မ ပြောနိုင်တာက ကိုယ်တော် ဂေါတမဟာ ကျွန်မ ဆရာရဲ့ ဆရာဖြစ်ပြီး ကျွန်မရဲ့ မြတ်စွာ ဘုရားဖြစ်ပါတယ် ဦး။ ဒါကြောင့် ရဟန္တာအရှင်မြတ်များ ရေးသားထားတဲ့ ပိဋကတ်ကို ကျွန်မ ယုံကြည်ပါတယ် ဦး။
တစ်ကယ်ပဲ ပိဋကတ်ကို လုံးဝ အမှန်လို့ လက်ခံပါတယ် ဆိုမှ ပိဋကတ်ပါ သွန်သင်ချက်များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆက်လက် ဆွေး နွေးတာ အဓိပ္ပါယ် ရှိပါမယ်။ ဦးလည်း အချိန်ပေးရကျိုး နပ်ပါမယ်။
ပိဋကတ်ကို ကျွန်မ ယုံကြည်ပါတယ် ဦး။ ဒါပေမယ့် တရားမကျင့်တဲ့ ဦးနဲ့ ကျွန်မဆက်ဆွေးနွေးနေရင်လဲ အချိန်ကုန်ပြီး အကျိုးမရှိနိုင်ပါ။
သမီးဘ၀ရဲ့ ဖြတ်သန်းမှုတွေကို သမီး မဆွေးနွေးပါနဲ့။ ကမ္ဘာ့ လူဦးရေ သန်း ၇၀၀၀ နီးပါးမှာ တစ်ယောက်စီတိုင် ဖြတ်သန်းမှု ဘ၀တွေ ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ဖြန်သန်းမှုကို ကိုယ် အကောင်းမြင်နေခြင်းက ဘ၀င်မြင့်နေသူတွေရဲ့ စိတ်စရိုက်ပါ။-
ဘဝဖြတ်သန်းမှုတွေ မဟုတ်ပါ တရားကျင့်ကြံမှုတွေပါ ဦး။ ဦးကြည့်တတ်ရင် မြင်နိုင်တာကတော့ ကျွန်မလို ပိဋကတ်ကို မဖတ်ဘူးပဲ အခြေခံစာအုပ် ပဲဖတ်ထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ဟာ ဘာကြောင့် ဦးရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ပြန်ဖြေကြားပေးနိုင်တာ လဲ။ ဒါကိုကြည့်ပြီး ဦးသိရမှာက တကယ်တရားပြနိုင်တဲ့ ဆရာရှိပြီး ကိုယ်ကတကယ်ကျင့်ရင် ပိဋကတ်ကိုဖတ်စရာမလိုဘဲ နိဗ္ဗာန် ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပဲ ဦး။
နောက်တစ်ခုက ကျွန်မ ဦးဆီက သိစရာမကျန်တော့ပါဘူး ဦး။ ကျွန်မ အစ္စလာမ်ဘာသာအကြောင်း နားလည်သွားပြီဖြစ်လို့ ကျွန်မကို စာပြန်စရာ မလိုတော့ပါဘူး ဦး။
ပိဋကတ်ကို ကျွန်မ ယုံကြည်ပါတယ် ဦး။
“စကြာဝဠာထဲမှာ လူတွေ ဖြစ်ပြီးမှ လူတွေက တောင့်တလို့ နေ၊ လ တို့ ဖြစ်လာတယ်” လို့ ၀ါသေဋ္ဌ ကို ကိုယ်တော် ဂေါတမ က ပြောခဲ့ကြောင်း သမီးက လုံးဝ မှန်ပါတယ်လို့ ပြောနေတဲ့ ပိဋကတ်ထဲမှာ အတိအကျ ပါနေတယ်-၊ သုတ်ပါတိက၀ဂ္ဂ၊ အဂ္ဂညသုတ်ကို ဖတ်ကြည့်ပါ။- (မြန်မာပြန်ကို ဖတ်ချင်ရင် သုတ်ပါတိက၀ဂ္ဂ ပါဠိတော် မြန်မာပြန် စာမျက်နှာ ၇၅၊ ၇၆ ကို ဖတ်ပါ။ သို့မဟုတ် သမီးက ဘာသာပြန်ကို ဘ၀င်မကျရင် သမီး ကိုယ်တိုင် ဘာသာပြန်ကြည့်ပါ။)
သို့မဟုတ် သမီးကိုယ်တိုင် တရားကျင့်ကြည့်ပါ။ စကြာဝဠာထဲမှာ လူတွေက အရင် ဖြစ်တာလား။ နေ၊ တို့ လ တို့က အရင် ဖြစ်တာလား- အဖြေထွက်အောင်ထိ တရားကျင့်ကြည့်လိုက်ပါ သမီး။
(၁) ဖြေပြီးရင် (၂) (၃) (၄)------------ တွေ သမီးကို ပြောပြပါမယ်။
အဲ့လို အမှားကြီးကို ခပ်တည်တည်နဲ့ ပြောထားတာမျိုးကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀၀ ကလူကတော့ မှန်တယ်လို့ လက်ခံမှာပေါ့။ အ လားတူပဲ သမီး ကျင့်နေတဲ့ တရားဆိုတာကို မှောင်ကျနေတဲ့ မြန်မာပြည်ထဲက လူတစ်စုလောက်ပဲ လက်ခံမှာပေါ့။ စဉ်းစား ပါ သမီး။ ကမ္ဘာကို လွတ်လပ်တဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ ထွက်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကမ္ဘာကိုတော့ ထွက်တယ်၊ ဦးနှောက်က မြန်မာပြည်ထဲ က အမှောင်တိုက်ထဲမှာ ထားခဲ့တယ် ဆိုရင်တော့-- သမီး သဘောပေါ့လေ။
ဦးပြောခဲ့တဲ့ အထဲမှာ မမြင်နိုင်တဲ့ အရာတွေကိုယုံဖို့ မြင်နိုင်တဲ့အရာတွေဟာ ယုတ္တိရှိရမယ်လို့ ဆိုတယ်မလား ဦး။ ဒါဆို ကျွန်မနဲ့ ဦး နှစ်ယောက် စလုံး လက်လှမ်း မမှီနိုင်တဲ့ စကြာဝဠာအစ အကြောင်းကို အငြင်းပွားနေရင် အချိန်ကုန်ပါတယ် ဦး။ ဒီတော့ “အနိစ္စ” (ဒီလောကမှာမြဲတာတစ်ခုမှ မရှိဘူး)ဆိုတဲ့ ပိဋကတ် ထဲမှာပါတဲ့ စကားလုံးက ယုတ္တိရှိမရှိကို လက်လှမ်း အမှီဆုံးဖြစ်တဲ့ ဦးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ “အနိစ္စ”မဟုတ်ကြောင်း ငြင်းပြပါဦး။
ဟုတ်ကဲ့ တရားကျင့်လို့ အဆင့် (၃) ရောက်ရင် တရားကသင်လို့ သိလာမှာပဲ ဦး။ ဦးအနေ နဲ့ လက်လှမ်းမှီတဲ့ အဆင့်ကနေ စပြီး လေ့လာမှ မှန်မှာပေါ့ ဦး။ စကြာဝဠာ ထဲမှာ လူတွေက အရင် ဖြစ်တာလား။ နေ၊ တို့ လ တို့က အရင် ဖြစ်တာလား- ဆို တာ ဦး မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့မို့လို့ ငြင်းနေတာလား ဦး။
အဲ့လို အမှားကြီးကို ခပ်တည်တည်နဲ့ ပြောထားတာမျိုးကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀၀ ကလူကတော့ မှန်တယ်လို့ လက်ခံမှာပေါ့။ အ လားတူပဲ သမီး ကျင့်နေတဲ့ တရား ဆိုတာကို မှောင်ကျနေတဲ့ မြန်မာပြည်ထဲက လူတစ်စု လောက်ပဲ လက်ခံမှာပေါ့။ စဉ်း စားပါ သမီး။ ကမ္ဘာကို လွတ်လပ်တဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ ထွက်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကမ္ဘာကို တော့ ထွက်တယ်၊ ဦးနှောက်က မြန်မာ ပြည်ထဲက အမှောင်တိုက်ထဲမှာ ထားခဲ့တယ် ဆိုရင်တော့-- သမီး သဘောပေါ့လေ။
ကမ္ဘာကိုထွက်ကြည့်လိုက်တော့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေနဲ့ ပြည့်နှပ်နေပြီး မေတ္တာတရား ခေါင်းပါးကာ ကိုယ်ချင်းစာ တရားမရှိတော့တဲ့ သူတွေ တနေ့တခြား များများလာတာကို တွေ့တာပဲဦး။ ငရဲမှာမဆန့်တော့အောင် များလာတဲ့ အချိန် ရောက်ရင်တော့ ကမ္ဘာမီးလောင်မှာပေါ့။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ရောဂါအသစ်တွေတိုးပြီး အသက်တွေ တဖြေးဖြေး တိုလာ ကြတော့မှာပဲ ဦး။ ဘာသာတရားတစ်ခုကို ကိုးကွယ်လိုက်လို့ လူသတ်၊ ဗုံးခွဲ၊ ဖျက်ဆီးချင်တဲ့ စိတ်တွေဖြစ်ပေါ် လာတယ်ဆို ရင် ဒီဘာသာတရားဟာ သာယာတဲ့လူ့ဘောင်ကို ဘယ်လိုဖြစ်စေမှာလဲ ဦး။ ငါတို့ကဒီလိုလူမဆန်တဲ့ အကြောင်းတရား တွေကိုစပြီး ပြုလုပ်လို့ ငါတို့ကိုတခြားဘာသာဝင်တွေက အထင်အမြင်သေးတဲ့ အကျိုးတရားကိုရတယ်ဆိုတဲ့ သဘော တရားလေးကိုတောင်မှ မဆင်ခြင်နိုင်ဘဲ ကိုယ်လက်လှမ်းမမီနိုင်တဲ့ စကြာဝဠာအစကို ကျမ်းတွေဖတ်ပြီး စိတ်ကူးယှဉ်နေရင် တန်ဖိုးရှိတဲ့လူ့ဘဝကို အချိန်ဖြုံးနေ တာပါပဲ။ ကျွန်မ မြန်မာပြည်ကနေ ကမ္ဘာကိုထွက်ကြည့်ပြီးကတည်းက ဒီမမြဲတဲ့ လောက ကနေ အပြီးအပိုင်ထွက်တဲ့ နည်းကို ဖေါ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်တော်ဂေါတမကို ပိုပြီး ကြည်ညိုလေးစားသွားတာပါ ဦး။
စကြာဝဠာအစကို ဦးသိပ်ပြီးသိချင်နေတယ်ဆိုတာ ဦးက မူလဇစ်မြစ် ပရမတ်ဘုရားဆီကို ပြန်သွားဖို့ အတွက်ပါ။ ဒီနေရာမှာ မူလဇစ်မြစ်ကို ဦးက စကြာဝဠာအစ ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့ တရားသေတွက်ထားလို့ပါ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇကို ရှာချင် ရင် အခုခေတ်မှာ အဲဒီလူရဲ့ DNA ကိုစစ်ကြည့်တယ် ဦး။ အဲဒီလိုပဲ လူရဲ့ မူလဇစ်မြစ်ကိုသိချင်ရင် လူဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ် ကို တရားကျင့်ပြီး ရင့်သန်လာတဲ့ ဥာဏ်နဲ့ မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာ ရှာတာဟာ ပိုပြီး ယုတ္တိရှိပါတယ် ဦး။ ဥာဏ်ရင့်သန်လာရင် မိမိ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ကလီစာတွေ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်နေတယ် ဆိုတာကအစ ရင်ခွဲကြည့်စရာမလိုဘဲနဲ့ မြင်နိုင်တယ် ဦး။ အဲဒီ လိုရှာရင်းနဲ့ ထပ်ပြီးဥာဏ်တက်လာရင် လူရဲ့မူလဇစ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ ပရမတ် “ဓါတ်” ၆ခု တို့ စက္ကန့်မလပ် ရွေ့လျားဖေါက်ပြန် ပြောင်း လဲနေတာကို တွေ့ရမယ် ဦး။ မိမိခန္ဓာကိုယ်တင်မက ဒီလောကမှာ ရှိတဲ့အရာအားလုံးဟာ ကြာချိန် အနည်းအများ အလိုက်ကိုယ်တော်ဂေါတမပြောတဲ့ အတိုင်း “အနိစ္စ” ဆိုတာကို ဆင်ခြင်နိုင်ပြီဆိုရင် မဂ်ဥာဏ်ကိုရပြီး အသင်္ကတဓါတ် ဖြစ် တဲ့ “နိဗ္ဗာန်” ကိုမြင်ပါပြီ ဦး။
“အရာအားလုံးဟာ ပရမတ်ဘုရားဆီမှ စ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ပရမတ်ဘုရားရှင်ဆီ ပေါင်းဆုံသွားဘို့ပါပဲ။ (ဆိုလိုတာက သင်္ကတနဲ့ ဖေါ်ပြလို့ မရနိုင်တဲ့ အသင်္ကတ ဓါတ် တစ်ခု ဖြစ်သွားဘို့ပါပဲ)။”ဆိုပြီး သွားနိုင်တဲ့ နည်းအတိအကျမပြောခဲ့တဲ့ ဦးရဲ့ ပန်းတိုင် ကို ဦးကျွန်မကိုပြောပြကတည်းက မူလဇစ်မြစ် ပရမတ် “သင်္ကတဓါတ်” တွေကနေ မဂ်ဥာဏ် ကကူးပြောင်းပေး လို့ အ သင်္ကတ ဓါတ်ဖြစ်တဲ့ “နိဗ္ဗာန်” ကို မြင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ ကျွန်မဟာ ဦးရဲ့ပန်းတိုင်ကို ရောက်ပြီးသားဆိုတာကို နားလည် လိုက်ပါ တယ် ဦး။
ကျွန်မပြောတာကို ဦးလက်ခံတာ လက်မခံတာ ဦးသဘောပါ။ ကျွန်မ ဦးနဲ့ဆက်ပြီး ဆွေးနွေးစရာမရှိတော့ပါဘူး ဦး။ အချိန် ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ် ဦး။
သမီးရဲ့ ဗဟုသုတက နေ၊ လ၊ ကမ္ဘာ ဖြစ်တည်မှုကိုတောင် မလေ့လာမိသေးဘဲကိုး။ သမီးနဲ့ ဦး ဘယ်လို ဆွေးနွေးမလဲ သမီး။ ဆယ်တန်း အဆင့်ရှိသူနဲ့ မူကြိုကျောင်းသူ လောက်ကွာဟ နေတော့ ---၊ ဆွေးနွေးပွဲ ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ အဓိပ္ပါယ် ရှိ မှာ မဟုတ်ဘူးပေါ့ သမီး။
သမီး မသိသေးတာ ထားပါတော့- သဗ္ဗညုဉာဏ်ကို ရခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ်တော်ဂေါတမက သူနဲ့ နှိုင်းရင် ဉာဏ်အားဖြင့် ဘာအဆင့်မှ မနှိုင်းသာတဲ့ သာမန်လူသား ပညာရှင်တွေတောင် စကြာဝဠာ၊ နေ၊ လ၊ ကမ္ဘာတွေက အရင် ဖြစ်လာတယ်၊ ပြီး မှာ ကမ္ဘာမှာ သက်ရှိဖြစ်လာတယ် ဆိုတာလောက်ကို သိနေပြီလေ။ အဲ့လို ဘာမှ မသိဘဲ ခပ်တည်တည်နဲ့ ရမ်းပြော မှန်း ပြော လူတစ်ဦးရဲ့ စကားကို ယုံကြည်ပြီး- ဘယ်လိုလုပ် တရားကျင့် မလဲ။
အဲ့လို လူတစ်ဦးက ပြောနေတဲ့ နိဗ္ဗာန် တို့ ဈာန်တို့ ဆိုတာ- သူ့ဟာသူ စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ကင်ပွန်းတပ်ပေးထားတဲ့ အရာများ သာ ဖြစ်မှာပါ။ စိတ်ပညာကို လေ့လာလိုက်ရင် အဲ့ဒီထက် ပိုပြီး သိနိုင်ပါတယ်။ ပေါက်မြောက် နိုင်ပါတယ်။ အခုရက်ပိုင်းမှာ စိတ်ဆိုးမှု၊ ဒေါသဖြစ်မှု လျှော့နည်းအောင် ထိုးမဲ့ဆေးတောင် ပေါ်လာပြီ။ (ဆေးသိပ္ပံဌာနက ကြေငြာတာ ၅ ရက်ပဲ ရှိသေး တယ်) သမီး။ စိတ်မငြိမ်လို့ စိတ်ကို ငြိမ်အောင် ဆေးစား၊ ဆေးထိုးဘို့ လည်း ပေါ်နေတာ ကြာပါပြီ။ စေတနာနဲ့ ပြောတာပါ။
နေ၊ လ၊ ကမ္ဘာ ဖြစ်တည်မှုလောက်တော့ သမီး လေ့လာလိုက်ပါ။ သမီး အတွက် မဟုတ်တောင် သမီးရဲ့ အနာဂါတ်မျိုးဆက် အတွက် စဉ်းစားပေးလိုက်ပေါ့။
ဦးက အခြေအနေတစ်ခုမှာ မှန်လိုက်၊ နောက်အခြေအနေတစ်ခုမှာ မှားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ သိပ္ပံပညာကို မှန်တယ်လို့ တရား သေ တွက်ထားတာပဲ။ သိပ္ပံပညာဆိုတာ မှန်းဆနေတာပဲဦး ဘယ်တော့မှ တစ်ရာ ရာခိုင်နှုန်းမမှန်ဘူး။ “ပညတ်” ပေါ်မှာ အခြေခံထားလို့ အမြဲမမှန်နိုင်ဘူး။ ဥပမာ- သက်တမ်း အရင့်ဆုံး လူသားရဲ့ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းကို လာအိုနိုင်ငံမှာ တွေ့ တယ်ဆိုတာနဲ့ လူတွေဟာ လာအိုနိုင်ငံမှာ စဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ သူ့ထက် သက်တမ်းရင့်တဲ့ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း ထပ်မတွေ့တော့ဘူးလို့ မပြောနိုင်သလို ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတောင် အစအနမကျန်တော့အောင် ကြာသွားလို့လားဆိုတာ မသိနိုင်ဘူး ဦး။ ထားပါတော့ ဦးပြောသလို လ၊ ကမ္ဘာ တို့ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေမှန်းနိုင်တယ်ထား ဦး။ အနား တောင်ကပ် လို့မရတဲ့ “နေ” ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို ဘယ်လို မှန်းဆထားပြီး ဘယ်လောက်မှန်အောင်မှန်းနိုင်မှာလဲ ဦး။
သိပ္ပံပညာနဲ့ ယှဉ်ကြေးဆို ကိုယ်တော်ဂေါတမက “ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ရုပ်တရားဆိုတာ မြောက်မြားစွာသော ကလပ်မှုန်ကလေး များဖြင့် စုပေါင်းဖွဲ့စည်း ထားသောအရာဖြစ်ပြီး မျက်စိတစ်မှိတ်လျှင် ကုဋေငါးထောင် ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်နေကြောင်း” ကို “ခန္ဓ ဝဂ္ဂသုတ်” မှာ ဟောထားတယ် ဦး။ စာပေတောင် မပေါ်သေးတဲ့ ခေတ်မှာဆေးသိပ္ပံပညာမှာ တွေ့ရှိတဲ့ ဆဲလ်တွေကို ကိုယ်တော်ဂေါတမ ဟောခဲ့ပါတယ်ဦး။
သမီး မသိသေးတာ ထားပါတော့- သဗ္ဗညုဉာဏ်ကို ရခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ်တော်ဂေါတမက သူနဲ့ နှိုင်းရင် ဉာဏ်အားဖြင့် ဘာအဆင့်မှ မနှိုင်းသာတဲ့ သာမန်လူသား ပညာရှင် တွေတောင် စကြာဝဠာ၊ နေ၊ လ၊ ကမ္ဘာတွေက အရင် ဖြစ်လာတယ်၊ ပြီးမှာ ကမ္ဘာမှာ သက်ရှိဖြစ်လာတယ် ဆိုတာလောက်ကို သိနေပြီလေ။ အဲ့လို ဘာမှ မသိဘဲ ခပ်တည်တည်နဲ့ ရမ်းပြော မှန်း ပြော လူတစ်ဦးရဲ့ စကားကို ယုံကြည်ပြီး- ဘယ်လိုလုပ် တရားကျင့် မလဲ။
ဦးရဲ့ပန်းတိုင်ကိုအရင်ရောက်အောင်သွားပြီးမှ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အနိစ္စဟုတ်မဟုတ် ဆင်ခြင်ပြီးမှ သဗ္ဗညုဉာဏ်ကို ဝေဖန်တာ ပိုမှန်မယ် ထင်ပါတယ် ဦး။
အခုရက်ပိုင်းမှာ စိတ်ဆိုးမှု၊ ဒေါသဖြစ်မှု လျှော့နည်းအောင် ထိုးမဲ့ဆေးတောင် ပေါ်လာပြီ။ (ဆေးသိပ္ပံ ဌာနက ကြေငြာတာ ၅ ရက်ပဲ ရှိသေးတယ်) သမီး။ စိတ်မငြိမ်လို့ စိတ်ကို ငြိမ်အောင် ဆေးစား၊ ဆေးထိုးဘို့ လည်း ပေါ်နေတာ ကြာပါပြီ။ စေတနာနဲ့ ပြောတာပါ။
ဇရာကိုအန်တုတဲ့ဆေးလည်း ပေါ်နေပါပြီ ဦး။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ အဲဒီဆေးတွေကြောင့် မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ဘေး ထွက်ဆိုးကျိုးတွေက လူတွေကို ထိခိုက်လို့ ပြဿနာတွေ အများကြီးဖြစ်ကြဦးမယ် ဦး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဒီပရမတ်ဓါတ်တွေ ရဲ့ ဖေါက်ပြန်တဲ့ သဘောကနေဖြစ်လာတာကို မသိတော့ တရားသေတွက်လို့မရတဲ့ “ဓါတ်” တွေ ဖေါက်ပြန်တဲ့အခါ ပိုဆိုးရုံ ပဲ ရှိမှာပေါ့ ဦး။
နေ၊ လ၊ ကမ္ဘာ ဖြစ်တည်မှုလောက်တော့ သမီး လေ့လာလိုက်ပါ။ သမီးအတွက် မဟုတ်တောင် သမီးရဲ့ အနာဂါတ်မျိုးဆက် အတွက် စဉ်းစားပေးလိုက်ပေါ့။
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်မရဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေကို လောကီ ပညတ် သိပ္ပံပညာအရ ဘယ်လိုယူဆထားတယ်၊ လောကုတ္တရာ ပရမတ် အရ ဘယ်လိုမြင်တွေ့ရ တယ်ဆိုပြီး နှစ်မျိုးစလုံး သိအောင်ပြောပြပါ့မယ် ဦး။
အချိန်ရရင် ကျွန်မသိချင်တာ နှစ်ခုကိုကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးပါ ဦး။
၁) “အရာအားလုံးဟာ ပရမတ်ဘုရားဆီမှ စ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ပရမတ်ဘုရားရှင်ဆီ ပေါင်းဆုံသွားဘို့ပါပဲ။ (ဆိုလိုတာက သင်္က တနဲ့ ဖေါ်ပြလို့ မရနိုင်တဲ့ အသင်္ကတ ဓါတ် တစ်ခု ဖြစ်သွားဘို့ပါပဲ)
၂) အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေ ဘာကြောင့် သောကြာနေ့မှာ ဘလီတက်ပါသလဲ ဦး။
၁) “အရာအားလုံးဟာ ပရမတ်ဘုရားဆီမှ စ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ပရမတ်ဘုရားရှင်ဆီ ပေါင်းဆုံသွားဘို့ပါပဲ။ ၂း၁၅၆
၂) သောကြာနေ့လို့ မဟုတ်ပါ။ တစ်နေ့မှာ ၅ ကြိမ် ဓါတ်ကူးယူရပါတယ်။ ဒါကို ဆွလာ့သ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဓါတ်ကူးတယ် ဆို တာ- တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်အောင် ဓါတ်ကူးခြင်း ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီမှာ အဆင့်တွေ အများကြီး ရှိတယ်-။ (က) သူဟာ စိတ် ကိုတည်ငြိမ်အောင် လေ့ကျင့်ခြင်း (ခ) သူဟာ သူ့ကိုယ်သူ နှိမ့်ချခြင်း သဘောကို လေ့ကျင့်ခြင်း (ဂ) သူဟာ ပရမတ် ဘုရား ရှင်က (ကိုယ်တော်မုဟမ္မဒ်အား ဉာဏ်စဉ်ပွင့်လန်းစေခြင်းဖြင့် ကိန်းဝပ်အသိပေးထားတဲ့ ဉာဏ်စဉ်ဓမ္မ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အံ အား- မိမိ၏နှလုံးသား၌ ဓါတ်ကူးစေရန် ဆောက်ရွက်နေခြင်း (ဆွလာ့သ် ပြုတဲ့အခါ- ကျမ်းတော်ပါ ဥပဒေများ၊ အဆုံးအမ များကိုသာ ပြန်လည်ရွတ်အံနေရခြင်း) တို့ ဖြစ်တယ်။--(ကျမ်းတော်ပါ ဥပဒေများအား မိမိကိုယ်မိမိ အမြဲအသိပေးနေခြင်း အားဖြင့် မိမိက အဲ့ဒီလမ်းညွှန်အတိုင်း ဘ၀ကို တည်ဆောက်စေခြင်း ဖြစ်တယ်။) ဒါက အကြမ်းဖျင်းလေး ပြောတာပါ။- လူ တစ်ဦးဟာ အခြေအနေမျိုးစုံကြောင့် နေ့စဉ် မဆောင်ရွက်နိုင်ရင် အနည်းဆုံးတစ်ပါတ် တစ်ကြိမ် လူစုဝေးပြီး- သူ့ကိုယ် သတိဖေါ်ပေးခြင်း ဖြစ်တယ်။ ဒါကို ယောင်းမုလ်ဂျွမ္မာဟ် လို့ခေါ်တယ်။ အဲ့ဒီနေ့ဟာမြန်မာပြက္ခဒိန်ရဲ့ သောကြာနေ့ ဖြစ်နေပါ တယ်။
အချိန်ရရင် ဖတ်ကြည့်ဖို့ ကျွန်မတွေ့ထားတဲ့ Web page ပါ ဦး။ ဦး သိပြီးသားလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ။
အဲ့ဒါတွေ ရှိသလို- ဒီလို Report တွေလည်း ရှိတယ် ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
Posted on 28 January 2010 by Danios
Europol releases an annual study of terrorism; the results do not support claims that "(nearly) all Muslims are terrorists"
Islamophobes have been popularizing the claim that“not all Muslims are terrorists, but (nearly) all terrorists are Muslims.” Despite this idea becoming axiomatic in some circles, it is quite simply not factual. In my previous article entitled “All Terrorists are Muslims…Except the 94% that Aren’t”, I used official FBI records to show that only 6% of terrorist attacks on U.S. soil from 1980 to 2005 were carried out by Islamic extremists. The remaining 94% were from other groups (42% from Latinos, 24% from extreme left wing groups, 7% from extremist Jews, 5% from communists, and 16% from all other groups).
But what about across the pond? The data gathered by Europol strengthens my argument even further. (hat tip: Koppe) Europol publishes an annual report entitled EU Terrorism Situation and Trend Report. On their official website, you can access the reports from 2007,2008, and 2009. (If anyone can find the reports from earlier than that, please let me know so we can include those as well.)
The results are stark, and prove decisively that not all terrorists are Muslims. In fact,awhopping 99.6% of terrorist attacks in Europe were by non-Muslim groups;agood 84.8% of attacks were from separatist groups completely unrelated to Islam.Leftist groups accounted for over sixteen times as much terrorism as radical Islamic groups. Onlyameasly 0.4% of terrorist attacks from 2006 to 2008 could be attributed to extremist Muslims.
Here are the official tables provided in the reports…
(According to the report, there was 1 “Islamist attack” in the UK in 2008, which was omitted in the table above. It has been included in the bar graph below.)
Just glancing at those tables is enough to know how absurd it is to claim that “all terrorists are Muslims.” That statement is nowhere near the truth. If we compile the data, it comes out to this:
On p.7, the 2009 Europol report concludes:
Islamist terrorism is still perceived as being the biggest threat worldwide, despite the fact that the EU only faced one Islamist terrorist attack in 2008. This bomb attack took place in the UK…Separatist terrorism remains the terrorism area which affects the EU most. This includes Basque separatist terrorism in Spain and France, and Corsican terrorism in France…Past contacts between ETA and the FARC illustrate the fact that also separatist terrorist organizations seek cooperation partners outside the EU on the basis of common interests. In the UK, dissident Irish republican groups, principally the RIRA and the CIRA, and other paramilitary groups may continue to engage in crime and violence.
Perception is not reality. Due to the right wing’s influence and propaganda, people mistakenly think that Islamic terrorism is the greatest threat to the Western world. It is evenacommonly held belief that Islamic terrorism poses an existential threat–that the very survival of the Western world is at stake. Of course, the reality is that there are other groups that engage in terrorism onamuch larger scale, yet these terrorist incidents are minimized. Acts of terrorism committed by Muslims are purposefully sensationalized and focused upon, culminating in the idea that“(nearly) all terrorists are Muslims.”
Terrorism from Islamic extremists is certainlyacause for concern, but it need not be an issue that creates mass hysteria. Nor should it be allowed to be suchacritical issue that we are willing to sacrifice our ideals or civil rights for fear of it. Neither should we be reduced toastatus of absolute sissitude. We have analyzed data from America and Europe (a good portion of the entire Western world), and the threat from Islamic terrorism is much more minimal than commonly assumed; in the U.S., it accounts for 6% of terrorist attacks, and in Europe not even half ofapercent.
It is only through sensationalism and fear mongering that the topic of Islamic terrorism is allowed to be used to demonizeareligious community that happens to beaminority in the West. When confronted by such lunacy, we ought to respond with the facts and the truth.
“အရာအားလုံးဟာ ပရမတ်ဘုရားဆီမှ စ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ပရမတ်ဘုရားရှင်ဆီ ပေါင်းဆုံသွားဘို့ပါပဲ။ ၂း၁၅၆ ဆိုတော့
(ဆိုလိုတာက သင်္ကတနဲ့ ဖေါ်ပြလို့ မရနိုင်တဲ့ အသင်္ကတ ဓါတ် တစ်ခု ဖြစ်သွားဘို့ပါပဲ) ကွင်းထဲကစကားကဘယ်ကရပါသလဲ။
ဒီတော့ “အနိစ္စ” (ဒီလောကမှာမြဲတာတစ်ခုမှ မရှိဘူး)ဆိုတဲ့ ပိဋကတ် ထဲမှာပါတဲ့ စကားလုံးက ယုတ္တိရှိမရှိကို လက်လှမ်း အမှီဆုံးဖြစ်တဲ့ ဦးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ “အနိစ္စ” မဟုတ်ကြောင်း ငြင်းပြပါဦး။
ဦး ငြင်းစရာမှ မလိုတာ-၊ ကိုယ်တော်ဂေါတမကိုယ်တိုင် ငြင်းပြီးသားပဲ-- အင်္ဂုတ္ထိုရ်၊ ၄ ယောဓာဇီ၀၀ဂ်၊ ဥပ္ပါဒါသုတ်။
-ကိုယ်တော်ဂေါတမက အနိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ ဘယ်လိုငြင်းတယ်လို့ ဦးထင်ပါသလဲ။
သမီးက အထင်တွေ ကို အမှန်လို့ သတ်မှတ်နေတာကိုး။ သမီးက- အရာရာဟာ အနိစ္စချည်းပဲလို့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာမှာ သွန်သင် တယ်လို့ထင်ထားတာမဟုတ်လား- ဦး အပေါ်မှာ ထောက်ပြထားပါပြီ။- အမှန်ကို လည်း ကြည့်လိုက်ပါဦး။ အခုလည်း သမီး လက်လှမ်းမှီတဲ့အဆင့်များ ဆိုတာ မှားနေသေးတယ်လို့ ဦး ပြောပါရစေ။
-အထင်တွေ မဟုတ်ပါ။ အနိစ္စမဟုတ်တဲ့အရာကိုပြပါဦး။
ကမ္ဘာကို မျက်လုံးဖွင့်ပြီး ကြည့်ပါသမီး၊ အနိစ္စ မျက်မှန်တွေ တတ်မထားပါနဲ့- နေတွေ လ တွေ မဖြစ်မှီက ပကတိ မှောင်အတိ ကြီးထဲမှာ လူဖြစ်တယ် ဆိုတာကို သမီးလက်ခံနေတော့- သက်ရှိတစ်ခု ဖြစ်ဘို့ အလင်းရောင်လိုတယ် ဆိုတဲ့ လက်တွေ့ သီအို ရီကြီးက သမီးက အစွဲနဲ့ ခံငြင်းချင်တာကိုး။ ကမ္ဘာကို အဲ့လို မျက်လုံးမျိုးနဲ့ ကြည့်လို့တော့-- ကမ္ဘာ့ဆက်ပြီး ပြားနေဦးမှာပဲ သမီး။
“သက်ရှိတစ်ခု ဖြစ်ဘို့ အလင်းရောင်လိုတယ်” ဆိုတာ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်မမှန်တဲ့ သိပ္ပံပညာပါ ဦး။ တကယ်တော့ အလင်းဆို တာ ပရမတ် ဖြစ်တဲ့ “ တေဇော”ဆိုတဲ့ “ဓါတ်”ရဲ့ ပူလိုက် ၊အေးလိုက်၊ လင်းလိုက်၊ ပွားများလိုက် စတဲ့များပြားလှတဲ့ တန်းခိုး တွေထဲက တစ်ခုပါ။ သက်ရှိတစ်ခုဖြစ်ဘို့ “ တေဇော” လိုတာ ပါဦး။ ဦးလည်း မူလအစကို စကြာဝဠာအစလို့ တရားသေ တွက်ပြီး နောက်ပြန်တွေတွေးကာ ဘယ်သူဖန်ဆင်းထားမှန်းမသိတဲ့ ပရမတ်ဘုရားဆီကို စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် သွားနေ သ၍ အမှန်မြင်မှာမဟုတ်ပါ။
အနိစ္စ (မမြဲခြင်း) ချည်း မဟုတ်ဘူး၊ နိစ္စ (မြဲခြင်း) ဆိုတာဟာ အနိစ္စရဲ့ ပင်မနောက်ခံ အကြောင်းရင်း ဖြစ်တယ်-- ဆိုတာ သမီး မှ မသိသေးဘဲကိုး။ ဟို အပေါ်မှာ ကျမ်းညွှန်းပေးထားတယ် ဖတ်ကြည့်လိုက် ပါ။
-ကျွန်မမှာ ကျမ်းမရှိလို့ အဲဒီနေရာကို ရေးပြပါ ဦး။
ဆက်ဆွေးနွေးလိုရင်လည်း ရိုသားမှုကို ထားပါ သမီး၊ အနိုင်လိုချင်မှုထက် အမှန်က ဘာလဲလို့ ဆင်ခြင်တဲ့ စိတ်ကို ထားပါ။ သမီးပြောနေတာတွေက ဘာသာတရားတစ်ခုမှာပြောတဲ့ တစ်ပိုင်းတစ်စတွေချည်း ဖြစ်နေသေးတယ်။ သမီးကိုယ်တိုင် အ ပြည့်အ၀ကို မလေ့လာရသေးဘူးပဲ။ ဒီတော့ သမီး ဆက်လက်လေ့လာပါဦး။ မလေ့လာဘဲ-- စိတ်အကြောင်းပဲ လျှောက်ပြော နေရင်တော့- လူတွေက ဆိုက်ကို သမား လို့ သတ်မှတ်လိမ့်မယ်။
အနိုင်ရချင်လို့ ဆက်ပြောနေတာမဟုတ်ပါ။ ဦးရဲ့ Web site မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ ကုရ်အံကျမ်းအကြောင်း သီးသန့် ရေး ရင် ကျွန်မ ဦးကိုဆက်သွယ်စရာ အကြောင်းမရှိပါ။ ဦးက ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ အယူအဆတွေကို မှားယွင်းစွာ တွေးခေါ် ယူဆပြီး ဖေါ်ပြထားတာဟာ “သူတစ်ပါးကိုးကွယ်သော ဘုရားများကို မဆဲဆိုရ” ဆိုတဲ့ ဦးရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကို မသွေဖီယုံတမယ် ပုတ်ခတ်ပြောဆိုထားလို့ ဆက်သွယ်ရခြင်းပါ။ အလုံးစုံသိမြင်တဲ့ ဥာဏ်နဲ့ပြောတာကို သာမန်လူဖြစ်တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ များ မတွေးတောနိုင်သေးတာလား၊ ငါ့ရဲ့ဥာဏ်ကရော အလုံးစုံသိမြင်တဲ့ ဥာဏ်ဆိုတာကို ဝေဖန်နိုင်ပါ့မလား ဆိုပြီး မဆင်ခြင် နိုင်တာဟာ စာတွေအရမ်းဖတ်ပြီး မာန်တက်သွားတယ်လို့ပဲ နားလည်လိုက်ပါတယ်။
ရိုးသားစွာပြောရရင်တော့ ဦးရဲ့အယူအဆတွေဟာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ် မှီခိုတဲ့အတွက် သူတစ်ပါးဘာသာအပေါ် မှီခို ပြီး ကိုယ့်ဖာသာ မရပ်တည်နိုင်တဲ့ မပြည့်ဝသော၊ အင်အားချိနဲ့သော အစ္စလာမ်အယူအဆတွေဖြစ်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်ဦး။
“အရာအားလုံးဟာ ပရမတ်ဘုရားဆီမှ စ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ပရမတ်ဘုရားရှင်ဆီ ပေါင်းဆုံသွားဘို့ပါပဲ။ ၂း၁၅၆ ဆိုတော့ (ဆိုလို တာက သင်္ကတနဲ့ ဖေါ်ပြလို့ မရနိုင်တဲ့ အသင်္ကတ ဓါတ် တစ်ခု ဖြစ်သွားဘို့ပါပဲ) ကွင်းထဲကစကားကဘယ်ကရပါသလဲ။
သမီးကို ရှင်းခဲ့တာမှာ ပရမတ်ဘုရား ဆိုတာ အသင်္ကတ ပရမတ်ဓါတ်သဘော ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ရှင်းပြီးသားပါ။ စကားလုံး တိုင်းကို သေချာအောင် ဖတ်ပေါ့။
စာမဖတ်ဘဲ ရမ်းနေတာ သမီးရဲ့ ဘာသာရေးဖြစ်ပါသလား- သေချာအောင် အရင်ဖတ်လိုက်ပါ။
သမီးက အထင်တွေ ကို အမှန်လို့ သတ်မှတ်နေတာကိုး။ သမီးက- အရာရာဟာ အနိစ္စချည်းပဲလို့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာမှာ သွန်သင် တယ်လို့ ထင်ထားတာမဟုတ်လား- ဦး အပေါ်မှာ ထောက်ပြထားပါပြီ။- အမှန်ကို လည်း ကြည့်လိုက်ပါဦး။ အခုလည်း သမီး လက်လှမ်းမှီတဲ့ အဆင့်များ ဆိုတာ မှားနေသေးတယ်လို့ ဦး ပြောပါရစေ။
အထင်တွေ မဟုတ်ပါ။ အနိစ္စမဟုတ်တဲ့အရာကိုပြပါဦး။
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့ပြီ သေချာအောင် အရင်ဖတ်လိုက်ပါ။-
တေဇော ဆိုတာ အပူဓါတ်သာ ဖြစ်တယ်။ အလင်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာသမီး မသိဘူး ထင်တယ်။ အပူဟာ အလင်းကို ပေးနိုင် ပေမယ့်- အလင်းတိုင်းက အပူဓါတ်ကို မပေးဘူးဆိုတာလည်း သမီး မသိဘူး ထင်ပါတယ်။ ထားပါတော့- ဒီအချက်မျိုး သမ္မာ ကျမ်းရဲ့ ကမ္ဘာဦးကျမ်းမှာ ပြောလို့ ခရစ်ယာန်ပညာရှင်ကြီးတွေကိုယ်တိုင် သူတို့ ကျမ်းစာကို သူတို လက်မခံနိုင်တာ သမီး မသိ ဘူးထင်ပါတယ်။ လေ့လာပါဦး။
ဒီလောက် မလေ့လာနိုင်ရင်လည်း- သမီးပြောသလို အရာတိုင်းက အနိစ္စ (မမြဲခြင်း) ဖြစ်တယ် ဆိုပြီး ပိဋကတ်မှာ များစွာ ပြော သလို- မြဲနေတဲ့ အရာ ပါဠိလို (နိစ္စ) တွေ ရှိတယ် ဆိုတဲ့ ဆန့်ကျင့်ဘက် စကားကိုလည်း ပြောပြန်တယ်။ ဘယ်အရာက အမှန် ဖြစ်သလဲ-- ဆိုတာတော့ သမီးပဲ ဆုံးဖြတ်ပေါ့။ အပေါ်က ပေးထားတဲ့ ကျမ်းချက်ကို အရင် လေ့လာလိုက်ပါ။ သေချာအောင် ဖတ်လိုက်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက် ၂ ခုမှာ တစ်ခုပဲ မှန်နိုင်ပါမယ် ဆိုတဲံ အသိလောက်လည်း ရှိဘို့ လိုပါမယ်။
သမီးက မျှော့ကောင်လို သဘောမျိုး ဖြစ်နေပြီ ဆိုတာလည်း သမီးကိုယ်သမီး သတိထားပါဦး။ သမီးကိုယ်တိုင်က ပိဋကတ်က ပြောတာ အကုန်မှန်တယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်နော်။ အခု အကုန်မဖတ်ရသေးဘူး ပြောနေပြန်တယ်။ အကုန်မဖတ်ရသေးဘဲ ဘယ်လိုလုပ် အကုန်မှန်တယ်လို့ ၀န်ခံနေပါသလဲ။ အတော့ကို လွဲချော်နေပြီ ဆိုတာလည်း ဆင်ခြင်ပါဦး။
သေချာတာက သမီးအပါအ၀င် ဦးဆွေးနွေးဘူးတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာများထက်တော့ စာဖတ်ဘူးပါတယ်။ (သမီး အပါအ၀င်လို့ ပြော ရခြင်းက သမီးဟာ ပိဋကတ်ကို စုံအောင် မဖတ်ဘူးသေးဘို့လို့ သမီးကိုယ်တိုင် ၀န်ခံထားလို့ပါ။)
ဒါမျိုး ပိဋကတ်မှာ ဖေါ်ပြတဲ့ ကိုယ်တော်ဂေါတမလည်း လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဆို ပိဋကတ်လာ ကိုယ်တော်ဂေါတမက အင်မတန် အင်အားချိနဲ့ ဗုဒ္ဓအယူအဆကို သမီးတို့ရဲ့ ဆရာစဉ်ဆက်ကို သင်သွားတယ်လို့ သမီးယုံကြည်ပါ သလား။ ကိုယ်တော် ဂေါတမ ကိုယ်တိုင်က ဟိန္ဒူအယူအဆ၊ ရောမအယူအဆပေါင်းများစွာကို မှီပြီး အတုယူပြီး ပြောသွားတာချည်းပါပဲ- သမီး။ လေ့လာ လိုက်ပါဦး။ ကျမ်းညွှန်းပေးရမှာ များလွန်းလို့ ပိဋကတ်ကိုပဲ အရင်လေ့လာ လိုက်ပါ။
သမီးကို ရှင်းခဲ့တာမှာ ပရမတ်ဘုရား ဆိုတာ အသင်္ကတ ပရမတ်ဓါတ်သဘော ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ရှင်းပြီးသားပါ။
ကုရ်အာန်ကျမ်း အညွှန်းပြောပါ ဦး
အင်္ဂုတ္ထိုရ်၊ ၄ ယောဓာဇီ၀၀ဂ်၊ ဥပ္ပါဒါသုတ်။ ကိုကျွန်မ ဖတ်လည်း ဦးရဲ့ အယူအဆနဲ့ ဆန့်ကျင်နေမှာပဲ။
ဒါကြောင့် ကိုယ်တော်ဂေါတမကိုယ်တိုင် အနိစ္စမဟုတ်ကြောင်း ဘယ်လိုငြင်းတယ်လို့ ဦးယူဆပါသလဲ
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့ပြီ သေချာအောင် အရင်ဖတ်လိုက်ပါ။
မပြနိုင်ရင် မပြနိုင်ဘူးလို့ ဝန်ခံပါဦး။
ကျွန်မပိဋကတ်ကို တစ်ခါမှမဖတ်ဖူးဘူး၊ ပိဋကတ်ကနေ ရဟန္တာအရှင်များ ကောက်နှုတ်ထားတဲ့ အလုပ်ပေးတရား စာအုပ် တွေကိုပဲ ဖတ်တယ်လို့ ဦးကိုပြောပြီးသားပါ။
ဦးဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်း၊ အစ္စလာမ်ကျမ်းနှစ်ခုလုံးကို ဖတ်ပြီး အစ္စလာမ်ကျမ်းမှာ ဦးနားမလည်တဲ့ အပိုင်းကို ဗုဒ္ဓဘာသာ ကျမ်းထဲက စာသားနဲ့ ဖြည့်စွက်နားလည်တော့ ဦးကိုယ်ဦး ဘယ်လမ်းသွားနေတာကို ဆင်ခြင်ပါအုံး။
သမီးက ဘာမှ မသိတာဘဲ၊ ဘယ်ကျမ်းကို ပြနေရဦးမှာလဲ။ သမီးသိတာက ဘာပြောပြော ကန့်လန့်ခံမယ်၊ ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ ကန့်လန့်ခံတဲ့ အသိပဲ ထားနေတာကိုး။ ဘာမှလည်း မသိ၊ ဘာမှလည်း မတတ်ဘဲ--ဘယ်သူပြောပြော ကန့်လန့်ခံရမယ်လို့ သမီးက်ိန်းဆိုက်နေတဲ့ ပထမဈာန်အဆင့်က အသိဉာဏ်ဖွင့်ပေးထားသလား- သိချင်ပါတယ်။
အမှန်ကို မျက်လုံးနဲ့ မြင်မှာ စိုးလို့ အဲ့ဒီ စာပိုဒ်ကို မဖတ်ရဲတာ မဟုတ်လား။
ကျမ်းချက်ပေးထားပါလျှက်- အမှန်ကို မျက်လုံးနဲ့ မြင်မိမှာစိုးလို့ မဖတ်ရဲဘူး ပြောလိုက်ပါ။ ကိုယ်တော်ဂေါမတောင် အဲ့လို လူ မျိုးကို တရားမပြဘူး- (အင်္ဂုတ္ထိုရ်- ဥပေါသထသုတ်) ဦးက ကိုယ်တော် ဂေါတမထက် စိတ်ရှည်ပြီး- သူညွှန်ပြတဲ့ ဘာသာထက် မြင့်မြတ်တဲ့ သာသနာကို ယုံကြည်လို့သာ အခုလို ကျမ်းချက်တွေ အတိအကျထုတ်ပြ- အချိန်ပေး တရားပြပေးနေတယ် ဆို တာ သမီး သိစေလိုပါတယ်။
ဦးပြောခဲ့ပြီ ဘာသာတစ်ခုနဲ့ တစ်ခု နှိုင်းယှဉ်ပြီး ပရိတ်သပ်ကို ရှင်းပြဟောပြောတဲ့ အလုပ်ကို ကိုယ်တော် ဂေါတမကိုယ်တိုင် လုပ်ခဲ့တာပါလို့။ သူ့ကို တရားဟောနည်း သခိုး၊ သူများဘာသာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြောတဲ့ တရားခိုးချသူလို့ သမီးခံယူရင်- ဦးကိုလည်း အဲ့ဒီ အတိုင်းဘဲ စွပ်စွဲလိုက်ပါ။
(သမီးနဲ့ ဦး ဆွေးနွေးခဲ့မှု မှန်သမျှကို အစက----------- အခုထိ ဦး ပို့စ်တင်လိုက်ပါမယ်။ သမီးနဲ့ ဦးကြားမှ အဖြေထွက်မှာ မဟုတ်ပါ။ ဒီတော့ စာဖတ်ပရိတ်သပ်က ဆင်ခြင်ပါစေပေါ့။- ကာယကံရှင် သမီးဆီက ခွင့်ပြုချက် တောင်းတာပါ။ တကယ်လို့ သမီး သဘောမတူဘူး ဆိုရင်တော့-- သမီး အတွက် ဦး ဆက်လက် အချိန်မပေးနိုင်တော့ပါ။)
“အဘဘုရားမရှိဘူးလို့ ကိုယ်တော်ဂေါတမ ပြောတဲ့အကြောင်း” ကို ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းမှာ လိုက်ရှာခိုင်းနေတဲ့သဘောနဲ့ အ တူတူပါပဲ ဦး။ “ပရမတ်ဘုရား ဆိုတာ အသင်္ကတ ပရမတ်ဓါတ်သဘော” ဆိုတာ ဦးရဲ့ စကားအရ ကုရ်အာန်ကျမ်းမှာမပါဘဲ ဦးကိုယ့်အထင်နဲ့ကိုယ် ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းထဲက စကားနဲ့ နားလည်လိုက်တယ်ဆိုတာ ထင်ရှားနေပါတယ်။
ကျွန်မ ကြောက်ရင် ဦးကိုစာပြန်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး ဦး။ ဦးသာ ငါဟာအနိစ္စဘာလားလို့ လက်ခံဖို့ကြောက်ပြီး တစ်နေ့ တစ်နေ့ သေဖို့နီးနီးလာတဲ့ အမှန်တရားကို လိမ်လည်ပြီး ပရမတ်ဘုရားဆီ နီးလာတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လှည့်စားနေတာ ပါ။
အချိန်မရှိရင် Scan တင်လိုက်ပါဦး။ ကျွန်မ ပါဠိလိုမတတ်လို့ ဘာသာပြန်ကိုပဲတင်ပါ ဦး။
ကျွန်မပြောနေတာ ဦးအတွက်ပါ ဦး။ ဘာသာတရားတစ်ခုရဲ့ အသက်ဟာ အယူအဆပါ ဦး။ ပါဠိစာတတ်ပြီး ကျမ်းစာ ဖတ် နိုင်တိုင်း အဲဒီဘာသာရဲ့ အယူအဆမှန်ကို သိပြီလို့မပြောနိုင်ပါ။ သိတဲ့ဘာသာဝင်က ဒီပါဠိစကားလုံးကို ငါတို့က ဒီလိုယူဆပါ တယ်ပြောလည်း လက်မခံဘဲ စကားလုံးကို မောင်ပိုင်စီးတယ်တွေပြောလိုပြော ကိုယ်ထင်ချင်သလိုထင်ပြီး သာယာနေ တော့ ခက်ပြီပေါ့။
ဦးသာ ဘာသာရေးရဲ့အယူအဆကို ပါဠိစာတွေထက် ပိုတန်ဖိုးထားရင် တခြားဘာသာဝင်တွေကို ရှင်းပြတဲ့နေရာမှာ အဲဒီ ဘာသာဝင်တွေယူဆတဲ့ အတိုင်းစကားလုံးတွေကိုသုံးမှာပါ။ တရားခိုးချတယ်ဆိုပြီး စိတ်ဆိုးစရာမရှိပါ။ အမှန်ပြောရရင် တစ်ခါတစ်လေ ဦးသုံးစွဲပြီးရှင်းပြတဲ့ စကားလုံးက ဝါကျနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ ရီမောစရာတောင် ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ ဦး သာ အစ္စလာမ်ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းကစကားလုံးတွေနဲ့ရောက်အောင် သွားကြည့်ပေါ့ ဦး။
ပို့စ်တင်စရာမလိုပါ ဦး.. ကျွန်မ ဦးဆီစာရေးတာ ကိုယ်ပထမ မဂ်ကိုရကြောင်းကြော်ငြာချင်လို့မဟုတ်ပါ။ အင်္ဂုတ္ထိုရ်၊ ၄ ယော ဓာဇီ၀၀ဂ်၊ ဥပ္ပါဒါသုတ် တို့ရဲ့ အယူအဆမှန်ကို မသိချင်တော့ရင် ဆက်လက် အချိန်ပေးစရာမလိုတော့ပါ ဦး။
သမီးငယ်ငယ်က သူငယ်တန်း (မူကြို) စာ စသင်တော့တော့၊ ဆရာမ (ဆရာ)က ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်မှာ “က၊ ခ၊-- ” တွေ ရေးပြတယ်- အဲ့ဒီအခါ သမီးက က ကြီး ခ ခွေး ဆိုတဲ့ စာလုံးကိုကြည့်ပြီး မှတ်ဘို့ (ကျက်ဘို့) ကြိုးစားသလား၊ သို့မဟုတ် အဲ့ဒီ စာလုံးကို မကြည့်ဘဲ ကျောက်သင်ပုန်းကိုပဲ ကြည့်ပါသလား။
အင်္ဂုတ္ထိုရ်၊ ၄ ယောဓာဇီ၀၀ဂ်၊ ဥပ္ပါဒါသုတ် တို့ထဲက ဦးယူဆတဲ့ ကိုယ်တော်ဂေါတမ အနိစ္စမဟုတ်ကြောင်းပြောတယ် ဆိုတဲ့ အပိုင်းကို ပို့လိုက်ပါ။ ကျွန်မ သိထားသလောက် ပြောပြပါ့မယ်။ ကျန်တာတွေနဲ့အချိန်ကုန်မနေပါနဲ့တော့ဦး။
သမီးကို ကျမ်းညွန်းပေးထားပြီပဲ။ ကိုယ်တိုင်ဖတ်ပေါ့။ သမီးငြင်းနိုင်ရင် ငြင်းပေါ့။- ငြင်းတော့မှ ဦးဖြေရှင်းပေးမယ်။ သမီး ကိုယ်တိုင် ဘာကိုမှ မဖတ်ဘဲ- သူများ စကားလုံးကို ဝေါဟာရ ပြောင်းပြန်ငြင်းတဲ့ ပညာမျိုးတော့- မကောင်းဘူးလေ။ ဦး အ တွက်လည်း အချိန်ကုန်ပါတယ်။ သမီးကိုယ်တိုင် အဲ့ဒီအပိုဒ်ကို ကူးလိုက်၊ ပြီးရင်- အမြဲတည်နေခြင်း မဟုတ်ကြောင်း- ငြင်း လိုက်ကြည့်ပါ။
-ဟုတ်ကဲ့ အမှန်မသိရဲရင် မသိရဲဘူး ပြောပါဦး။ ကျမ်းတွေလက်ထဲရှိပြီး Scan မတင်ရဲတာ ဦးပါ။ ကျွန်မ ဦးလို ကျမ်းသမား မဟုတ်လို့ ကျမ်းမရှိတာနဲ့ ဒီလို ပညာမျိုး သုံးတာတော့- မကောင်းဘူးလေ ဦး။
စိတ်ကူးယဉ်သမား မလေး ဆိုတာ ဦးသိပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်နေတာကို ဘ၀င်ကျနေရင်လည်း ကိုယ့်ဘ၀င်နဲ့ကိုယ် ပီတိ ဖြစ်နေမှာပေါ့။
ဦးလည်း တကယ်ကလေးဆန်တာပဲဆိုတာ သိလိုက်ပါပြီ။ လက်တွေ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲ မေးချင်တယ် .... ဦး သေ တော့ ဦးဖတ်တဲ့ကျမ်းက ဦးနဲ့အတူလိုက်သေမလား ဆင်ခြင်ပါ ဦး။
သေခြင်းကို လက်ခံသူဟာ ဘာသာရေးဝန်ဆောင် မဟုတ်သေးဘူး ဆိုတာ သမီးရဲ့ ဆရာတော်က သမီးကို မသင်ဘူးလား။
ဘာသာရေးထက် ပိုပြီးလေးနက်တဲ့ အမှန်တရားပါဦး။ သေခြင်းတစ်ခုထဲ အနိစ္စ မဟုတ်ပါ။ ဒီလောကမှာ အခြေအနေတစ်ခု ဟာ ဘယ်တော့မှ မတည်မြဲပဲပြောင်းလဲပြီး တစ်ခုနေရာမှာ နောက်တစ်ခုနဲ့ အမြဲအစားထိုးနေတာကို အနိစ္စလို့ပြောတာပါ။ အနိစ္စ (မမြဲတဲ့သဘော) ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ၊ အစ္စလာမ်တွေ မခွဲခြားပါဘူး။ ဒီလောကမှာ ရှိသမျှအရာအားလုံးဟာ အနိစ္စပါပဲ။ ကိုယ်တော်ဂေါတမပြောခဲ့တဲ့ အနိစ္စဆိုတာကို ကျမ်းမှာရှာနေဖို့ မဟုတ်ပါ။ မိမိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မိမိကိုယ်မှာတင် ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ မိမိရဲ့အသုံးအဆောင်တွေ တဖြေးဖြေးဟောင်းနွမ်းလာတယ်ဆိုတာ အသစ်အခြေအနေကို ဟောင်းနွမ်း တဲ့ အခြေအနေက အစားထိုးတာ။ ဟောင်းနွမ်းလာလို့ ပြုပြင်လိုက်ရင် သစ်သွားတယ်။ ဟောင်းနွမ်းတဲ့ အခြေအနေကို သစ် တဲ့အခြေအနေက အစားထိုးတာပါ။ လူတွေတဖြေးဖြေးအိုလာတာက နုပျိုခြင်းဆိုတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို အိုမင်းခြင်းဆိုတဲ့ အခြေအနေက အစားထိုးနေတာပဲ။ သေဆုံးခြင်းဆိုတဲ့ အခြေအနေကိုလည်း ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာနဲ့ အစားထိုးပါ တယ် ဦး။
သမီးက ရှိသမျှ အားလုံး အနိစ္စချည်း ပြောနေတယ်။ အဲ့လို ခံယူထားတယ်၊ သမီးမှာ အဖြေမထွက်နိုင်ဘူး။ အနိစ္စ ဆိုတာ တွေ ဖြစ် ပျက် ဆိုတာတွေဟာ အပေါ်ယံ အရေခွံ ဖြစ်တယ်။ တနည်းအားဖြင့် နိစ္စ ဆိုတဲ့ နောက်ခံပေါ်မှာ ရေးခြစ်တဲ့ စာလုံး လေးတွေလို ဖြစ်တယ်။ ကျောက်သင်ပုန်း တစ်ချပ်ပေါ်မှာ- ဆရာတစ်ယောက်က ၁ + ၁ = ကို ရေးပြီးကလေးတို့ရေ ဒီမှာကြည့် ၁ နဲ့ ၁ ပေါင်းရင် ဘယ်လောက် ရသလဲမေးတော့- ကလေးတွေက ၁ နဲ့ ၁ ကို ပေါင်းပြီး- ၂ လို့ အဖြေပေးမယ်။ (တတ်ပြီး လူကပေါ့။- လုံးဝမှ မသင်ရသေးတဲ့ ကလေးကတော့ ဘယ်သိမလဲ)။ ဆရာမက ၁+ ၁ ကို ဖျက်လိုက်တယ်။ ၁+၂ ကို ရေးပြန်တယ်။ ကလေးတွေကို မေးပြန်တယ်။ ဒီလိုဒီလို နဲ့ ၁+ ၉ ထိ ဖြစ်လာမယ်။ နောက်ထပ် အများကြီးရေး မယ်။ ရေးနေသမျှသော အရာတွေဟာ ဖြစ်လိုက် ပျက်လိုက်ပဲ။ ကလေးများကလည်း အဲ့ဒီ ဖြစ်လိုက်၊ ပျက်လိုက်မှာပဲ အာရုံ ငြိတွယ်နေတယ်။ အဲ့ဒီ ဖြစ်လိုက် ပျက်လိုက် ဆိုတဲ့ အရာများက (ဆရာမ မြေဖြူဖျက်နဲ့ ပွတ်သပ်ဖျက်လို့ မပျက်နိုင်တဲ့) နောက်ခံ ကျောက်သင်ပုန်းကြီးပေါ်မှာ အရိပ်ပေါ်လာတဲ့ အရာများသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ- ကလေးတွေထဲက သတိထားမိသူ က မရှိသလောက်ပဲ။ သူတို့ အာရုံငြိနေတာက ဖြစ်ပျက် ဖြစ်နေတဲ့ စာသားပါ။ ဖြစ်ပျက်များ တည်ခွင့်ရတဲ့ နောက်ခံ တစ်ခု ကို သူတို့မှ မသိဘဲ။ အကယ်၍ အဲ့ဒီဖြစ်ပျက် လေးက နောက်ခံ မရှိရင် တည်လို့ မရဘူး (လေဟာနယ်ထဲမှာ စာရေးပြလို့ မရဘူး) ဆိုတာ- ဆရာမကိုယ်တိုင် ရော၊ တပည့်တွေကိုယ်တိုင်ရော သတိမှ မထားမိတော့-၊ နောက်ခံ တည်နေတဲ့ အရာရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်း မေ့နေတော့တာပေါ့။
ကဲ ဓမ္မတာ အားဖြင့် တည်နေတဲ့ အရာ ရှိနေတယ် ဆိုတာ သမီးကိုယ်တိုင် ဘာသာပြန်ကြည့်လိုက်ပါဦး-
ဥပ္ပါဒါ ၀ါ ဘိက္ခဝေ တထာဂတာနံ အနုပ္ပါဒါ ၀ါ တထာဂတာနံ ဌိတာဝ သာ ဓာတု ဓမ္မဋ္ဌိတတာ ဓမ္မနိယာမတာ။ သဗ္ဗေ သင်္ခါရာ အနိစ္စာ တံ တထာဂတော အဘိသမ္ဗုဇ္ဈတိ အဘိသမေတိ၊ အဘိသမ္ဗုဇ္ဗ္ဈိတွာ အဘိသမေတွာ၊ အာစိက္ခတိ၊ ဒေသေတိ ပညာ ပေတိ ပဋ္ဌပေတိ ၀ိဝရတိ ၀ိဘဇတိ ဥတ္တာနီကရောတိ “သဗ္ဗေ သင်္ခါရာ အနိစ္စာ” တိ။----------------- အဂုင်္တ္ထိုရ်ပါဠိ၊ ၄ ယော ဓာ ဇီ၀၀ဂ်၊ ၄ ဥပ္ပါဒါသုတ်
အဲ့ဒီ ဖြစ်လိုက် ပျက်လိုက် ဆိုတဲ့ အရာများက (ဆရာမ မြေဖြူဖျက်နဲ့ ပွတ်သပ်ဖျက်လို့မပျက်နိုင်တဲ့) နောက်ခံ ကျောက်သင် ပုန်းကြီးပေါ်မှာ အရိပ်ပေါ်လာတဲ့ အရာများသာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ- ကလေးတွေထဲက သတိထားမိသူက မရှိသလောက်ပဲ။
ဒီနေရာမှာ ကျောက်သင်ပုန်းကြီးက ဆရာမ ၁+၁ ရေးတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ၁+၂ ရေးတဲ့ အခြေအနေကမတူတော့ပဲ အို ဟောင်းသွားပါပြီဦး။ ဒီလိုပဲ ၁+၂ ရေးတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ၁+၃ ရေးတဲ့ အခြေအနေကမတူတော့ပဲ ထပ်ပြီးအိုဟောင်းသွားပါ ပြီ။ ဒီသဘောအတိုင်း ၁+၉ အထိပါပဲ။ ဒီမမြဲတဲ့လောက ရဲ့အရာအားလုံးမှာ သက်တမ်းရှိပါတယ် ဦး။ ဥပမာ computer ရဲ့ သက်တမ်းက ၅ နှစ် ဆိုကြပါစို့။ အဲဒီ computer ကို ဦးသုံးသုံးမသုံးသုံးသူဟောင်းမှာပါ ပဲ။ ထားပါတော့ ဆရာမက computer မှာ ၁+၁ စာရိုက်ပြတာ ၂ စက္ကန်ကြာတယ် ဆိုရင် ဆရာမရော၊ ကျောင်းသားရော၊ computer ရော စာရိုက်ပြီး ချိန်မှာ ၂ စက္ကန့် ဖိုး အိုသွားပါပြီ ဦး။
ဖြစ်ပျက်များ တည်ခွင့်ရတဲ့ နောက်ခံ တစ်ခုကို သူတို့မှ မသိဘဲ။ အကယ်၍ အဲ့ဒီဖြစ်ပျက် လေးက နောက်ခံ မရှိရင် တည်လို့ မရဘူး
ဖြစ်ပျက်များ တည်ခွင့်ရဖို့အတွက် နောက်ခံမလိုပါဘူး ဦး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အစားထိုးတာ အရမ်းမြန်လို့ တရစပ်ဖြစ် နေသလို ထင်ရတာပါ ဦး။
ဒီလောက်ဆို “သဗ္ဗေ သင်္ခါရာ အနိစ္စာ” ကို ဦးသဘောပေါက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။
အိုတယ်- ပျိုတယ် ဆိုတာ ဘယ်အပေါ်မှာ မူတည်သလဲတောင် သမီး မသိဘူးလား။ Time & Space တွေကို လေ့လာ လိုက်ဦးနော်။
သမီး ဉာဏ် ဒါအကုန်ပဲလား။ ဥပ္ပါဒါ ၀ါ ဘိက္ခဝေ တထာဂတာနံ အနုပ္ပါဒါ ၀ါ တထာဂတာနံ ဌိတာဝ သာ ဓာတု ဓမ္မဋ္ဌိတတာ ဓမ္မနိယာမတာ။ ကို သမီး ဘာသာပြန်လိုက်လေ။ မရိုးသားခြင်းက သမီးရဲ့ ဘာသာရေး၊ သမီး လိမ်ညာကြွားဝါထားတဲ့ ပထ မဂ် အဆင့်ဆိုတာ ဦးက သိနေပေမယ့်- ပိဋကတ်လာ ကိုယ်တော် ဂေါတမထက် သဘောထားကြီးလို့ သမီးကို ဆက်ပြီး ပြောပေးနေတာပါ။
သမီးမတတ်ရင် သမီး ဆရာတော်ကို ပြန်ခိုင်းလိုက်ပါ။ ကြိုက်သလို လိမ်ညာလှည့်စားပြီး ပြန်ပါလို့ ဆက်ပြော လိုက်ပါ။ ဒီ အပိုဒ်ကို ကမ္ဘာ့ ဘာသာတိုင်းမှာ ဘာသာပြန်ပြီးသား ရှိနေတယ်။ လိမ်ညာပြီး ဘာသာပြန်ရင်တော့ အဲ့ဒီ ဘာသာပြန်ကို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ကို စီစစ်ပေးပါလို့ ဖြန့်ချီပြီး မေတ္တာရပ်ခံရတော့မှာပါ။
ကျွန်မဆရာတော်ကို ပြန်ခိုင်းလည်း “ကြိုက်သလို လိမ်ညာလှည့်စားပြီး ပြန်တယ်လို့” ဦးပြောနေမှာပါပဲ။ ဦးမှ နားမလည် ဘဲကို။
အဲဒီတော့ ဦး နားလည်ထားသလို ပြန်ပြပါ။
ဒေါသတွေဖြစ်နေရင် အကျိုးမရှိပါဘူး ဦး။ ကျွန်မနဲ့ ဦး ဘာသာမတူတဲ့အတွက် အယူအဆကွဲတာ စိတ်ဆိုးစရာ မဟုတ်ပါ။
ဦးက ဦးရဲ့အယူအဆကို ယုံကြည်လို့ ကျွန်မကို ဦး သိသလို သိစေချင်တဲ့စေတနာနဲ့ ပြောတယ်ဆိုတာ သိပါတယ် ဦး။ ကျွန် မကလည်း အဲဒီသဘော အတိုင်းပါပဲ ဦး။
ကျမ်းညွှန်း အတိအကျရော ပါဠိပါ ပေးထားပြီးပြီ။ မြန်မာဘာသာပြန်ရော- ကမ္ဘာက ပြန်ထားတဲ့ အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်ရော ကို ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီလောက်မှ ၀ိရိယ မရှိရင် ရေသာခိုပြီး သူတစ်ပါး ဘာပြောပြော ပြောတဲ့စကားလုံးကို ဆန့်ကျင်ဘက်က ပြောမယ်ဆိုတဲ့ ကပ်ဖက်ဝါဒီ ဖြစ်နေပါမယ်။ ကပ်ဖက်ဝါဒီတွေကို ပိဋကတ်လာ ကိုယ်တော်ဂေါတမကိုယ်တိုင် တရားမဟော ဘူးဆိုတဲ့ အချက်ကို သမီးကို ပြောပြပြီးပါပြီ။ ဆွေးနွေးတာနဲ့ ကပ်ဖက်ခံတာ မတူဘူးဆိုတာ သမီးကိုယ်တိုင် သိမှာပါ။ ပျင်း ရိကပ်ဖက်ခံနေသူများက စိတ်ကူးယဉ်မှုမှာပဲ ဖက်တွယ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီလို လူစားမျိုးကို ကမ္ဘာ့ပညာရှင်တိုင်းက အသိ အမှတ်ပြုခြင်း မရှိပါ။ သမီး အဲ့ဒီလို လူစားမျိုးထဲမှာ ပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်း သမီးကိုယ်တိုင် သဘောပေါက်သင့်ပါ တယ်။
သမီးနဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့သမျှ၊ ဆွေးနွေးနေသမျှကို ဦး ပို့စ်တင်လိုက်ပါမယ်။ ကျန်သူများက ဆုံးဖြတ်ပါစေပေါ့။
ပို့စ်မတင်နဲ့လို့ ပြောပြီးသားပါ။ ကိုယ့်ဂတိကိုယ် တည်သင့်ပါတယ် ဦး။ ဦးရဲ့စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ကျွန်မအချိန် မ ပေးနိုင်ဘူး ဦး။
ကျွန်မ ဦးဆီ စာရေးတာ အနိုင်လိုချင်၊ အငြင်းပွားချင် လို့မဟုတ်ပါ။ အမှန်မြင်စေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ပါ။
ကိုယ်တော်ဂေါတမလက်ထက်က ပါဠိစာပေတွေဆိုတာ မပေါ်သေးပါဘူး ဦး။ ဦးသာ စာပေက အဓိကလား၊ အယူအဆ အမှန်က အဓိကလား၊ ဘယ်အရာက အဓိကလည်း ဆိုတာကို မဆင်ခြင်နိုင်တာပါ။ ဘာသာတရားအကြောင်း ဆွေးနွေးနေ တာပါဦး၊ ပါဠိစာပေ အကြောင်း၊ ဘာသာပြန် အကြောင်းဆွေးနွေးနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူများဘာသာရဲ့ ကျမ်းတွေကို ဖတ်ကာ ကိုယ့်ဘာသာရဲ့ အယူအဆတွေနဲ့ ကိုယ်ထင်ချင်သလိုထင်ရုံမက Web site ထောင်ပြီး သာသနာဖျက်နေတာ ဘယ်သူပါလဲ ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆင်ခြင်ကြည့်ပေါ့။
ကျွန်မတို့ဆွေးနွေးမှုကို ဒီမှာပဲ ရပ်လိုက်ပါပြီ ဦး။
မှတ်ချက် - ဆွေးနွေးမှု့အစမှ ပိုတ်စ့်များကို ခွဲတင်လာခဲ့ရာ ဆွေးနွေးမှု့နောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်မှ ပိုတ်စ့်မတင်ရန် မဇင်သူမင်းမှ ကန့်ကွက်လာပါသည်... (မဇင်သူမင်းအား အသိမပေးခဲ့မိ - မဇင်သူမင်းမှလည်း islammyanmar.com အား ၀င်ဖတ်ကာ မေးမြင်းခြင်းဖြစ်သဖြင့် ထိုစာမျက်နှာတွင် အမေးအဖြေများအား ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ရာ မဇင်သူမင်း ယခုလို ကန့်ကွက်လိမ့်မည် မထင်ခဲ့) ထို့အတွက်ကြောင့် ဦးဌေးလွင်ဦး၏ islammyanmar.com တွင် ဖော်ပြခြင်း မပြုတော့ဘဲ အစကနဦးမှ ပိုတ်စ့်များအား ခွဲကာ တင်လာသော ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ စာဖတ်ပရိသတ်များအား နောက်ဆုံးထိ ဖတ်နိုင်ရန် ပြန်လည် ဝေမျှပါသည်... မဇင်သူမင်းအားလည်း ယခုလို ဖော်ပြရခြင်းအတွက် တောင်းပန်အပ်ပါသည်....
Posted by A Muslim at 12:46 AM
Labels: ဘာသာခြား ဆွေးနွေးမှု့
Anonymous November 22, 2012 at 3:52 AM
အရာရာအလိုအတိုင်းဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်တွေဟာဘာကြောင့်မိမိကိုမယုံမကြည်စော်ကားမဲ့လူတွေအခြားဘာသာတွေရပ်တည်ပိုင်ခွင့်ပြုလဲသိလား။သူတို့ကြားပြဿနာပေါ်စေချင်လို့ပဲ ဘုရားအလိုကြဆက်ကိုက်ကြပါ မမြင်မသိမကြားရတာတွေယုံပြီး မြင်ရကြားရသိရတဲ့ သက်ရှိအခြင်းခြင်း မကြင်နာဘဲ ကိုယ့်ဝါဒသာအမှန် ငြင်းခုန်ကြသူအပေါင်းတို့ ။ငါတို့ကတော့သတ်ကြတာ မကိုက်ဘူး။
Anonymous November 22, 2012 at 4:05 AM
ဘာသာတိုင်းကအခြားဘာသာတွေရဲ့မဆီလျှော်မှုတွေကျကျနနသင်ပေးပြီးကိုယ့်ဝါဒအားနည်းချက်ကိုတချက်တောင်မရှာဘူးလေ။ပြီးတော့အခြားဘာသာရဲ့တရားအားလုံးကိုသိနေသလိုလိုနဲ့ အနှစ်သာရမရှိလို့ဆိုတယ်။ရိုးနေပါပြီဘာသာရေးဆရာတို့ လက်တွေ့ဘဝမှာပဲ အချင်းချင်းတတ်နိုင်သမျှမသေခင်စောင့်ရှောက်ကြပါ ငါတို့လိုမမိုက်ပါနဲ့
Anonymous November 23, 2012 at 1:37 AM
ဗုဒ်ဓ သမီးကိတ်စ ပြန်တောင်းပန်ပါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိပ်သိနေပြီလို့ခင်ဗျားဆရာတွေ ဖြီးထားတိုင်းမယုံသင့် တော့ဘူး
ဓမ်မဟောင်းသစ်နဲ့ ဗုဒ်ဓစာပေတွေဟာ 5နှစ်ကနေ10နှစ်လောက်လေ့လာရင်တောင် နှစ်မျိုးလုံးပြီးဖို့မလွယ်ဘူး ဒါပေမဲ့လူစကားလူယုံပေါ့
Anonymous November 23, 2012 at 2:13 AM
အရာရာဟာ အနိတ်စမဟုတ်ဘူး သဗ်ဗေ သင်ခါရာ အနိတ်စာ ဆိုတာက အကြောင်းတရားတို့ကိုအမှီပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာသော အရာတို့သည် မမြဲကုန် လို့ဆိုတာ
သဗ်ဗေ ဓမ်မာ အနတ်တာ ဆိုတာမှ အရာရာသည် ငါမဟုတ် ငါ့ဥတ်စာမဟုတ် လို့ ဥပ်ပါဒ ပါဠိတော်မှာဆိုထားတာ မင်းက တကယ်ရှိတဲ့ ခန်ဓါတွေကို သတိနဲ့ ကြည့်ရင် ဒါတွေ တွေ့လာရုံပျဲတရားစခန်းဝင်ပြီး ဆရာတော်တွေနဲ့ ပဲ ၀ါဒဖလှယ် ပါ မသိတဲ့လူတွေကို ဆရာလုပ်နေယုံနဲ့ကျေနပ်နေရင် သူတို့ ဘာသာရဲ့ တရားသိသူတွေကိုမယှဉ်နိုင်လို့ ယုတ်မာတဲ့နည်းနဲ့ သာသနာပြုနေသလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်
ဥပမာ ဘုရားရဲ့ သမီးလိုပေါ့ မင်းကိုငါတို့ ရှင်းပြီးပြီဆိုတော့ သူတို့ကိုပြန်တောင်းပန်လိုက်နော် မင်းရဲ့ဆရာကလား မင်းကလား မသိ ကောက်ကျစ်နေပြီသတိထားပါ အော်စစ်ပွဲမှာ မတရားတာမှမရှိပဲ
Anonymous November 27, 2012 at 10:18 PM
အော်ဒါနဲ့ဗုဒ္ဓဟောတာတွေမှာ မူလအကြောင်းဆိုတာမရှိဘူး အကြောင်းတရားတစ်ခုသည်ပင်အခြားအကြောင်းတရားများကိုအမှီပြု၍ဖြစ်လာရတာ ဒီလိုကြောင့်သံသရာလည်နေတာပေါ့ ဒါကထွက်ဖို့က ခေါင်းမီးလောင်သလိုပိုအရေးကြီးတယ် ထာဝရဖန်ဆင်းရှင်မရှိတာ မိစ္ဆာအမြင်၆၂မျိုးမှာကြည့်ပေါ့ ငါ့အမြင်က စွယ်တောာ်အကြောင်းမှာဖတ် ဗုဒ္ဓဝါဒကို မင်းထင်သလိုပြော ဒါပေမဲ့ အစ္စလမ်သာသနာရဲ့မိခင် သမ္မာကျမ်းတွေကိုမစော်ကားနဲ့ မိုဟာမဒ်က ဒီကျမ်းတွေတခြား ဝါဒတွေနဲ့ ကိုယ့်အမြင်တွေရောသမမွှေပြီး ကို့ဘာသာနောက်ဆုံးတမန်လို့ပြောတာ ထင်ရှားတာကယေရှုကို နောက်ပို့ အီစာတမန်လို့ပြော
minkhaung April 17, 2013 at 5:38 AM
အော် ဗုဒ္ဓစာပေရဲ့ အနှစ်သာရ စကားတစ်လုံးရဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို နကန်းတစ်လုံးမှ မသိတဲ့ သူနဲ့ မ္ဒှတရားဓမ္မ ဆွေးနွေးမိခြင်းရယ်လို့......